အမူအကျင့်စွဲလမ်းမှုဆိုင်ရာတတိယနှင့် ၄ ကြိမ်မြောက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာညီလာခံမှသင်တို့၏ ဦး နှောက်သည်သင့် ဦး နှောက်
အပြုအမူစွဲလမ်းမှုဆိုင်ရာအဆင့် ၃ နှင့် ၄ ကြိမ်မြောက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကွန်ဖရင့်မှလာမည့်လေ့လာမှုများ
porn အသုံးပြုခြင်းနှင့်လိင်စွဲလမ်းနှင့်ပတ်သက်သောအောက်ပါ abstraction မှခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည် အပြုအမူစွဲမတ်လ 3-14, 16 အပေါ် 2016rd အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာညီလာခံ, နှင့် အပြုအမူစွဲဖေဖော်ဝါရီလ 4-20, 22 အပေါ် 2017th အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာညီလာခံ။ တင်ဆက်သူအများစုဟာ abstraction နောက်ဆုံးမှာ peer-ပြန်လည်သုံးသပ်ဂျာနယ်များထုတ်ဝေလျက်ရှိသည်။
အင်တာနက်ကညစ်ညမ်းစွဲ: သီအိုရီမော်ဒယ်များ, အမူအကျင့်ဒေတာနှင့် neuroimaging တွေ့ရှိချက်
Duisburg-အက်ဆင်း, Duisburg, ဂျာမနီတက္ကသိုလ်
နောက်ခံသမိုင်းနဲ့ရည်ရွယ်ချက်: အင်တာနက်အပြာစာပေစွဲစွဲစွဲလမ်းမှု (IPA) သည်အင်တာနက်စွဲလမ်းမှုအမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်သည်။ မူးယစ်ဆေးဝါးမှီခိုမှုသုတေသနအရမူးယစ်ဆေးစွဲခြင်းကိုမိမိဆန္ဒအလျောက်အပန်းဖြေမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုမှမူးယစ်ဆေးဝါးရှာဖွေသည့်အလေ့အထသို့ကူးပြောင်းခြင်းအဖြစ်ရှုမြင်နိုင်သည်ကိုကောင်းစွာသိထားသည်။ prefrontal cortical မှမူးယစ်ဆေးဝါးရှာဖွေခြင်းနှင့်သိမ်းဆည်းခြင်းအပေါ်ထိန်းချုပ်မှုမှခွဲစိတ်ကုသမှုထိန်းချုပ်ခြင်းသို့ကူးပြောင်းခြင်း (neuritt & Robbins) , 2015) ။
နည်းလမ်းများ: ဤသဘောတရားများကိုမကြာသေးမီကယေဘုယျအားဖြင့်အင်တာနက်စွဲလမ်းမှုနှင့် IPA သို့လွှဲပြောင်းပေးခဲ့သည်။ ဥပမာအားဖြင့်မကြာသေးမီကထုတ်ဝေခဲ့သောအင်တာနက်စွဲလမ်းမှုဆိုင်ရာသီအိုရီပုံစံနှစ်ခု (Brand et al ။ , 2014) နှင့်အထူးသဖြင့်အင်တာနက်ဂိမ်းကစားခြင်းဆိုင်ရာရောဂါ (Dong & Potenza, 2014) တွင်၊ သိမြင်မှုဖြစ်စဉ်များနှင့်တိကျသောအင်တာနက်နှင့်သက်ဆိုင်သောအချက်များအပေါ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုများသည်အရေးကြီးသည်ဟုသတ်မှတ်သည်။ စွဲလမ်းအပြုအမူ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု။ ဤရွေ့ကားမော်ဒယ်များ PA ဆိုပြီးများ၏အခြေအနေတွင်စုံစမ်းစစ်ဆေးလျက်ရှိသည်။
ရလဒ်များ: အမူအကျင့်ဒေတာ cue-reactivity ကိုနှင့်တဏှာ: IPA နှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီအတွက်သရုပ်ပြနိုင်ဖေါ်ပြခြင်းသီအိုရီယူဆချက်ကိုထောကျပံ့။ ဒါ့အပြင်ညစ်ညမ်းပစ္စည်းနှင့်အတူရင်ဆိုင်ခံရသည့်အခါအမှုဆောင်လျှော့ချခြင်းနှင့်လျှော့ချ inhibitory ထိန်းချုပ်မှုညစ်ညမ်း၏စားသုံးမှုအပေါ်ထိန်းချုပ်မှုတစ်ခုဆုံးရှုံးမှုကြုံနေရ၏ဖြစ်နိုင်ခြေကိုတိုးမြှင့်။ functional neuroimaging တွေ့ရှိချက်အင်တာနက်ကိုဂိမ်း Disorder နှင့်အခြားအမူအကျင့်စွဲလမ်းအဖြစ်ဥစ္စာမှီခိုနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီအတွက်သတင်းပို့သူတို့နှင့်အတူနှိုင်းယှဉ်နေသော: IPA ၏တိကျသောဦးနှောက်ဆက်စပ်မှု, အကြံပြုအပ်ပါသည်။ အထူးသဖြင့် ventral striatum, ဆုလာဘ်မျှော်လင့်နဲ့ဆက်စပ်နေတဲ့ဒေသ: IPA နှင့်အတူဘာသာရပ်များအတွက်အကဲဆတ်သောညစ်ညမ်းပစ္စည်းနှင့်အတူထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်မှုတုံ့ပြန်မှု။
ကောက်ချက်: တည်ဆဲတွေ့ရှိချက် IPA: အင်တာနက်ကိုဂိမ်း Disorder နှင့်အမူအကျင့်စွဲလမ်း၏အခြားအမျိုးအစားများနှင့်အတူနှိုင်းယှဉ်ဖြစ်သည့်အင်တာနက်စွဲတစ်ဦးသတ်သတ်မှတ်မှတ်အမျိုးအစားကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။
အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေအတွက်မက်လုံးပေး salience နှင့်အသစ်အဆန်း
ကင်းဘရစ်, ကင်းဘရစ်, ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း၏တက္ကသိုလ်
compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကို (CSB) သို့မဟုတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲလေ့ဝှက်ထားလျက်ရှိသည်နှင့်သိသိသာသာဒုက္ခဆင်းရဲနဲ့ဆက်စပ်နိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါအပြုအမူ 2-4% မှာယေဘုယျလူဦးရေအတွက်လေ့ဖြစ်ပေါ်ခြင်းနှင့် 3.5% ၏အလားတူကြိမ်နှုန်းမှာပါကင်ဆန်ရောဂါကုသမှုတွင်အသုံးပြု dopaminergic ဆေးဝါးများနှင့်ဆက်စပ်နိုင်ပါတယ်။ preclinical လေ့လာမှုများများတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှု dopaminergic ယန္တရားများနှင့်အတူဆက်နွယ်နေသည်။ ဒီဟောပြောချက်မက်လုံးပေးလှုံ့ဆျောမှုသီအိုရီတစ်ခုအခန်းကဏ္ဍထောက်ပံ့သက်သေအထောက်အထားများအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ပါလိမ့်မယ်။ CSB ဤကွန်ယက်၏တိုးမြှင်ဆက်သွယ်မှုနဲ့ဆက်စပ် '' လို '' သာ. ကြီးမြတ်ပုဂ္ဂလဒိဋ္နှင့်အတူမူးယစ်ဆေး cue reactivity ကိုလေ့လာမှုများ်ပတ်သက်နေတဲ့အာရုံကြောကွန်ယက်၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုမှပိုကောင်း reactivity ကိုနဲ့ဆက်စပ်နေပါတယ်။ အဆိုပါလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုလာဘ်မှအေးစက်တွေကိုတစ်ခုထက် သာ. ကြီးမြတ်သော preference ကိုအတူလင့်ထားသည်ထားတဲ့တိုးမြှင့်အစောပိုင်းအာရုံကိုဘက်လိုက်မှုနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်။ ဒီ saliency ကွန်ယက်၏ functional ဆက်သွယ်မှုကြွင်းသောအရာမှာလျော့နည်းသွားခြင်းနှင့်စိတ်ကျရောဂါရမှတ်များကလွှမ်းမိုးနေသည်။ CSB လည်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရလဒ်များမှတိုးမြှင့် dorsal cingulate လေ့ဆက်စပ်ဝတ္ထုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်အဘို့ သာ. ကြီးမြတ် preference ကိုနဲ့ဆက်စပ်နေပါတယ်။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်မက်လုံးပေးလှုံ့ဆော်မှုများနှင့်စွဲလမ်း၏အနုတ်လက္ခဏာစိတ်ခံစားမှုသီအိုရီနဲ့ဆက်ဆံရေးကိုမီးမောင်းထိုးပြနှင့်အွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းများမှထူးခြားသောဖြစ်အံ့သောငှါလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအသစ်အဆန်းအဘို့အလေ့နှင့် preference ကိုများအတွက်အခန်းကဏ္ဍအလေးပေးပြောကြား
လိင်စွဲလမ်းထဲမှာယောက်ျားလေးနဲ့မိန်းကလေးအကြားကျား, မကွဲပြားမှု - ကုသမှုစိတ်ဓာတ်နှင့်လူမှုရေးကြန်အင်လက္ခဏာများနှင့်ဂယက်ရိုက်
MSW Argaman Institute မှတဲလ်အဗစ်, အစ္စရေး
နောက်ခံသမိုင်းနဲ့ရည်ရွယ်ချက်: ကမ္ဘာတဝှမ်းသုတေသီများနှင့်ကုသအဆိုအရ, United States မှာလိင်စွဲလမ်း၏ပျံ့နှံ့ 3-8% ကနေနေကြပါတယ်။ တစ်ပုလ်ဖြစ်ရပ်ဆန်းကြောင့်ပစ္စုပ္ပန်လိင်စွဲစပ်လျဉ်းအဓိကအားယောက်ျားလိင်စွဲနှင့်ဒဏ္ဍာရီအပေါ်အာရုံစူးစိုက်သည့် 70s နှင့် 80s အတွက်ပြဿနာလူမှုရေးအသိအမြင်။ မကြာသေးမီနှစ်များတွင်အမျိုးသမီးများသည်လည်းလိင်နှင့်ချစ်ခြင်းစွဲကနေဆငျးရဲခံရမယ့်ကြီးထွားလာအသိအမှတ်ပြုမှုလည်းမရှိ, နှင့်ကုသမှုချိန်ညှိများအတွက်ကြီးထွားလာရန်လိုအပ်ကြောင်းလည်းမရှိ။ သို့သော်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာယေဘုယျအားဖြင့်ယောက်ျားနှင့်မိန်းမများ၏အမူအကျင့်များနှင့်အထူးသဖြင့် Hyper-လိင် (နှစ်ဆစံ) နှင့်ဆက်စပ်သောလူမှုရေးအမြင်များကိုကူညီလှည့်အနေဖြင့်များစွာသောမိန်းမရပ်လိုက်နိုင်သည်။ ကျနော်တို့အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးအကြားလိင်စွဲလမ်းအတွက်တူညီရှာတှေ့နိုငျပမေယျ့အမြိုးသမီးမြား၏ထူးခြားသောကုထုံးလိုအပ်ချက်များကိုကိုထိခိုက်စေခြင်းငှါသိသိသာသာကွဲပြားခြားနားမှုလည်းရှိပါသည်။ အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးအကြားရင်ခုန်စရာနှင့်လိင်ဆက်ဆံရေး၏အမြင်များတွင်ကွာခြားချက်များ။ မိနျးမခွငျးဖွငျ့သို့မဟုတ်ကုသနေဖြင့်ထိုပြဿနာကို defining အတွက်အခက်အခဲ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေနဲ့သူတို့ရဲ့ etiology အမျိုးမျိုး - ယောက်ျားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်အတူအမျိုးသမီးတွေအတွက်အာရုံကို attachment နဲ့ Self-objectification အပေါ်နေစဉ် (လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွ), (လိင်ဆက်ဆံရေးမျိုးကိုနှိုးဆွ) objectifying နှင့်စိတ်ခံစားမှုငျးကှာအပေါ်အဓိကအားဖြင့်အလေးထားပါသည်။ အမြိုးသမီးမြားအပျေါလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏ပြင်းထန်သောအကျိုးဆက်များ, ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ (ကာလသား / STD, မလိုချင်တဲ့ကိုယ်ဝန်), စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ (အရှက်, အရှက်ကွဲခြင်း), မုဒိမ်းမှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးမှု။ အဆိုပါတင်ပြချက်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးနှင့်လူမှုရေးရှုထောင့်နှင့်ကုထုံးရှုထောင့်ခုနှစ်နှစ်ဦးစလုံးကျား, မကွဲပြားမှုအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ပါလိမ့်မယ်။
Hypersexual လူနာများအတွက်ပြဿနာ Gambler များအတွက် Pathways မော်ဒယ် Exploring
Erin ခ Cooper, Rory C. Reid
ကယ်လီဖိုးနီးယား Los Angeles မြို့၏တက္ကသိုလ်, Los Angeles မြို့,, CA, အမေရိကန်
နောက်ခံသမိုင်းနဲ့ရည်ရွယ်ချက်: လွန်ခဲ့သောဆယ်စုနှစ်အတွင်း hypersexual အပြုအမူချိတ်ဆက်သုတေသနပြု၏ပမာဏတစ်ခုတိုးရှိခဲ့သည်နေစဉ်, hypersexuality ပျေါလာနိုငျရာကနေတဆင့် etiology, အန္တရာယ်အချက်များ, ဒါမှမဟုတ်ဖြစ်နိုင်သောလမ်းကြောင်းမီးမောင်းထိုးပြအလုပ်ကိုတစ်နည်းပါးရှိသေး၏။
နည်းလမ်းများ: ကျနော်တို့လူတို့တွင် Hypersexual Disorder များအတွက် DSM-5 ကွင်းဆင်းစမ်းသပ်ရာမှ Neo-ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး Inventory data တွေကိုဆန်းစစ် (N ကို = 254) တံခါးခုံကိုတွေ့ဆုံအဖြစ်ခွဲခြားခံခဲ့ရသော။
ရလဒ်များ: ကျနော်တို့လေ့လောင်းကစားဝိုင်းရောဂါရှိသူများမှလျှောက်ထားသည့်လမ်းကြောင်းမော်ဒယ်ပေါ်အခြေခံပြီး hypersexual လူနာ3ငုပ်လျှိုးအတန်းတွေးဆ။ အဆိုပါဒေတာတွေးဆငုပ်လျှိုးအတန်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကအခြားရွေးချယ်စရာမော်ဒယ်များနှင့်အတူငုပ်လျှိုးနေ Class ကိုသုံးသပ်ခြင်း (LCA) ကို အသုံးပြု. စူးစမ်းခဲ့သည်။ အဆိုပါ3အတန်းမော်ဒယ်ပြဿနာလောင်းကစားသမားတွေတို့တွင်လမ်းကြောင်းမော်ဒယ် paralleling ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး၏ရှုထောငျ့နှင့်အတူထောက်ခံခဲ့သည်။
နိဂုံး: ဤသည် hypersexual လူနာနှင့်အတူလောင်းကစားသမားတွေမှဘုံအဆိုပါလမ်းကြောင်းမော်ဒယ်နှိုင်းယှဉ်ဖို့ကပထမလေ့လာမှုဖြစ်ပါတယ်။ hypersexual အပြုအမူများနှင့်လောင်းကစားဝိုင်းရောဂါအကြား data ကိုအတွက်အပြိုင် de-စညျးမဉျြးစညျးကမျးအပြုအမူတွေဤနှစ်ခုပုံစံများသူတို့ရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ဘုံလမ်းကြောင်းမျှဝေနိုင်ပါသည်အကြံပြုထားသည်။
ကယ်လီဖိုးနီးယား San Diego မှ, San Diego မှ, သိပ္ပံ၏အမေရိကန်နိုင်ငံပိုလန်အကယ်ဒမီ, ဝါဆော, ပိုလန်တက္ကသိုလ်
နောက်ခံသမိုင်းနဲ့ရည်ရွယ်ချက်: Clinician နှင့်သုတေသီများမကြာခဏပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု (PPU) conceptualize ဖို့ဘယ်လိုတှနျ့ဆုတျ။ အဆိုပါနှစ်ဦးကိုအများဆုံးဆွေးနွေးတင်ပြမူဘောင်အမူအကျင့်စွဲနှင့်မလှူကြသည်။ ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအပေါ် Neuroscientific လေ့လာမှုများနှင့်အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကို (CSB) အခြားစွဲ-related အပြုအမူတွေနဲ့အတူထိုကဲ့သို့သောအခြေအနေများနှင့်တူညီအတွက်ဦးနှောက်ဆုလာဘ်ဆားကစ်တစ်ခုသိသိသာသာပါဝင်ပတ်သက်မှုဖော်ပြသည်။ သို့သော်ဆုလာဘ် circuitry ပြတ်တောက်ပြဿနာအပြုအမူတွေ၏တစ်ခုတည်းသောဖြစ်နိုင်သမျှအာရုံကြောယန္တရားမဟုတ်ကြောင်း, လက်တွေ့လေ့လာတွေ့ရှိချက်များနှင့်အန္တရာယ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေအပေါ်မကြာသေးမီကလေ့လာမှုများနှင့်ပြဿနာအရက်အသုံးပြုမှုပြပွဲ။ ကြောင့်မကြာသေးမီတွေ့ရှိချက်ရန်, စွဲလမ်းအပြုအမူတွေကိုဖြစ်စေတိုးမြှင့်စာစားချင်စိတ်ကိုတွေကိုအဘို့အဆုလာဘ် system ကို reactivity ကိုသို့မဟုတ်တိုးလာ amygdala ခြိမ်းခြောက်မှု-reactivity ကိုအားဖြင့်မျဉ်းသားနိုင်ပါသည်။
နည်းလမ်းများ: ဤတွင်ကျနော်တို့ paroxetine PPU ၏ကုသမှုနှင့်ဤအခြေအနေ amygdale ခြိမ်းခြောက်မှု-reactivity ကို၏အခန်းကဏ္ဍပေါ်မှာငါတို့လေ့လာမှုများကိုတင်ပြ။
ရလဒ်များနှင့်နိဂုံး: ကျနော်တို့ PPU နှင့် CSB ကုသမှုများအတွက်အဖြစ်အနာဂတ် neuroscience သုတေသန၏လမ်းညွန်ဤတွေ့ရှိချက်များ၏အဓိပ္ပာယ်ကိုဆွေးနွေးပေးသွားပါမယ်။
Hypersexual အပြုအမူ၏ Pharmacotherapy နှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုအပေါ်တစ်ဦးကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
အစ္စလာမ့် Azad တက္ကသိုလ်, တီဟီရန်, တီဟီရန်, အီရန်
နောက်ခံသမိုင်းနဲ့ရည်ရွယ်ချက်: မကြာသေးမီကနှစ်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမမှန်၏ pharmacotherapy ၏ဧရိယာအတွင်းကြီးထွားလာအကျိုးစီးပွားရှိခဲ့သည်။ ကွဲပြားခြားနားသောဟော်မုန်းအဆင့်ဆင့်, neurotransmitters, receptors နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒအတွက်ပါဝင်ဦးနှောက်ဒေသများသေးဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။ သို့သော် hypersexual အပြုအမူ၏ neurobiology ၏မပြည့်စုံနားလည်မှုရှိနေတုန်းပဲ။ အမျိုးမျိုးသော pharmacological အေးဂျင့်လိင်ပိုင်းအပြုအမူကိုလျော့ချဖို့သတင်းပို့ခဲ့ကြသည်။ ပစ္စုပ္ပန်ဆောင်းပါး၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ hypersexual အပြုအမူနှင့်အတူလူနာတွေအတွက်မရရှိနိုင် pharmacological ကုသပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့ဖြစ်တယ်။ ထိုမှတပါး, အရေးယူ, ဆေးညွှန်းများနှင့်ရရှိနိုင်ကုသမှု၏အသုံးပြုမှု algorithm ကို၏ယန္တရားကိုဆှေးနှေးခဲ့သညျ။ လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုတွေလျှက် optional သစ်ကိုကုသကိုလည်းဖော်ပြခဲ့တဲ့ခဲ့ကြသည်။
နည်းလမ်းများ: လေ့လာရေး Medline, PsycINFO, Cochrane စာကြည့်တိုက်များနှင့်လက်တွေ့စမ်းသပ် Registered အီလက်ထရောနစ် databases ကိုရှာဖွေခြင်းဖြင့်ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။ 2000 နှင့် 2015 အကြားကောက်ယူ hypersexual ရောဂါနှင့်အတူလူနာတွေအတွက် pharmacological ကုသမှု၏ထိရောက်မှုနှင့်လုံခြုံမှုစုံစမ်းစစ်ဆေးအားလုံးရထိုက်ခွင့်လေ့လာမှုများပစ္စုပ္ပန်ဆောင်းပါးတွင်ထည့်သွင်းခဲ့ကြသည်။
ရလဒ်များ: လက်ရှိ pharmacotherapies ရွေးချယ် serotonin Reuptake inhibitors (SSRIs), Antiandrogens နှင့် gonadotropin-releasing ဟော်မုန်း agonists ပါဝင်သည်။ အသုံးအများဆုံး pharmacotherapy SSRIs ဖြစ်သတင်းပို့သည်။ သို့သော်ဆန့်ကျင်အန်ဒရိုဂျင်ကုထုံးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒလျော့ခြင်းနှင့်သိမြင်မှုအမူအကျင့်ကုထုံးမှနှိုင်းယှဉ်တစ်ဦးအကျိုးသက်ရောက်မှုအရွယ်အစားရှိသည်ဖို့သတင်းပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ gonadotropin-releasing ဟော်မုန်း agonists ပြင်းထန် hypersexual ရောဂါနှင့်အတူလူနာတွေအတွက်ကုသမှုရွေးချယ်စရာဖြစ်သတင်းပို့ခဲ့ကြသည်။
ကောက်ချက်: အမူအကျင့်များနှင့်သိမြင်မှုကုထုံးနှင့်အတူပေါင်းစည်း pharmacotherapy ၏အသုံးပြုမှုကိုအကြံပြုသည်။ hypersexual ရောဂါ pharmacotherapy နှင့် ပတ်သက်. သိကျွမ်းခြင်း၌ကွာဟချက်နေဆဲရှိပါတယ်။ ပိုပြီးထိရောက်မှုနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်လုံခြုံဘေးကင်း profile များကိုနဲ့အတူအေးဂျင့်များ၏ဖွံ့ဖြိုးရေးလိုအပ်နေပါသည်
အမျိုးသားများအတွက်အတွက် Hypersexual Disorder ဖို့လင့်ခ်လုပ်ထားသော Overactive စိတ်ဖိစီးမှုစနစ်
JUSSI JOKINEN, Andreas CHATZITTOFIS, Jonas HALLBERG, ပတေရု Nordstrom,
Karolinska Institute မှစတော့ဟုမ်း, ဆွီဒင်
နောက်ခံသမိုင်းနဲ့ရည်ရွယ်ချက်: Hypersexual ရောဂါကဲ့သို့သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒထိန်းချုပ်မှုလျှော့, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲ, Impulse နှင့် compulsive အဖြစ် pathophysiological ရှုထောင့်ပေါင်းစပ်ပြီး။ သို့သျောလညျးအနညျးငယျကဒီရောဂါရဲ့နောက်ကွယ်က neurobiology အကြောင်းကိုလူသိများသည်။ အဆိုပါ hypothalamic pituitary adrenal (HPA) ဝင်ရိုးတစ် dysregulation စိတ်ရောဂါမမှန်မှာပြထားပြီးပေမယ့် hypersexual ရောဂါအတွက်စုံစမ်းစစ်ဆေးနိုင်ခြင်းမရှိသေးပေ။ ဤလေ့လာမှု၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ hypersexual ရောဂါနှင့်အတူယောက်ျားအတွက် HPA ဝင်ရိုး၏ function ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ဖို့ဖြစ်တယ်။
နည်းလမ်းများ: အဆိုပါလေ့လာမှု hypersexual ရောဂါနှင့်အတူ 67 အထီးလူနာများနှင့် 39 ကျန်းမာအထီးစေတနာ့ဝန်ထမ်းပါဝင်သည်။ အဆိုပါလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive စကေး (SCS), Hypersexual Disorder လက်ရှိအကဲဖြတ်စကေး (HD ကို: CAS), Montgomery-Åsbergစီးပွားပျက်ကပ်စကေး-ကိုယ်ပိုင်ခဲ့သည် Rating (Madre-S က) နှင့်ကလေးဘဝစိတ်ဒဏ်ရာမေးခွန်းလွှာ (CTQ), စိတ်ကျရောဂါပြင်းထန်မှု hypersexual အပြုအမူအကဲဖြတ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့ကြသည် စောစောဘဝဒုက္ခ။ cortisol နှင့် ACTH ၏ Basal နံနက်ပလာစမာအဆင့်ဆင့်အကဲဖြတ်ခဲ့ကြသည်နှင့်အနိမ့်ထိုး (0.5mg) dexamethasone ဖိနှိပ်မှုစမ်းသပ် post ကို dexamethasone အုပ်ချုပ်ရေးတိုင်းတာ cortisol နှင့် ACTH နှင့်အတူဖျော်ဖြေခဲ့သည်။ non-ဖိနှိပ်မှု status ကိုပညာ-cortisol ပမာဏ _138nmol / ဌနဲ့သတ်မှတ်ခံခဲ့ရသည်။
ရလဒ်များ: hypersexual ရောဂါလူနာ Non-နှိမ်နင်းသိသိသာသာပိုပြီးမကြာခဏပညာ, တို့ကျန်းမာစေတနာ့ဝန်ထမ်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကသိသိသာသာမြင့်မားတဲ့ပညာ,-ACTH အဆင့်ဆင့်ရှိခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါလူနာကျန်းမာစေတနာ့ဝန်ထမ်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကသိသိသာသာပိုပြီးကလေးဘဝစိတ်ဒဏ်ရာနှင့်စိတ်ကျရောဂါလက္ခဏာတွေကဖော်ပြခဲ့သည်။ CTQ ရမှတ် SCS နှင့် HD ကိုသော်လည်းပညာ,-ACTH နဲ့သိသာထင်ရှားသောနှုတ်လက္ခဏာဆောင်သောဆက်စပ်မှုပြ CAS ရမှတ်လူနာအတွက်အခြေခံ cortisol နှင့်အတူနှုတ်လက္ခဏာဆောင်သောဆက်စပ်မှုပြသခဲ့သည်။ hypersexual ရောဂါ၏ရောဂါလက္ခဏာတွေကိုသိသိသာသာပညာ, Non-ဖိနှိပ်မှုများနှင့်ကလေးဘဝကိုစိတ်ဒဏ်ရာများအတွက်ချိန်ညှိလျှင်ပင်ပိုမိုမြင့်မားပလာစမာပညာ,-ACTH ဆက်စပ်ခဲ့သည်။ comorbid စိတ်ကျရောဂါရောဂါလူနာချန်လှပ် sensitivity ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရလဒ်မပြောင်းခဲ့ပါဘူး။
ကောက်ချက်: ရလဒ် hypersexual ရောဂါနှင့်အတူအထီးလူနာ HPA ဝင်ရိုး dysregulation အကြံပြုအပ်ပါသည်။ ကျနော်တို့ကဤတွေ့ရှိချက်များနှင့် hypersexual ရောဂါ neurobiological အမှတ်အသားများအပေါ်အနာဂတ်သုတေသနဆှေးနှေးပါမညျ။
Shane ဒဗလျူ KRAUS, Steve Martino, MARC POTENZA
VA သို့ Connecticut ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုစနစ်, အနောက် Heaven, Connecticut, အမေရိကန်နိုင်ငံ
နည်းလမ်းများ: အင်တာနက်ကိုအသုံးပြုခြင်း, ငါတို့လူဦးရေအချိုးအစားနဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကိုအကဲဖြတ်စစ်တမ်းကောက်မေးခွန်းများ hypersexuality, ညစ်ညမ်း-အသုံးပြုမှုဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုများအတွက်ကုသမှုရှာကြံအတွက်လက်ရှိအကျိုးစီးပွားဖြည့်စွက်ရန် 1298 အထီးညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများကိုစုဆောင်း။
ရလဒ်များ: ယောက်ျား၏ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 14% ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုများအတွက်ကုသမှုရှာကြံအတွက်စိတ်ဝင်စားမှုဖော်ပြခဲ့ကြသည်။ ကုသမှု-စိတ်ဝင်စားယောက်ျားကုသမှု-စိတ်မယောက်ျားနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ hypersexuality ၏ဆေးခန်းသိသိသာသာအဆင့်ဆင့်သတင်းပို့၏ 9.5 ပိုမိုမြင့်မားလေးသာမှုရှိခဲ့ပါတယ်။ Bivariate လည်းကုသမှု-စိတ်ဝင်စားယောက်ျား / လက်ထပ်ခံရဖို့လျော့နည်းဖွယ်ရှိခဲ့ကြသည်ပူးပေါင်း, ဒါပေမယ့်ပိုပြီးညစ်ညမ်းအပတ်စဉ်စားသုံး ပို. မကြာခဏ masturbated နှင့်နောက်ကျောဖြတ်သို့မဟုတ်ကုသမှု-စိတ်မယောက်ျားနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါညစ်ညမ်းသုံးပြီးဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့ပိုပြီးအတိတ်ကြိုးစားမှုရှိခဲ့ပါတယ်။ တွေ့ရှိခဲ့လေ့လာဆန်းစစ် Regression ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကြောင်းနေ့စဉ်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုတွေ့မကြာခဏအတိတ်ကိုပြန်ဖြတ်ပါသို့မဟုတ် Hypersexual အပြုအမူ Inventory Control ကို subscale အပေါ်ညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်ရမှတ်များသုံးပြီးဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့ကြိုးစားနေအကျိုးစီးပွား-In-ရှာ-ကုသမှုအဆင့်အတန်းခန့်မှန်းခဲ့ကြသည်။
ကောက်ချက်: လက်ရှိလေ့လာမှုတွေ့ရှိချက်များစိစစ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Self-ထိန်းချုပ်မှုတိကျတဲ့ရှုထောင့် (ဆိုလိုသည်မှာ "ထိန်းချုပ်မှုဆုံးရှုံး") ဖော်ထုတ်ရည်ရွယ်လေ့အကျင့်များ, Impulse နှင့် / သို့မဟုတ်ကုသမှု-ရှာကြံတစ်ဦးချင်းစီအကြားညစ်ညမ်းအလွန်အကျွံ / ပြဿနာအသုံးပြုမှုနှင့်ဆက်စပ် compulsive တိုးတက်လာအောင်ကူညီနိုင်ဘူး။
ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive အကြားစိတ်အားထက်သန်မှုနှောင်ကြိုး differential ဖျန်ဖြေပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး၏တိကျသောပုံစံ
Shane ဒဗလျူ KRAUS, Steve Martino, ယောဟန် Andrew STURGEON, Ariel KOR, MARC N. POTENZA
Connecticut ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုစနစ်, အနောက် Heaven, Connecticut ယူအက်စ်အေ
နောက်ခံသမိုင်းနဲ့ရည်ရွယ်ချက်: လက်ရှိလေ့လာမှုညစ်ညမ်းအသုံးပြုခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive ၏ဆက်ဆံရေးအတွက် "အသည်းအသန်ပူးတွဲမှု" ၏နှစ်မျိုး၏အာမခံအခန်းကဏ္ဍဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ သဟဇာတစိတ်အားထက်သန်မှုကလူတစ်ဦးရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူသူသို့မဟုတ်သူမ၏ဘဝကိုတခြားဒေသများနဲ့အညီအခါကိုရည်ညွှန်းသည်။ obsessive စိတ်အားထက်သန်မှုကလူတစ်ဦးရဲ့ဘဝတခြားဒေသများနှင့်အတူပဋိပက္ခဖန်တီးနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဒုက္ခဆင်းရဲကိုအထောက်အကူပြုရန်ကြောင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုအတွင်းထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ထားတဲ့ "မထိန်းချုပ်တတ်ပြီး" ကိုရည်ညွှန်းသည်။
နည်းလမ်းများ: အင်တာနက်ကိုအသုံးပြုခြင်း, ငါတို့အသက်အပိုင်းအခြား, ညစ်ညမ်း-အသုံးပြုမှုဝိသေသလက္ခဏာများ, ညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive ဘို့အသည်းအသန်ပူးတွဲမှု (ညစ်ညမ်းမှ Non-တိကျတဲ့) အကဲဖြတ်မေးခွန်းလွှာကိုဖြည့်ဖို့ 265 တက္ကသိုလ်ယောက်ျားစုဆောင်း။ လေ့လာမှု variable တွေကိုအကြားဆက်ဆံရေးကိုတည်ဆောက်ပုံလမ်းကြောင်းကိုမော်ဒယ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသုံးပြီးဆန်းစစ်ခဲ့ကြသည်။
ရလဒ်များ: သဟဇာတစိတ်အားထက်သန် ratings သိသိသာသာ, တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသော်လည်း, အပတ်စဉ်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive ratings အကြားဆက်ဆံရေးပြေလည်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးရန်တွေ့ရှိခဲ့သည်။ obsessive စိတ်အားထက်သန် ratings အပြည့်အဝအပတ်စဉ်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive ratings အကြားဆက်ဆံရေးပြေလည်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးရန်တွေ့ရှိခဲ့သည်။ တစ်ဦးအပြည့်အဝသတ်မှတ်ထားသော Two-ဖျန်ဖြေမော်ဒယ်အလုပ်ခံခဲ့ရသည့်အခါ, သာ obsessive စိတ်အားထက်သန်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive တစ်သိသိသာသာခန့်မှန်းနျြရစျ။ သဟဇာတစိတ်အားထက်သန်စိတ်ကိုလွှမ်းမိုးစိတ်အားထက်သန်မှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုအထက်နှင့်တဘက်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive ရမှတ်အထောက်အကူပြုရန်မတွေ့ရှိစဉ်အပတ်စဉ်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive အကြားဆက်ဆံရေးအပြည့်အဝ, obsessive စိတ်အားထက်သန် ratings အားဖြင့်ရှင်းပြခဲ့ခံခဲ့ရသည်။
ကောက်ချက်: ကြောင်း obsessive စိတ်အားထက်သန်ပေမယ့်သဟဇာတမပေးစိတ်အားထက်သန်တွေ့ရှိချက်, ညစ်ညမ်းအသုံးပြုခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive အသည်းအသန်ပူးတွဲမှု၏စိတ်ကိုလွှမ်းမိုးပုံစံများပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုသို့မဟုတ်အခြား compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကိုလျှော့ချခြင်းနှင့်ဖျက်သိမ်းရေးများအတွက်ကုသမှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ပစ်မှတ်ကိုကိုယ်စားပြုစေခြင်းငှါအကြံပြုချိတ်ဆက်ထားပါတယ်။
ခရစ်ယာန် LAIER, Marco BÄUMER, ဿိက BRAND
နောက်ခံသမိုင်းနဲ့ရည်ရွယ်ချက်: ရောဂါဗေဒအင်တာနက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုတိကျသောအင်တာနက်စွဲလမ်းမှုဟုသတ်မှတ်သည် (Young, 2008) ။ မကြာသေးမီကအင်တာနက်ညစ်ညမ်းစွဲစွဲလမ်းမှု (IPA) ၏သိမြင်မှု - အပြုအမူပုံစံတွင်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံအသုံးပြုခြင်းမှရရှိလာသောအပြုသဘောဆောင်သောနှင့်အပျက်သဘောဆောင်သောအားဖြည့်မှုများကို IPA ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွင်အရေးကြီးသောယန္တရားများအဖြစ်ယူဆထားသည် (Laier & Brand, 2014) ။ ဤလေ့လာမှုကအင်တာနက်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများအသုံးပြုခြင်းကြောင့်စိတ်အပြောင်းအလဲများကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးသည် IPA အပေါ်သဘောထားများနှင့်ဆက်စပ်မှုရှိသည်။
နည်းလမ်းများ: အထီးပါဝင်သူ (N ကို = 39) အစိတ်အပိုင်းနှစ်ခုနှင့်အတူအွန်လိုင်းမှစစ်တမ်းကို အသုံးပြု. စုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့ကြသည်: ပထမဦးဆုံးအကဲဖြတ်ခုနှစ်တွင်လူဦးရေဆိုင်ရာအချက်အလက်များ: IPA ဆီသို့ဦးတည်လိုတဲ့သဘောထားကို, အင်တာနက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုလှုံ့ဆျောမှု, နှင့်အထွေထွေစိတ်ဓါတ်များအကဲဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ ဒုတိယအကဲဖြတ်များတွင်ပါဝင်သူအိမ်မှာအင်တာနက်ကညစ်ညမ်းတဲ့ဆန္ဒအလျောက်, Self-စိတ်ပိုင်းဖြတ်အသုံးပြုမှုမီနှင့်အပြီးသူတို့ရဲ့လိင်စိတ်နိုးထနှင့်၎င်းတို့၏အမှန်တကယ်စိတ်ညွှန်ပြခိုင်းတယ်။
ရလဒ်များ: ရလဒ်: IPA ဆီသို့သဘောထားတွေကြောင့်အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသုံးပေမယ့်မရယေဘုယျစိတ်ဓါတ်များနှင့်အတူရှာကြံစိတ်ခံစားမှုရှောင်ရှားခြင်းနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားဆက်နွယ်နေကြောင်းကြောင်းပြသခဲ့သည်။ ထို့အပြင်: IPA ဆီသို့သဘောထားတွေကိုအင်တာနက်ညစ်ညမ်းအသုံးမပြုခင်ကွောဆက်နွယ်နေကြောင်း။ အင်တာနက်ကညစ်ညမ်းစားသုံးမှုလိင်စိတ်နိုးထ, ပိုကောင်းတဲ့စိတ်ဓါတ်များနှင့်လျော့နည်းကွောတစ်ဦးကျဆင်းခြင်းမှဦးဆောင်ခဲ့သည်။
ကောက်ချက်: အဆိုပါတွေ့ရှိချက်: IPA ဆီသို့သဘောထားတွေဆန္ဒပြည့်ရှာတွေ့ဖို့နဲ့ဆန္ဒရှိစိတ်ခံစားမှုပြည်နယ်များနှင့်အတူရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်ရန်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုလှုံ့ဆျောမှုနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သရုပ်ပြခဲ့သည်။ ထိုမှတပါး, IPA: ကြိုတင်ဆန္ဒအလျောက်ကိုအင်တာနက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုရန်ဆန္ဒရှိစိတ်ဓါတ်များနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။ အတူတူကအင်တာနက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုစိတ်ဓါတ်များပြောင်းလဲသွားသောလေ့လာရေးနှင့်တကွ, ရလဒ်များကိုမှတပါးဆန္ဒပြည့်လည်းအနုတ်လက္ခဏာအားဖြည့်: IPA ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍကြောင်းသီအိုရီယူဆချက်ကိုထောကျပံ့။
Hypersexuality ကဘာလဲ? အမျိုးသားများအတွက်နှင့်အတူလိင်ရှိသည်သောအမျိုးသားများအတွက်စိတ်ဓာတ်ယန္တရားများ၏စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး
Michael H. MINER1, Angus Macdonald, III2, အဲရ JANSSEN3, ဘက် SWINBURNE ROMINE4,
ဧလိ Coleman နန်စီ RAYMOND5
မင်နီဆိုတာဆေးဘက်ဆိုင်ရာကျောင်း, Duluth, MN, အမေရိကန်နိုင်ငံ၏ 1University
မင်နီဆိုတာ, Minneapolis, MN, အမေရိကန်နိုင်ငံ၏ 2University
3KU Leuven, Leuven, ဖလန်းဒါးစ်, ဘယ်လ်ဂျီယံ
Kansas ပြည်နယ်, Lawrence, KS, အမေရိကန်နိုင်ငံ၏ 4University
မင်နီဆိုတာဆေးဘက်ဆိုင်ရာကျောင်း, Minneapolis, MN, အမေရိကန်နိုင်ငံ၏ 5University
နောက်ခံသမိုင်းနှင့်ရည်မှန်းချက်: hypersexuality ၏အဓိကဝေဖန်မှုကြောင့်ရှင်းပြဖို့ရှေ့ဆက်ထား Conceptual မဆိုဘို့ပင်ကိုယ်မူလထောက်ခံမှုမရှိခြင်းဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒီလေ့လာမှုကကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး, သိမြင်မှုနှင့်မြောက်မြားစွာစာရေးဆရာများအားဖြင့် hypersexuality လက္ခဏာမှတွေးဆခဲ့ကြကြောင်း psychophysiological အချက်များစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။
နည်းလမ်းများ: သင်တန်းသားများကိုနှစ်ဦးစလုံး On-line ကိုများနှင့်လူထုအခြေပြုနေရာများ, အစီအစဉ်များနှင့်ခံတွင်း၏စကားလုံးသုံးပြီးစုဆောင်းလိင်တူဆက်ဆံသူကို 243 လူဖြစ်ကြ၏။ သင်တန်းသားများကိုအဓိကအတွေးရောဂါသို့မဟုတ်သိမြင်မှုကမောက်ကမဖြစ်မှု၏အဘယ်သူမျှမရိပ်လက္ခဏာရှိသည်, ပြီးခဲ့သည့် 90-နေ့ရက်ကာလ၌လူတယောကျနဲ့လိင်ဆက်ဆံခဲ့ခြင်းနှင့်အသက်အရွယ်အနည်းဆုံး 18 နှစ်ပေါင်းဖြစ်ပါပြီရမည်ဖြစ်သည်။ သင်တန်းသားများကိုတစ်ဦး SCID-type အမျိုးအစားအင်တာဗျူးအပေါ်အခြေခံပြီးတစ်ဦး hypersexual ရောဂါသို့မဟုတ်နှိုင်းယှဉ်အုပ်စုတာဝန်ကျတယ်။ ဒေတာကိုသုံးသိမြင်တာဝန်များကို, မေးခွန်းလွှာအုပ်ချုပ်မယ့် Self-အစီရင်ခံစာကွန်ပျူတာနှင့်စိတ်ဓါတ်များသော induction အောက်ပါလိင်စိတ်နိုးထတစ် psychophysiological အကဲဖြတ်ပါဝင်သည်။
ရလဒ်များ: ရလဒ်များကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးအချက်များ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအမူအကျင့်ထိန်းချုပ်မှုများနှင့်သွေးသားဆန္ဒရမ္မက်နှင့်စိတ်ကူးယဉ်၏အတွေ့အကြုံများကိုအုပ်စုကွဲပြားမှုပြသခဲ့သည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူကိုထိန်းချုပ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်လှုပ်ရှားခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတားစီး, ဒါပေမယ့်ပိုပြီးယေဘုယျမဟုတ်အပြုအမူ arousal သို့မဟုတ်အပြုအမူတားစီးနှင့်ဆက်စပ်သောခဲ့သည်။ Hypersexual သင်တန်းသားများကိုဓာတ်ခွဲခန်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းစဉ်အတွင်းဇီဝကမ္မ arousal ၏အောက်ပိုင်းအဆင့်ဆင့်ပြသပေမယ့်အကျိုးသက်ရောက်စေအနုတ်လက္ခဏာအားဖြင့် arousal ၏တားစီးအတွက်ကွဲပြားခြားနားမှုမပြခဲ့ပါဘူး။
ကောက်ချက်: ကျနော်တို့ hypersexuality ကျယ်ပြန့်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးအချက်များနှင့်ဆက်စပ်သောနေစဉ်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအမူအကျင့်ထိန်းချုပ်မှုမရှိခြင်း arousal နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်မယေဘုယျအပြုအမူ arousal နှင့် inhibitory စနစ်များကိုမှတိကျတဲ့ inhibitory အချက်များနှင့်ဆက်စပ်သောခံရဖို့ပေါ်လာတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေတာရှိမရှိ hypersexuality မှလေးစားမှုနှင့်အတူဆန့်ကျင်ဖြစ်ပါတယ်လိင်စိတ်နိုးထ / စိတ်လှုပ်ရှား၏အဆင့်မြင့်တို့ကရှင်းပြခဲ့နိုင်ပါတယ်။
ပြဿနာများနှင့် Non-ပြဿနာကအင်တာနက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများအကြားကွာခြားချက်များ: လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်လှုပ်ရှားခြင်းနှင့် hypersexual အပြုအမူတွေများ၏အခန်းကဏ္ဍ
JARO PEKAL, ခရစ်ယာန် LAIER, ဿိက BRAND
နောက်ခံသမိုင်းနဲ့ရည်ရွယ်ချက်: အင်တာနက်ကညစ်ညမ်းစွဲ (IPA:) ၏ခွဲခြားနေဆဲင်ထဲကဆွေးနွေးထားတယ်။ အချို့ကစာရေးသူကိုအင်တာနက်စွဲလမ်း (ကုန်အမှတ်တံဆိပ် et al ။ , 2014) ၏တဦးတည်းသီးခြားအမျိုးအစားအဖြစ်: IPA စဉ်းစားပါ။ သီအိုရီလေ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်လှုပ်ရှားခြင်းနှင့် hypersexual အပြုအမူ: IPA ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအဘို့တိကျတဲ့ဓာတ်ဖြစ်ကြသည်။ လက်ရှိလေ့လာမှုမှာတော့ပြဿနာနှင့်ကျန်းမာအင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်လှုပ်ရှားခြင်းနှင့် hypersexuality နှင့် ပတ်သက်. နှိုင်းယှဉ်ခဲ့ကြသည်။
နည်းလမ်းများ: ကျန်းမာပြဿနာ IP ကိုအသုံးပြုသူများက IPA: ဆီသို့ဦးတည်လိုတဲ့သဘောထားကိုတိုင်းတာကြောင့်ဘာအဘို့ပြုပြင်ထားသောရေတိုကိုအင်တာနက်စွဲလမ်းမှုစမ်းသပ်ခြင်းကို အသုံးပြု. ဟောင်း post ကိုစစ်မှန်သောထုတ်ယူခဲ့ကြသည်ပါဝင်သည်ဟုခြုံငုံ N ကို = 274 အထီးသင်တန်းသားများ, အုပ်စုနှစ်စု (နှစ်ဦးစလုံးဎ = 25) ၏နမူနာထဲက။ ဒီအုပ်စုတွေယေဘုယျလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်လှုပ်ရှား (လိင်စိတ်လှုပ်ရှားစကေး) နှင့် hypersexual အပြုအမူ (Hypersexual အပြုအမူ Inventory) ရက်နေ့တွင်၎င်းတို့၏ Self-အစီရင်ခံစာများနှင့်စပ်လျဉ်းနှိုင်းယှဉ်ခဲ့ကြသည်။
ရလဒ်များ: ရလဒ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်လှုပ်ရှားခြင်းနှင့် hypersexual အပြုအမူနှင့်စပ်လျဉ်းပြဿနာနှင့် Non-ပြဿနာ IP ကိုအသုံးပြုသူများအကြားသိသိသာသာကွဲပြားခြားနားမှုပြသခဲ့သည်။ ထို့ပြင်ပြဿနာ IP ကိုအသုံးပြုသူများကနှစ်ဦးစလုံးအကြေးခွံပေါ်သိသိသာသာပိုမိုမြင့်မားရမှတ်များကဖော်ပြခဲ့သည်။ ကွဲပြားခြားနားမှုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတားစီးဘို့ရှာမတွေ့ခဲ့ပါ။
ဆွေးနွေးချက်နှင့် နိဂုံး: ခြုံရလဒ်: IPA ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအဘို့တိကျတဲ့ဓာတ်၏အရေးပါပုံကိုလည်းထင်ရှားစေခြင်းနှင့်တိကျသောအင်တာနက်စွဲဘို့တီထွင်သီအိုရီမော်ဒယ်ခိုင်ခံ့စေ။ ထို့အပွငျရလဒ်များမျှော်လင့်ခြင်းနှင့်လိင်စိတ်နိုးထ၏ဧည့်ခံ: IPA ဖွံ့ဖြိုးဆဲအတွက်အဓိကအချက်အဖြစ်တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်မထွက်ရဆန္ဒပြည့်အယူအဆ (လူငယ်, 2004), ထောက်ခံပါတယ်။ နောက်ထပ်အမှတ်တံဆိပ်များနှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များအားဖြင့်သီအိုရီမော်ဒယ်အကဲဖြတ်ဖို့, အလုပ်မဖြစ်ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းမဟာဗျူဟာများနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာပြင်းထန်မှုကဲ့သို့အခြားအရေးပါသည့်အချက်များပြဿနာနှင့် Non-ပြဿနာ IP ကိုအသုံးပြုသူများအတွက်စမ်းသပ်ပြီးခံရဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
DSM-5 က Non-ပစ္စည်း-Related Disorders ၏တိုးတက်နားလည်မှု: Hypersexuality နှင့်လောင်းကစား Disorder Comparing
ကယ်လီဖိုးနီးယား Los Angeles မြို့၏တက္ကသိုလ်, Los Angeles မြို့,, CA, USA
နောက်ခံသမိုင်းနဲ့ရည်ရွယ်ချက်: အဆိုပါအတိတ်ဆယ်စုနှစ်က de-စည်းမျဉ်းသတ်မှတ် hypersexual အပြုအမူများနှင့်လောင်းကစားဝိုင်းရောဂါစုံစမ်းစစ်ဆေးသုတေသနတစ်ခုတိုးလာခဲ့သည်ကိုတွေ့ရသည်။ စုပေါင်းအမူအကျင့်စွဲလမ်းအဖြစ်ခွဲခြား, နည်းနည်းက de-စညျးမဉျြးစညျးကမျးအပြုအမူ၏ကွဲပြားခြားနားသောသရုပ်အကြားဆင်တူရိုးမှားစူးစမ်းပြုထားပြီးဖြစ်ပါသည်။ လက်ရှိလေ့လာမှု DSM-5 များအတွက် hypersexual ရောဂါများအတွက်အဆိုပြုခွဲခြားသတ်မှတ်ချက်နှင့်အတူလောင်းကစားဝိုင်းရောဂါ၏လက္ခဏာများနှိုင်းယှဉ်တွေ့ရှိချက်ကတင်ပြထားပါတယ်။
နည်းလမ်းများ: စိတ်ဖိစီးမှုကျရောက်နေတဲ့, စိတ်ခံစားမှု dysregulation နှင့် Impulse ထင်ဟပ်ဘုံညွှန်းကိန်းကိုတိုင်းတာကိုယ်ပိုင်အစီရင်ခံစာမေးခွန်းလောင်းကစားဝိုင်းရောဂါ (ဎ = 77) နဲ့လူနာရှာကြံကုသမှုသီးခြားအုပ်စုများမှအုပ်ချုပ်ခွင့်ရခဲ့ကြသည်သို့မဟုတ်တစ်ဦးချင်းစီအတွက် DSM-5 hypersexual ရောဂါများအတွက်စံတွေ့ဆုံ (ဎ = 74 ) ။
ရလဒ်များ: Multivariate စာရင်းဇယားလေ့လာမှု variable တွေကိုဖြတ်ပြီးအဖွဲ့ကိုကွဲပြားခြားနားမှုစူးစမ်းဖို့အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ နှစ်ဦးစလုံးအုပ်စုများအစီအမံကိုဖြတ်ပြီးနှိုင်းယှဉ်ရမှတ်များပြသခြင်းနှင့်နှစ်ဦးစလုံးအုပ်စုများတစ်ဦးချင်းစီစကေး၏ psychometric ဂုဏ်သတ္တိများများအတွက်စံချိန်စံညွှန်းအုပ်စုများအတွက်လေ့လာတွေ့ရှိများထက်သိသိသာသာပိုမိုမြင့်မားရမှတ်များရှိခဲ့ပါတယ်။ အကျိုးသက်ရောက်မှုအရွယ်အစား၏စာမေးပွဲကိုလည်းအုပ်စုများအကြားသိသိသာသာကွဲပြားခြားနားမှု၏မရှိခြင်းထောက်ခံခဲ့ကြသည်။
ကောက်ချက်: ဤအပုံမမှန်များ၏ etiology အကြောင်းကိုနားလည်သဘောပေါက်တဖြည်းဖြည်းတိုးတက်ပြောင်းလဲဆက်လက်နေစဉ်, precipitate နှင့် de-စညျးမဉျြးစညျးကမျးအပြုအမူသည်ဤပုံစံများရှည်သောအခြေခံပြဿနာများကိုအလားတူဖြစ်နိုင်သည်။ ဤရလဒ်သည်ပြဿနာလောင်းကစားသမားတွေနှင့် hypersexual လူနာအလားတူအကြောင်းပြချက်အလုပ်မဖြစ်အပြုအမူအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံခြင်းနှင့်ကြားဝင်စိတ်ဖိစီးမှုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်း, Impulse ပစ်မှတ်ထားနှင့်စိတ်ခံစားမှုစည်းမျဉ်းနှစ်ဦးစလုံးလူဦးရေမှယဘေုယမည်အကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။
Jan SNAGOWSKI, JARO PEKAL, လုဒိ HARBARTH, ခရစ်ယာန် LAIER, ဿိက BRAND
နောက်ခံသမိုင်းနဲ့ရည်ရွယ်ချက်: တိကျတဲ့အင်တာနက်စွဲနေတဲ့ပုံစံအဖြစ်အင်တာနက်ကညစ်ညမ်းစွဲ (IPA:) အပေါ်သုတေသနအတိတ်နှစ်များတွင်ကြီးထွားလာအာရုံစူးစိုက်မှုကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ မကြာမီကလေ့လာမှုများအာရုံကိုဘက်လိုက်မှုကတော့စွဲလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်အရေးပါသောယန္တရားထည့်သွင်းစဉ်းစားသောအဘို့ဥစ္စာမှီခိုဖို့ analog တွေကိုညွှန်ပြ။ အဆိုပါနောက်ခံလေ့လာမှုပုံမှန်ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုဘာအသုံးပြုသူတစ်ဦးနမူနာများတွင်: IPA ဆီသို့အာရုံစူးစိုက်မှုဘက်လိုက်မှုနှင့်သဘောထားတွေအကြားဆက်ဆံရေးကိုစုံစမ်းစစ်ဆေး။
နည်းလမ်းများ: ဒီလေ့လာမှုမှာအထီး (60 = ၆၀) နှင့်အမျိုးသမီး (= = ၆၀) ပုံမှန်ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးအသုံးပြုသူများသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများနှင့်ပြုပြင်ထားသော Addiction Stroop (Bruce & Jones, 60) နှင့် Visual Probe Task (Mogg et al ။ , 2004) ကိုပြီးစီးခဲ့သည်။ ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအာရုံခံစားမှုရှာဖွေခြင်းနှင့် IPA အပေါ်သဘောထားများကိုမေးခွန်းလွှာများဖြင့်အကဲဖြတ်ခဲ့သည်။
ရလဒ်များ: ရလဒ်အထီးသင်တန်းသားများကိုအာရုံစူးစိုက်မှုဘက်လိုက်မှုနှင့် ပတ်သက်. သိသိသာသာပိုမိုမြင့်မားရမှတ်များ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအာရုံရှာနှင့် IPA: ဆီသို့သဘောထားတွေခဲ့ကြောင်းပြသပါ။ သို့သော်တည်းဖြတ်ဆုတ်ယုတ်ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်း: IPA ဆီသို့သဘောထားတွေအပေါ်လိင်နှင့်အာရုံကိုဘက်လိုက်မှုမဆိုသိသာ interaction ကထုတ်ဖေါ်ခဲ့ပါဘူး။
ကောက်ချက်: ယေဘုယျအားရလဒ်များကိုအာရုံကိုညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုဦးတည်ဘက်လိုက်မှုအဖြစ်: IPA ဆီသို့ဦးတည်လိုတဲ့သဘောထားကို၏ဆွေမျိုးအစှမျးသတ်တိနှငျ့ပတျသကျသောယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုဘာအသုံးပြုသူများသည်အတွက်ကွဲပြားခြားနားမှုအကြံပြုအပ်ပါသည်။ ဒီအမြင့်မားသောအာရုံကိုဘက်လိုက်မှုရမှတ်ယောက်ျားတစ်ဦးပိုမိုမြင့်မားညစ်ညမ်းစားသုံးမှုရည်ညွှန်းနိုင်နေချိန်မှာ: IPA, ယောက်ျားပိုမိုပျံ့နှံ့ဖြစ်အံ့သောငှါ၎င်းယူဆချက်ခိုင်မာစေ။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏တွေ့ရှိချက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုဦးတည်ထားတဲ့အာရုံကိုဘက်လိုက်မှုတစ်ခု IPA: ဖွံ့ဖြိုးဆဲနှင့်ထိန်းသိမ်းခြင်းတို့အတွက်အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးနှစ်ဦးစလုံးအတွက်အရေးပါယန္တရားဖြစ်အံ့သောငှါအကြံပြုအပ်ပါသည်။
Rudolf Stark, TIM ဟု KLUCKEN, Jan SNAGOWSKI, Sina WEHRUM-OSINSKY
ယုတ္တု Liebig တက္ကသိုလ်, Gießen, ဂျာမနီ
နောက်ခံသမိုင်းနဲ့ရည်ရွယ်ချက်: အကဲဆတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းအာရုံကိုဆွဲဆောင်။ သို့သော်ရိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုဒီအာရုံကိုဘက်လိုက်မှု modulates ရှိမရှိဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုဆွေးနွေးငြင်းခုံအောက်မှာနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။
နည်းလမ်းများ: ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုမှာကျနော်တို့ချဉ်းကပ်မှုအတွက်ဘက်လိုက်မှုကိုတိုင်းတာနှင့်အမျိုးသမီးနှင့်ယောက်ျားပေါင်းအတွက်အပြုအမူ avoidance taskto တစ် Joystick ကိုအသုံးပြုပါ။ အဆိုပါဘာသာရပ်များ, အပြုသဘောအနုတ်လက္ခဏာသို့မဟုတ်ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဓါတ်ပုံတွေကိုကျုံ့သို့မဟုတ်ချဲ့ရန်တစ် Joystick ဆွဲထုတ်သို့မဟုတ်တွန်းခဲ့ရသည်။ ဒါဟာတုံ့ပြန်မှုကြိမ်တိကျတဲ့ဘက်လိုက်မှုအတွက်ရရှိလာတဲ့, လှုပ်ရှားမှု (ချဉ်းကပ်မှုသို့မဟုတ်ဆုတ်ခွာ) ၏ဦးတည်ချက်နှင့် ပတ်သက်. ကွဲပြားနှင့်ဓာတ်ပုံများကိုများ၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတန်ဖိုးကိုယူဆခဲ့သည်။ နောက်ထပ်ကျွန်တော်တစ်ဦးမေးခွန်းလွှာသုံးပြီးရိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှု, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ drive ကိုနှင့်ဆက်စပ်သောတစ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ Construction တိုင်းတာ။
ဆွေးနွေးချက်: အဆိုပါရလဒ်များ conference မှာအသေးစိတ်အတွက်တင်ပြပါလိမ့်မည်နှင့်သက်ရောက်မှုတွေဆှေးနှေးမညျ
Aviv WEINSTEIN, RINAT ZOLEK, ANA က BABKIN, Michel LEJOYEUX
Ariel တက္ကသိုလ်, Ari'el ဣသရလေ
နောက်ခံသမိုင်းနဲ့ရည်ရွယ်ချက်: လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲ - မဟုတ်ရင် compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအဖြစ်လူသိများ - လေးနက်စိတ်ပညာလူမှုရေးပြဿနာတွေနဲ့အန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေအမူအကျင့်နဲ့ဆက်စပ်နေပါတယ်။ ဤလေ့လာမှု၏ရည်ရွယ်ချက်မှာညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်ကျဘာမှဆက်ကပ်အပ်နှံအင်တာနက်ပေါ်ရှိက်ဘ်ဆိုက်များကိုသုံးပါသောသူအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးအကြားလိင်ကွဲပြားခြားနားမှုစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ဖို့ဖြစ်တယ်။
နည်းလမ်းများ: အဆိုပါလေ့လာမှုကျဘာစွဲစမ်းသပ်မှု, ညစ်ညမ်းမေးခွန်းလွှာဘို့တဏှာနှင့် 267 ပါဝင်သူ (192 အထီးနှင့်အ 75 အမျိုးသမီး) အကြားနွေးထွေးမှုအပေါ်တစ်ဦးမေးခွန်းလွှာကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ အထီးအဘို့အသင်တန်းသားများကို '' ယုတ်အသက်အရွယ် 28.16 (SD က = 6.8) နှင့်အမျိုးသမီး 25.5 (SD က = 5.13) အတွက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ သူတို့ကအင်တာနက်ပေါ်ရှိညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်ကျဘာမှဆက်ကပ်အပ်နှံကြသည်က်ဘ်ဆိုက်များကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။
Regression analysis ၏ရလဒ်များအရညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ၊ ကျားမနှင့် cyberex တို့သည်ရင်းနှီးမှုအတွက်အခက်အခဲများကိုသိသိသာသာကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်ပြီး ၆၆.၁% သည်ရငျးနှီးမှုမေးခှနျးမေးခှနျး၌ပါဝငျသညျ။ ဒုတိယအချက်မှာဆုတ်ယုတ်ကျဆင်းမှုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ၊ ကျား၊ မနှင့်ရင်းနှီးသောဆက်ဆံရေးကိုတည်ဆောက်ရန်အခက်အခဲများသည်ဆိုက်ဘာဆက်ဆိပ်အသုံးပြုမှုအကြိမ်ရေကိုသိသိသာသာကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်ပြီး၎င်းသည်ဆိုက်ဘာဆက်သုံးစွဲမှု၏ကိန်းဂဏန်း၏ ၈၃.၇% ရှိသည်။ တတိယအချက်အနေဖြင့်အမျိုးသားများသည်အမျိုးသမီးများထက် cybersex အသုံးပြုမှုအကြိမ်ရေပိုမိုများပြား [t (66.1) = 83.7, p <2,224] နှင့်အပြာစာပေရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုလိုသူများပိုမိုမြင့်မားသောရမှတ်များ [t (1.97) = 0.05, p <2,265] နှင့်ပိုမိုမြင့်မားသောရမှတ်များ အမျိုးသမီးများထက်ရင်းနှီးသောဆက်ဆံရေးကိုဖွဲ့စည်းရာတွင်အခက်အခဲများတိုင်းတာသည့်မေးခွန်းလွှာ [t (3.26) = 0.01, p = 2,224] ။
ကောက်ချက်: ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက် compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအတွက်လိင်ကွဲပြားမှုအဘို့ယခင်အထောက်အထားများကိုထောက်ခံပါတယ်။ ငါတို့သည်လည်းလိင်စွဲလမ်းထဲမှာကျားမကွဲပြားမှုများအတွက်စိတ်ပညာဇီဝသက်သေအထောက်အထားများကိုဖော်ပြရန်ပါလိမ့်မယ်
Aviv WEINSTEIN, YONI ZLOT, မာယာ Goldstein
နောက်ခံသမိုင်းနှင့်ရည်မှန်းချက်: ချိန်းတွေ့နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရည်ရွယ်ချက်များအတွက်အင်တာနက်ကိုအသုံးပြုခြင်းအတွက်တိုးမြှင့်လမ်းကြောင်းသစ် ( "Tinder") လည်းမရှိ။ ဤလေ့လာမှု၏ရည်ရွယ်ချက်မှာချိန်းတွေ့ဘို့အင်တာနက်ကိုက်ဘ်ဆိုက်များကိုသုံးပါသူတို့တွင်လိင်စွဲလမ်းအပေါ်လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှု, အာရုံခံစားမှုရှာခြင်းနှင့်ကျား, မများ၏သက်ရောက်မှုကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ဖို့ဖြစ်တယ်။
နည်းလမ်းများ: 279 ပါဝင်သူ (128 အထီးနှင့်အ 151 အမျိုးသမီး) အသက်အပိုင်းအခြား: 18-38 နှစ်ပေါင်းအင်တာနက်ကို (ဂူးဂဲလ် drive ကို) အပေါ်မေးခွန်းဖြေသည်။ မေးခွန်းလူဦးရေဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်, အ Leibowitz လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုစကေး, Sensation စကေးပြုစုလျက်, လိင်စွဲစိစစ်စမ်းသပ် (SAST) ပါဝင်သည်။
ရလဒ်များ: အင်တာနက်ချိန်းတွေ့ခြင်းအသုံးချပရိုဂရမ်များအသုံးပြုသူများသည် SAST တွင်အသုံးပြုသူမဟုတ်သူများထက်ပိုမိုမြင့်မားသောရမှတ်များရှိသည် ([t (2,277) = 2.09; p <0.05)] ။ ဒုတိယအချက်မှာဆုတ်ယုတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းလူမှုရေးစိုးရိမ်စိတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲ (; p <.245 Beta ကို = .001) ၏ကှဲလှဲမှသိသိသာသာမှတ်ကြောင်းပြသခဲ့သည်။ ကျား / မရေးရာမေးခွန်းများမှရှာဖွေသည့်အာရုံခံစားမှုအပေါ်ရမှတ်များကလိင်စွဲလမ်းမှုရလာဒ်များသိသိသာသာအထောက်အကူမပြုပါ။
ဆွေးနွေးချက်နှင့်ကောက်ချက်: ဤလေ့လာမှု၏ရလဒ်များကိုအင်တာနက်ပေါ်တွင်ချိန်းတွေ့ applications များနှင့် ပတ်သက်. အသုံးပြုသူများကိုလိင်စွဲလမ်း၏အဆင့်မြင့်ရှိသည်ဖော်ပြသည်။ လိင်စွဲလူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှု၏အဆင့်ဆင့်ကိုလည်းကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်ပါ။ အဆိုပါလေ့လာမှုကိုလိင်စွဲသြဇာလွှမ်းမိုးသောအချက်များပေါ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏နားလည်မှုပိုမိုကောင်းမွန်စေတယ်။ ရလဒ်လူမှုရေးစိုးရိမ်စိတ်ထက်အာရုံရှာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရည်ရွယ်ချက်များအတွက်အင်တာနက်ကိုချိန်းတွေ့ applications များ၏အသုံးပြုမှုကိုထိခိုက်စေမယ့်အဓိကအချက်ကြောင်းကိုညွှန်ပြ
Alin WÉRY, KIM VOGELAERE, GAËLLE CHALLET-BOUJU, Francois-Xavier POUDAT, MARTHYLLE
LAGADEC, Charlotte BRÉGEAU, Joel BILLIEUX, Marie GRALL-BRONNEC
Louvain ၏ကက်သလစ်တက္ကသိုလ်, Louvain-la-Neuve, ဘယ်လ်ဂျီယံ
နောက်ခံသမိုင်းနဲ့ရည်ရွယ်ချက်: လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲ (SA) အပေါ်သုတေသန (ဥပမာလိင် chat နဲ့ webcam အခမဲ့ access ကိုညစ်ညမ်း) အင်တာနက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့်အွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများကထောက်ခံ, နောက်ဆုံးဆယ်စုနှစ်ကာလအတွင်းထွန်းကားခဲ့သည်။ သို့သော်လုပ် SA သုတေသနများ၏တိုးပွားလာနေသော်လည်း, အနည်းငယ်ပင်ကိုယ်မူလ data ကို Self-defined "လိင်စွဲ" ရှာကြံကုသမှု၏ဝိသေသလက္ခဏာများပေါ်ရရှိနိုင်ပါသည်။ ဤလေ့လာမှု၏ရည်ရွယ်ချက်မှာတစ်ဦးအထူးပြုပြင်ပလူနာအစီအစဉ်ကို In-ကုသမှုရှာကြံလူမျိုး၏နမူနာထဲမှာဝိသေသလက္ခဏာများ, အလေ့အထများနှင့် comorbidities ဖော်ပြရန်ရန်ဖြစ်ပါသည်။
နည်းလမ်းများ: ဒီလေ့လာမှုကဒီဇင်ဘာလ 72 မှဧပြီလ 2010 ထံမှ Nantes ၏တက္ကသိုလ်ဆေးရုံများတွင် Addictology နှင့်စိတ်ရောဂါကုသမှု၏ဦးစီးဌာန (ပြင်သစ်) တိုင်ပင်တဲ့သူ 2014 လူနာပါဝင်သည်။ ဆောင်ရွက်ချက်များ Self-အစီရင်ခံစာများနှင့်ပြင်ပလူနာ program ၏စိတ်ပညာရှင်တို့ကပြီးစီးခဲ့ hetero-မေးခွန်းပါဝင်သည်။
ရလဒ်များ: အဆိုပါ 72 လူနာအများစုမှာလူလတ်ပိုင်းခဲ့ကြသည် (M: 40.33; SD က: 10.93) ယောက်ျား hypersexuality, အန္တရာယ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေနှင့်ကျဘာသုံးရင်များအတွက်အဓိကအားဖြင့်တိုင်ပင်။ တချို့ကလူနာ paraphilia နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်ပေးအပ်သည်။ နမူနာများ၏အများစု comorbid စိတ်ရောဂါသို့မဟုတ်စွဲလမ်းရောဂါ, အနိမ့် Self-လေးစားမှုနှင့်စိတ်ဒဏ်ရာများ၏သမိုင်းပေးအပ်သည်။
ကောက်ချက်: လက်ရှိလေ့လာမှုလုပ် SA မကြာခဏသူ၏အပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်ရှုပ်ထွေးနေကြသည်မျိုးစုံလုပ် SA-related အပြုအမူတွေကြောင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာပင်သောင်းပြောင်းထွေလာရောနှောအန္တရာယ်အချက်များ (ဥပမာ, စိတ်ထိခိုက်ဖြစ်ရပ်များ, comorbid ပြည်နယ်များ, စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ variable တွေကို) နှင့်ဆက်စပ်သောကြောင်းမီးမောင်းထိုးပြ။ ကုသမှုအစီအစဉ်များကိုအကောင့်ထဲသို့မဟုတ်ဘဲစံထက်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်တဲ့ဒီသောင်းပြောင်းထွေလာရောနှောနှင့်မျက်နှာသာယူသင့်ပါတယ်။
အောက်ပါအတွက် 2017 အစည်းအဝေးခန်း FROM မှ THE abstraction ကွ
1General စိတ်ပညာ: သိမှတ်ခံစားမှုနှင့်အပြုအမူစွဲသုတေသန (CeBAR) အတွက်စင်တာ, Duisburg-အက်ဆင်း, သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှု Imaging, Duisburg, ဂျာမနီတက္ကသိုလ်များအတွက်ဂျာမဏီ 2Erwin အယ်လ် Hahn Institute ၏တက္ကသိုလ်; E-mail ကို: [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]
နောက်ခံသမိုင်းနဲ့ရည်ရွယ်ချက်: အင်တာနက်ဂိမ်းကစားရောဂါကြောင့်ဖြစ်နိုင်ဖွယ်နောက်ထပ်အာရုံကိုထိုက်သည့်သက်ဆိုင်ရာလက်တွေ့ဖြစ်ရပ်ဆန်း, ကြောင်းကိုညွှန်ပြသည့် DSM-5 ၏နောက်ဆက်တွဲတွင်ထည့်သွင်းထားသည်။ အင်တာနက်ကဂိမ်း၏စွဲလမ်းအသုံးပြုခြင်းကိုကျော်လွန်ပြီး, အင်တာနက် applications များ၏အခြားအမျိုးအစားများကိုလည်းဥပမာဆက်သွယ်ရေး applications များ, ညစ်ညမ်း, လောင်းကစားနှင့်စျေးဝယ် applications များအဘို့, စွဲလမ်းကိုအသုံးပြုထားကြောင်းအဖြစ်ဆွေးနွေးတင်ပြကြသည်။ ပစ္စည်းဥစ္စာများနှင့်အမူအကျင့်စွဲဧရိယာနှစ်ဦးစလုံးထံမှယခင်သုတေသနအပေါ်အခြေခံပြီး, အင်တာနက်သုံးစွဲပုံမမှန်များ၏တိကျသောအမျိုးအစားများ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု၏သီအိုရီထည့်သွင်းစဉ်းစားအကြံပြုကြသည်။
နည်းလမ်းများ: ကုန်အမှတ်တံဆိပ် et al အားဖြင့်အင်တာနက်ကိုစွဲလမ်း၏သီအိုရီမော်ဒယ်။ (2014) နှင့်ဒေါင်နှင့် Potenza (2014) ကသစ်တစ်ခုသီအိုရီမူဘောင်သို့ပေါင်းစည်းပြီ။ ကြောင်း ထို့အပြင်ခုနှစ်, တိကျတဲ့ Internet application များတစ်ခုစွဲလမ်းအသုံးပြုမှုအင်တာနက်ဂိမ်းကစားရောဂါနှင့်အခြားအမျိုးအစားများအပေါ်အလွန်မကြာသေးမီဆောင်းပါးများထည့်သွင်းစဉ်းစားပါပြီ။
ရလဒ်များ: တိကျတဲ့အင်တာနက်အသုံးပြုမှုကိုမမှန်များ၏Person˗Affect˗Cognition˗Execution၏ Interaction (ကျနော်-PACE) မော်ဒယ် (အမှတ်တံဆိပ် et al ။ , 2016) အကြံပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါငါ-PACE မော်ဒယ် variable တွေကို (ဥပမာ, စတိုင်, အင်တာနက်အသုံးပြုမျှော်လင့်ထားနှင့်သွယ်ဝိုက်အသင်းအဖွဲ့များကိုင်တွယ်ဖြေရှင်း) ကိုစိစစ်အများအပြား predisposing အချက်များ (ဥပမာ neurobiological နှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ) ကိုသတ်မှတ်ပါတယ်တဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုမော်ဒယ်အဖြစ်စဉ်းစားခြင်း, variable တွေကို (ဥပမာ, ကိုထိခိုက်ဖြန်ဖြေနေသည် လျှော့ inhibitory ထိန်းချုပ်မှုများနှင့်အလုပ်အမှုဆောင်လုပ်ငန်းဆောင်တာနှင့်အတူဖျော်ဖြေပွဲလုပျဆောငျရသောပြည်တွင်းရေးနှင့်ပြင်ပအစပျိုးရန်နှင့်သိမြင်မှုတုံ့ပြန်မှု) ။ ဦးနှောက်အဆင့်ကိုတွင်, limbic နှင့်မသန်စွမ်း-limbic အဆောက်အဦများ, ဥပမာပု ventral striatum နှင့် prefrontal ဒေသများအထူးသဖြင့် dorsolateral prefrontal cortex တစ်အလုပ်မဖြစ်အပြန်အလှန်, တိကျတဲ့အင်တာနက်အသုံးပြုမှုကိုမမှန်၏အဓိကအာရုံကြော Correlate စဉ်းစားသည်။ အင်တာနက်အသုံးပြုမှုကိုမမှန်ဤအာရုံကြောဆက်စပ်အပြုအမူစှဲ၏အခြားအမျိုးအစားများအကြောင်းကိုလူသိများသည်အဘယ်အရာကိုအတူတသမတ်တည်းဖြစ်ကြသည်။
ကောက်ချက်: အဆိုပါငါ-PACE မော်ဒယ်အလားအလာတိကျတဲ့အင်တာနက်အသုံးပြုမှုကိုမမှန်များ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအခြေခံသည့်ယန္တယားအကျဉ်းချုပ်နှင့်လည်းစွဲလုပ်ငန်းစဉ်၏ယာယီဒိုင်းနမစ်ကိုရောင်ပြန်ဟပ်။ ဒီ model အတွက်အကျဉ်းချုံးအဆိုပါယူဆချက်ထိုကဲ့သို့သောအင်တာနက်ဂိမ်းကစား, လောင်းကစား, ညစ်ညမ်း-ကြည့်, စျေးဝယ်များနှင့်ဆက်သွယ်ရေးအဖြစ်အင်တာနက်အသုံးပြုမှုကိုမမှန်များ၏တိကျသောအမျိုးအစားများများအတွက်သတ်မှတ်ရပါမည်။
Stephanie ANTONS1 * Jan SNAGOWSKI1 နှင့်မဿိ BRAND1, 2
1General စိတ်ပညာ: သိမှတ်ခံစားမှု နှင့် အပြုအမူစွဲသုတေသန (CeBAR) အတွက်စင်တာ, Duisburg-အက်ဆင်း၏တက္ကသိုလ်, သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှု Imaging, အက်ဆင်းဘို့ဂျာမဏီ 2Erwin အယ်လ် Hahn Institute က, ဂျာမနီ * E-mail ကို: [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]
နောက်ခံသမိုင်းနဲ့ရည်ရွယ်ချက်: မကြာမီကလေ့လာမှုများအင်တာနက်ညစ်ညမ်း-ကြည့်ရှုရောဂါ (IPD) တွင်သိမြင်မှုဖြစ်စဉ်များနှင့်အတူစွဲ-related တွေကိုများ၏နှောင့်ယှက်စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာ-အသုံးပြုမှုမမှန် (Sud) အတွက်အစီရင်ခံသူတို့အားနှိုင်းယှဉ်ရလဒ်များကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ တိကျတဲ့အင်တာနက်အသုံးပြုမှုကိုမမှန်များ၏ငါ-PACE (Personal Affect˗Cognition˗Execution၏ Interaction) မော်ဒယ်မှာ, တဏှာ, အာရုံကိုဘက်လိုက်မှုနှင့်အလုပ်မဖြစ် inhibitory ထိန်းချုပ်မှုအင်တာနက်အသုံးပြုမှုများ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအခြေခံအဓိကလုပ်ငန်းစဉ်များဖြစ်ကြောင်းအကြံပြုထားသည် ပုံမမှန် (အမှတ်တံဆိပ် et al ။ , 2016) ။ လက်ရှိလေ့လာမှုမှာကျနော်တို့အထူးသဖြင့်အာရုံကိုဘက်လိုက်မှု, inhibitory ထိန်းချုပ်မှုနှင့် IPD လက္ခဏာတွေ၏အသင်းအဖွဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေး။
နည်းလမ်းများ: ဤအဆက်ဆံရေးကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်စေရန်, IPD ဆီသို့ဦးတည်မြင့်အနိမ့်လိုတဲ့သဘောထားကိုနှင့်အတူအထီးသင်တန်းသားများကိုနှိုင်းယှဉ်နှစ်ခုစမ်းသပ်လေ့လာမှုများပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်ခဲ့ကြသည်။ IPD ဆီသို့ဦးတည်လိုတဲ့သဘောထားကိုအင်တာနက်ကိုလိင်ဆိုက်များအတွက်ပြုပြင်ထားသောအင်တာနက်ကိုစွဲလမ်းမှုစမ်းသပ်ခြင်း၏ရေတိုဗားရှင်းနဲ့ (Laier et al ။ , 2013) အကဲဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ ပထမဦးဆုံးလေ့လာမှုမှာတော့ 61 သင်တန်းသားများကိုညစ်ညမ်းလှုံ့ဆော်မှုနှင့်အတူပြင်ဆင်ခဲ့သည်သော Visual စုံစမ်းစစ်ဆေး Task ကို (Mogg et al ။ , 2003) ပြီးစီးခဲ့သည်။ ဒုတိယလေ့လာမှုမှာတော့ 12 ပါဝင်သူနှစ်ဦးကိုပြုပြင်မွမ်းမံ Stop-Signal လုပ်ငန်းများ (Logan et al ။ , 1984) တာဝန်-ဆီလျှော်ကြားနေနှင့်ညစ်ညမ်းလှုံ့ဆော်မှုပါဝင်သည်ရာနှင့်အတူယခုအချိန်ထိစုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့ကြသည်။
ရလဒ်များ: IPD ဆီသို့ဦးတည်မြင့်မားတဲ့သဘောထားတွေကိုအတူသင်တန်းသားများကို IPD ဆီသို့အနိမ့်လိုတဲ့သဘောထားကိုနှင့်အတူသင်တန်းသားများကိုနှိုင်းယှဉ်လျှင်ညစ်ညမ်းလှုံ့ဆော်မှုမှပိုမိုမြင့်မားအာရုံကိုဘက်လိုက်မှုပြသခဲ့သည်။ ပထမဦးဆုံးဒုတိယလေ့လာမှုကနေလေ့လာဆန်းစစ် IPD ဆီသို့ဦးတည်မြင့်မားတဲ့သဘောထားတွေနဲ့အတူယောက်ျားညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများနှင့်အတူရင်ဆိုင်အထူးသဖြင့်လာသောအခါရပ်နားစမ်းသပ်မှုတွေအတွက်ကြာကြာတားစီးကြိမ်နှင့်ပိုပြီးအမှားအယွင်းများရှိခဲ့ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။
ကောက်ချက်: ရလဒ်များ IPD နှင့် Sud အကြားတူညီဘို့နောက်ထပ်သက်သေသာဓကသည်။ လက်တွေ့သက်ရောက်မှုဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။
အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေ၏အကဲဖြတ်, ကုသမှုနှင့် relapse ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးအတွက်သတိ-based ကြားဝင်: လက်တွေ့အလေ့အကျင့်ကနေအတွေ့အကြုံများ
GRETCHEN R. BLYCKER1 နှင့် MARC N. POTENZA2
Rhode Island, Kingston, RI က, အမေရိကန်နိုင်ငံ 1Connecticut စိတ်ကျန်းမာရေးစင်တာနှင့်ဆေးပညာ၏ယေးလ်တက္ကသိုလ်ကျောင်း, New Heaven, CT, USA သို့ * E-mail ကို၏ 2Halsosam ကုထုံး, ဂျိမ်းစ်တောင်းတွင်, RI ကနှင့် University: [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]
နောက်ခံသမိုင်းနဲ့ရည်ရွယ်ချက်: compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကိုအလွန်အကျွံနှင့်ပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု, disorders hypersexuality နှင့်လိင်ဖောက်ပြန်အပါအဝင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများတစ်အကွာအဝေးပါဝင်သည်။ များစွာသောတစ်ဦးချင်းစီနှင့်စုံတွဲများ compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကနေဆငျးရဲခံရပေမယ့်, အတော်လေးအနည်းငယ်ကုသမှုရှာမျက်မြင်လက်တွေ့အတည်ပြုကုသမှုအကြီးအကျယ်ချို့တဲ့နေကြသည်။ အရှေ့ဒဿန၏သဘောတရားစိတ်ဖိစီးမှုလျှော့ချရေးနှင့်အခြားစိတ်ရောဂါနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိုးရိမ်ပူပန်မှုများအဘို့အမျက်မြင်လက်တွေ့အတည်ပြုကုသမှုသို့ထည့်သွင်းခဲ့ကြသည်။ သို့သျောလညျး, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးကိုသူတို့ရဲ့လျှောက်လွှာလျော့နည်းကောင်းစွာစုံစမ်းစစ်ဆေးနေပါတယ်။
နည်းလမ်းများ: တစ်ဦးအဘိဓါန် Eastern-သြဇာလွှမ်းမိုးမှု Hakomi လက်တွေ့လေ့ကျင့်ရေးကတဆင့်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ, ရငျးနှီး-oriented နဲ့ဆက်ဆံရေးဟာကျန်းမာရေးတိုးတက်အောင်ရည်ရွယ်ကုထုံးကြားဝင်ဖို့သတိ-based ချဉ်းကပ်မှုလက်တွေ့အလေ့အကျင့်အတွက်ဖွံ့ဖြိုးပြီးနှင့်စူးစမ်းခဲ့သည်။ လက်တွေ့အလေ့အကျင့်ကနေအမှုပေါင်း compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုခံစားနေရပြီးလူဦးကူညီရန်ကုထုံးချဉ်းကပ်မှုသို့အနာဂတ်တိုက်ရိုက်လက်တွေ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများအတွက်အခြေခံများကိုတစ်ဦးနည်းလမ်းများအဖြစ်ပေးအပ်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
ရလဒ်များ: ယောက်ျား, မိန်းမနှင့်စုံတွဲများအနေဖြင့်ရောဂါဖြစ်ပွားမှုကိုပေးအပ်ပါလိမ့်မည်။ သတိ-based ကြားဝင်တစ်ဦးချင်းစီ compulsive နှင့်စွဲလမ်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကိုလျှော့ချရန်နှင့်ကိုဦးတည်ရွှေ့ခြင်းနှင့်ကျန်းမာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကြားဆက်ဆံရေးလုပ်ငန်းဆောင်တာဆှေးနှေးမညျမှီကူညီပေးခဲ့ပုံကိုဥပမာများ။ ကောက်ချက်: လက်တွေ့အလေ့အကျင့်၌, သတိသမ္-based ချဉ်းကပ်တစ်ဦးချင်းစီ၏ကျယ်ပြန့်အကွာအဝေးနှင့်အတူ resonate နှင့်လူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာများကိုပိုမိုချိတ်ဆက်ကျန်းမာပုံစံများဖန်တီးခြင်းအတွက်အထောက်အကူပြုကြောင်းကျွမ်းကျင်မှုဖွံ့ဖြိုးကူညီပေးသည်။ အနာဂတ်လေ့လာမှုများကျပန်းလက်တွေ့စမ်းသပ်မှုများတွင်တိုက်ရိုက် compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုခံစားနေရပြီးတစ်ဦးချင်းစီနှင့်စုံတွဲများအဘို့သတိ-based ချဉ်းကပ်မှု၏ထိရောက်မှုနှင့်သည်းခံစိတ်ဆနျးစစျသငျ့သညျ။
အပြုအမူနှင့် neuroimaging တွေ့ရှိချက်: အင်တာနက်ညစ်ညမ်း-ကြည့်ရှုရောဂါအတွက် Cue-reactivity ကိုနှင့်တဏှာ
ဿိ BRAND1,2 *
1General စိတ်ပညာ: သိမှတ်ခံစားမှုနှင့်အပြုအမူစွဲသုတေသန (CeBAR) အတွက်စင်တာ, Duisburg-အက်ဆင်း၏တက္ကသိုလ်, သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှု Imaging, Duisburg-အက်ဆင်း၏တက္ကသိုလ်များအတွက် Germany2Erwin အယ်လ် Hahn Institute က, ဂျာမနီ * E-mail ကို: [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]
နောက်ခံသမိုင်းနဲ့ရည်ရွယ်ချက်: အင်တာနက်ညစ်ညမ်း-ကြည့်ရှုရောဂါ (IPD) တိကျသောအင်တာနက်အသုံးပြုမှုကိုမမှန်များထဲမှအမျိုးအစားထည့်သွင်းစဉ်းစားပေမယ့်အလားအလာယေဘုယျ hypersexual အပြုအမူနှင့်အတူအချို့သောယန္တရားများမျှဝေသည်။ Cue-reactivity ကိုနှင့်တဏှာပစ္စည်းဥစ္စာများနှင့်အမူအကျင့်စွဲသုတေသနနှစ်ဦးစလုံးအတွက်အရေးကြီးသဘောတရားများဖြစ်ကြသည်။
နည်းလမ်းများ: ဤရွေ့ကားသဘောတရားများကိုမကြာသေးမီက hypersexual အပြုအမူနှင့်အတူဘာသာရပ်များနှင့် IPD နှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီအတွက်စုံစမ်းစစ်ဆေးပြီ။ အမူအကျင့် cue-reactivity ကိုနှင့်တဏှာ၏ဆက်စပ်မှုအဖြစ် neuroimaging စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေကနေရလဒ်တွေကိုဖြေရှင်းလေ့လာရေးအကျဉ်းချုံးထားပါသည်။
ရလဒ်များ: အမူအကျင့်ဒေတာ cue-reactivity ကိုနှင့်တဏှာ IPD အခြေခံယန္တရားသောသီအိုရီယူဆချက်ကိုထောကျပံ့။ အမူအကျင့်ဒေတာတဏှာ၏ပုဂ္ဂလဒိဋ္ခံစားမှုဖို့ ventral striatum တစ်အလှူငွေအကြံပြုထားတဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့ neuroimaging တွေ့ရှိချက်ကပြည့်စုံနေကြသည်။ ဆုလာဘ်မျှော်လင့်ခြင်းနှင့်ဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့တွင်ပါဝင်ပတ်သက်နေကြသည်သော ventral striatum နှင့်နောက်ထပ်ဦးနှောက်ဧရိယာ၏ Cue-သွေးဆောင် hypersensitivity, IPD ၏အရေးပါသောဦးနှောက် Correlate စဉ်းစားနိုင်ပါတယ်။
ကောက်ချက်: IPD အတွက် cue-reactivity ကိုနှင့်တဏှာအပေါ်တွေ့ရှိချက်များသတ်သတ်မှတ်မှတ်အင်တာနက်အသုံးပြုမှုကိုမမှန်များ၏ပုဂ္ဂိုလ်-အပေါ်ဘယ်လိုသက်ရောက်မှု-သိမှတ်ခံစားမှု-Executive (I-PACE) မော်ဒယ်၏မကြာသေးမီကအကြံပြု Interaction နှင့်ကိုက်ညီဖြစ်ကြသည်။ ဒါကမော်ဒယ်ဆန္ဒပြည့်နှင့်အားဖြည့်သင်ယူမှုကပိုများပါတယ်တစ်ဦးချင်းစီကသူတို့အပြုအမူအပေါ်တစ်ဦးလျော့နည်းသွားထိန်းချုပ်မှုဖွံ့ဖြိုးစေသည်ကိုတိကျတဲ့လှုံ့ဆော်မှုနှင့်အတူရင်ဆိုင်ခံရသည့်အခါ cue-reactivity ကိုနှင့်တဏှာ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု, အထောက်အကူပြုကြောင်းအကြံပြုထားသည်။ IPD နှင့် hypersexual အပြုအမူများအတွက်ငါ-PACE မော်ဒယ်၏အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်ဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။
ဆယ်ကျော်သက် hypersexuality: ကတစ်ဦးကွဲပြားရောဂါလား?
YANIV EFRATI1 နှင့် Mario MIKULINCER1
စိတ်ပညာ၏ 1Baruch Ivcher ကျောင်း, Interdisciplinary စင်တာ (IDC မှ) Herzliya, Herzliya, အစ္စရေး, E-mail: [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]
နောက်ခံသမိုင်းနဲ့ရည်ရွယ်ချက်: ဆယ်ကျော်သက် hypersexuality နှင့်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးသဘောထားအတွင်းက၎င်း၏အနေအထား, ဒီတင်ဆက်မှုများဘာသာရပ်ဖြစ်ပါသည်။ ဆန်းစစ်အဆိုပါကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးသဘောထားပူးတွဲမှုစတိုင်, စိတ်ထား, ကျား, မ, ယာနျဘာသာတရားကိုနှင့် psychopathology ခဲ့ကြသည်။
နည်းလမ်းများ: ဒသမစာရင်းသွင်းခေတ်ကာလ 311-184 (M = 127, SD က = .16) အကြားနိုင်အောင်ပြု 18 High-ကျောင်းကမြီးကောင်ပေါက် (16.94 ယောက်ျားလေးများ 65 မိန်းကလေးများ), မှ (ဎ = 135, 43.4%) နှင့်ဒွါဒသမ (ဎ = 176, 56.6%) အဆင့်,) 95.8% (အဘယ်သူကိုအများစုဇာတိအစ္စရေးခဲ့ကြသည်။ ယာနျဘာသာတရားကိုအသုံးပြုပုံ 22.2% လောကအဖြစ်မိမိတို့ကိုယ်ကိုသတ်မှတ်, 77.8% စျယာနျဘာသာတရားကိုအမျိုးမျိုးဒီဂရီကဖော်ပြခဲ့သည်။ ငါးဖြစ်နိုင်သောပင်ကိုယ်မူလမော်ဒယ်များအားလုံးလက်ရှိသီအိုရီနှင့် hypersexuality အပေါ်သုတေသနအပေါ်အခြေခံလေ့လာခဲ့ကြသည်။
ရလဒ်များနှင့်နိဂုံး: စတုတ္ထမော်ဒယ် psychopathology နှင့် hypersexuality လွတ်လပ်သောမမှန်ဖြစ်ကြပြီးအာမခံလုပ်ငန်းစဉ်သည်အားဖြင့် related ကြသည်မဟုတ်ကြောင်းညွှန်ပြ, ဒေတာတွေနဲ့သဟဇာတဖြစ်ရှာတွေ့ခဲ့သည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, ယာနျဘာသာတရားကိုနှင့်ကျား, မခန့်မှန်းသော်လည်း, စိတ်ထားနှင့်ပူးတွဲမှုအကြားဆက်ဆံရေးကသူတို့ကို၏လွတ်လပ်သောဖြစ်ပါသည် - လုပ်ငန်းစဉ်ကောင်လေးတစ်ယောက်နဲ့မိန်းကလေးနှစ်ဦးစလုံး, ဘာသာရေးနှင့် Non-ဘာသာရေးမြီးကောင်ပေါက်အတွက်တူညီသည်။ ထို့အပြင်မှာ oxytocin နှင့်သူ့ဟာသူတစ်ဦးရောဂါအဖြစ်ဆယ်ကျော်သက် hypersexuality ၏တည်နေရာကိုနားလည်၏ကုထုံးအဓိပ္ပာယ်ကိုထိခိုက်နိုင်သောသက်ရောက်မှုနှင့်အတူ hypersexuality နှင့်ဆက်စပ်သောနိုင်ပါသည်။
ပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများနှင့်ရောဂါဗေဒလောင်းကစားသမားတွေအကြားဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့ကာလအတွင်းပြောင်းလဲ orbitofrontal reactivity ကို
မာတေယူချ် GOLA1,2 * PhD, MAŁGORZATA WORDECHA3, မိခါလသည် LEW-STAROWICZ5 MD, Ph.D, MARC N. POTENZA6,7 MD, Ph.D, Artur MARCHEWKA3 PhD နှင့် GUILLAUME SESCOUSSE4 PhD
တွက်ချက်အာရုံကြောသိပ္ပံ, ဦးနှောက်ကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးသောကွန်ပျူတာ Institute ကကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်, San Diego မှတက္ကသိုလ် San Diego မှ, စိတ်ပညာ၏အမေရိကန်နိုင်ငံ 1 Institute မှ, သိပ္ပံ၏ပိုလန်အကယ်ဒမီ, Warsaw ကို, ဦးနှောက် Imaging ၏ပိုလန်2ဓာတ်ခွဲခန်း, Neurobiology စင်တာများ၏စမ်းသပ်ဇီဝဗေဒ၏ Nencki Institute မှအဘို့အ3Swartz ကိုရေးစင်တာ သိပ္ပံ, ဝါဆော၏ပိုလန်အကယ်ဒမီ, ပိုလန်4Radboud တက္ကသိုလ်, ဦးနှောက်, သိမှတ်ခံစားမှုနှင့်အပြုအမူ, Nijmegen, နယ်သာလန်5III ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု, စိတ်ရောဂါကုသမှုနှင့် Neurology ၏ Institute ၏ဦးစီးဌာန, ဝါဆော, စိတ်ရောဂါကုသမှုနှင့် Neurobiology ၏ပိုလန်6ဦးစီးဌာနများ, ကလေးလေ့လာမြစင်တာနှင့်များအတွက် Donders Institute က CASAColumbia, ဆေးပညာ, New Heaven, CT, USA သို့7Connecticut စိတ်ကျန်းမာရေးစင်တာ, New Heaven, CT, USA သို့ * E-mail ကို၏ယေးလ်ကျောင်း: [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]
နောက်ခံသမိုင်းနဲ့ရည်ရွယ်ချက်: မကြာခဏညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုငယ်ရွယ်အထီး (Hald, 2006) တို့တွင်အမြင့်မားသက်ဆိုင်ရာဖြစ်ပါတယ်။ အများစုအဘို့, ညစ်ညမ်းကြည့်ဖျော်ဖြေမှုပုံစံဖြစ်ပါသည်, သို့သော်အချို့တစ်ဦးချင်းစီအဘို့အလွန်အကျွံတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းဖြင့်လိုက်ပါသွားပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု (PPU) (Gola et al ။ , 2016) ရှာကြံကုသမှုများအတွက်အကြောင်းပြချက်ဖြစ်ပါတယ်။ အဘယ်အရာကိုပြဿနာနှင့်ပုံမှန်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများကိုခွဲခြား? ဘယ်လိုထိုကဲ့သို့သောဥပမာရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းကဲ့သို့သောအခြားပြဿနာအပြုအမူတွေ, တူတဲ့သနည်း?
နည်းလမ်းများ: ကျနော်တို့ PPU နှင့် 28 များအတွက်ကုသမှုရှာကြံ 24 လိင်ကွဲအထီးအကြားဆုလာဘ်-related '' အကြိုက် '' ကနေ '' လို '' disentangling cue-ဆက်စပ်, ခေါ်ဆောင်သွားခြင်းနှင့်ငွေကြေးဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုဆီသို့ဦးနှောက် reactivity ကိုဆန်းစစ် fMRI နည်းစနစ်ထိန်းချုပ်မှုလိုက်ဖက်အသုံးပြုခြင်း (Gola et al ။ , 2016) ။ အလားတူလုပ်ထုံးလုပ်နည်း (Sescousse et al ။ , 2013) ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းအပေါ်လေ့လာမှုများအတွက်ယခင်ကအသုံးပြုခဲ့လေသည်။
ရလဒ်များ: ကျနော်တို့မတိုင်မီပြသထားသကဲ့သို့ (Gola et al ။ , 2016) ထိန်းချုပ်မှုဘာသာရပ်များနှင့်နှိုင်းယှဉ် PPU ဘာသာရပ်များယခင်၏အရာအတိအကျတူတဲ့ရလဒ်များကို, အထူးသတွေကိုငွေကြေးအကျိုးအမြတ်ခန့်မှန်းတွေကိုအဘို့အခေါ်ဆောင်သွားဓါတ်ပုံတွေကိုခန့်မှန်းပေမယ့်မဦးနှောက်ကိုဆုလာဘ်ဆားကစ် (ventral striatum) ၏တိုးမြှင့် activation ပြသ လောင်းကစားဝိုင်းရောဂါနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီအပေါ်တူညီတဲ့နည်းလမ်းနှင့်အတူလေ့လာမှု (et al Sescousse, ။ , 2013) ။ orbitofrontal cortex (OFC) - ဒီနေရာမှာကျနော်တို့ဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့တွင်ပါဝင်ပတ်သက်သည်အခြားဦးနှောက်ဒေသအပေါ်အာရုံစူးစိုက်။ ကပြခဲ့သည့်အတိုင်း (ထိုကဲ့သို့သောပိုက်ဆံသို့မဟုတ်လူမှုရေးစစ်ကူကဲ့သို့) OFC ဖြစ်စဉ်ကိုအလယ်တန်းဆုလာဘ် anterior စဉ်ကျန်းမာဘာသာရပ်များအတွက် evolutionally အဟောင်းတွေ posterior OFC, မူလတန်းဆုလာဘ် (အစားအသောက်နှင့်လိင်) ၏အပြောင်းအလဲနဲ့တွင်ပါဝင်ပတ်သက်နေပါတယ်။ အနုပညာ aOFC ၏ဤပြည်နယ်အတိုင်းငါတို့လေ့လာမှု၌ထိန်းချုပ်မှုဘာသာရပ်များအတွက်ခေါ်ဆောင်သွားဆုလာဘ်ထက်ငွေကြေးအကျိုးအမြတ်များအတွက်ပိုမိုမြင့်မားတက်ကြွဖော်ပြတစ်ခုတည်းသောရွယ်ခဲ့သည်။ ဒါပေမယ့်စိတ်ဝင်စားစရာ PPU များအတွက် pOFC မပြောင်းလဲရှိနေဆဲနေစဉ် aOFC, ငွေကြေးဆုလာဘ်ထက်ခေါ်ဆောင်သွားရုပ်ပုံများကိုပိုမိုတက်ကြွခဲ့ subjects ။ aOFC ၌ဤပြောင်းကုန်ပြီပမာဏကို PPU ပြင်းထန်မှုအတိုင်းအတာမှဆက်စပ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ အပြောင်းအလဲများရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းဆန့်ကျင်ဘက်ပုံစံနှင့်အတူဘာသာရပ်များများထဲတွင်လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့သည်: ထိန်းချုပ်မှုနှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါမှာ aOFC Active မပြောင်းလဲရှိနေဆဲစဉ် pOFC, ငွေကြေးဆုလာဘ်ပို activated ခဲ့သည် (Sescousse et al, 2013 ။ ) ။
ကောက်ချက်: ကျွန်ုပ်တို့၏ရလဒ်များကို PPU ဘာသာရပ်များငွေကြေးနှင့် Non-ငွေကြေးဆုလာဘ်၏အမှု၌ရောဂါဗေဒလောင်းကစားသမားတွေမှအလားတူခေါ်ဆောင်သွားခြင်းနှင့် Non-ခေါ်ဆောင်သွားဆုလာဘ်၏တန်ဖိုးကိုအကြားကွာခြားအတွက်အခက်အခဲများတွေ့ကြုံခံစားစေခြင်းငှါအကြံပြုအပ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရလဒ်များကို PPU အလုပ်လုပ်တဲ့အပြောင်းအလဲများပေမယ့်လောင်းကစားရောဂါအတွက်ကောင်းစွာ-ဖော်ပြထားအာရုံကြောများနှင့်အမူအကျင့်ပုံစံများနဲ့တူအောင်ကိုလည်းပြသပါ။
hypersexual ရောဂါနှင့်အတူယောက်ျားအတွက် Interpersonal အကြမ်းဖက်မှု, အစောပိုင်းဘဝဒုက္ခနှင့်သတ်သေအပြုအမူ
JUSSI JOKINENa, ခ * Andreas CHATZITTOFISa, Josephine SAVARDa, ပတေရုNORDSTRÖMa, Jonas HALLBERGc, KATARINA ÖBERGcနှင့် Stefan ARVERc
လက်တွေ့အာရုံကြောသိပ္ပံ / စိတ်ရောဂါကုသမှု, Karolinska Institute က, Karolinska တက္ကသိုလ်ဆေးရုံ, Solna, SE-171 76 စတော့ဟုမ်း, လက်တွေ့သိပ္ပံ / စိတ်ရောဂါကုသမှု, Umeåတက္ကသိုလ်, Umeå, ဆေးပညာ Swedenc ဦးစီးဌာန, Karolinska Institute က, Karolinska တက္ကသိုလ်ဆေးရုံ, ဆွီဒင် * ၏ Swedenb ဦးစီးဌာန၏ဦးစီးဌာန E-mail ကို: [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]
နောက်ခံသမိုင်းနဲ့ရည်ရွယ်ချက်: အနည်းငယ်လေ့လာမှုများ hypersexual ရောဂါအတွက်ကလေးဘဝဒုက္ခ, လူ့အကြမ်းဖက်မှုနှင့်သတ်သေအပြုအမူစုံစမ်းစစ်ဆေးပါပြီ။ ဤလေ့လာမှု၏ရည်ရွယ်ချက်မှာကျန်းမာစေတနာ့ဝန်ထမ်းနှိုင်းယှဉ် hypersexuality နှင့်အတူအမျိုးသားများတွင် Self-အစီရင်ခံလူ့အကြမ်းဖက်မှုများအကဲဖြတ်ရန်နှင့်လူ့အကြမ်းဖက်မှုအတွေ့အကြုံနှင့်သတ်သေအပြုအမူအကြားအသင်းအဖွဲ့လေ့လာဖို့ဖြစ်တယ်။
နည်းလမ်းများ: အဆိုပါလေ့လာမှု hypersexual ရောဂါ (HD) နှင့်အတူ 67 အထီးလူနာများနှင့် 40 အထီးကျန်းကျန်းမာမာစေတနာ့ဝန်ထမ်းပါဝင်သည်။ အဆိုပါကလေးဘဝစိတ်ဒဏ်ရာမေးခွန်းလွှာ-က Short Form ကို (CTQ-SF) နှင့်, Karolinska Interpersonal အကြမ်းဖက်မှုအကြေးခွံ (KIVS) ကလေးတစ်ဦးအဖြစ်အစောပိုင်းဘဝဒုက္ခနှင့်မိမိကိုယ်ါအကြမ်းဖက်မှုများအကဲဖြတ်နှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူအသက်တာ၌အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ Suicide အပြုအမူ (ကြိုးစားမှုများနှင့် ideation) Mini-အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအာရုံကြောဆိုင်ရာစိတ်ရောဂါအင်တာဗျူး (MINI 6.0) နှင့် Montgomery-Åsbergစီးပွားပျက်ကပ်ခဲ့သည် Rating စကေး-ကိုယ်ပိုင်အဆင့်သတ်မှတ်ချက် (Madre-S) နှင့်အတူအကဲဖြတ်ခဲ့သည်။
ရလဒ်များ: HD ကိုအတူယောက်ျားကျန်းမာစေတနာ့ဝန်ထမ်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကအရွယ်ရောက်သူအဖြစ်ငယ်စဉ်ကလေးဘဝအကြမ်းဖက်မှုများပိုမိုထိတွေ့မှုနှင့်ပိုပြီးအကြမ်းဖက်အပြုအမူကဖော်ပြခဲ့သည်။ သတ်သေရန်ကြိုးပမ်းမှု (ဎ = 8, 12%) သတ်သေရန်ကြိုးပမ်းမှုမရှိဘဲ hypersexual လူတို့အားနှိုင်းယှဉ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှုတိုင်းတာခြင်း, ကလေးတစ်ဦးအဖြစ်စုစုပေါင်းရမှတ်ပိုပြီးအသုံးအကြမ်းဖက်မှုတစ်ခုအရွယ်ရောက်ပြီးသူအဖြစ်အကြမ်းဖက်မှုများပိုမိုထိတွေ့မှုအဖြစ် CTQ-SF subscale အပေါ်ပိုမိုမြင့်မားရမှတ်မြင့်မားတဲ့ KIVS အစီရင်ခံတင်ပြ ။
ကောက်ချက်: Hypersexuality သတ်သေရန်ကြိုးပမ်းမှုနှင့်အတူလူနာအတွက်အမြင့်မားဆုံးစုစုပေါင်းရမှတ်နှင့်အတူလူ့အကြမ်းဖက်မှုများနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။
hypersexual ရောဂါနှင့်အတူယောက်ျားအတွက် HPA ဝင်ရိုး related မျိုးဗီဇ၏ methylation
JUSSI JOKINENa, ခ * Adrian BOSTRÖMc, Andreas CHATZITTOFISa, KATARINA GÖRTSÖBERGd, ယောဟန် N. FLANAGANd, Stefan ARVERd နှင့် HELGI SCHIÖTHc
လက်တွေ့အာရုံကြောသိပ္ပံ / စိတ်ရောဂါကုသမှု, Karolinska Institute ကတစ်ဌာန, စတော့ဟုမ်း, လက်တွေ့သိပ္ပံ Swedenb ဦးစီးဌာန / စိတ်ရောဂါကုသမှု, Umeåတက္ကသိုလ်, Umeå, အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ Swedenc ဦးစီးဌာန, Uppsala တက္ကသိုလ်, Uppsala, ဆေးပညာ Swedend ဦးစီးဌာန, Karolinska Institute က, စတော့ဟုမ်း, ဆွီဒင် * e- မေးလ်: [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]; [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]
နောက်ခံသမိုင်းနဲ့ရည်ရွယ်ချက်: compulsive, Impulse နှင့်အမူအကျင့်စွဲ၏အစိတ်အပိုင်းများနှင့်အတူ Non-paraphilic လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒရောဂါအဖြစ်သတ်မှတ်ပါတယ် Hypersexual Disorder (HD ကို), အ DSM5တစ်ဦးရောဂါလက္ခဏာတွေကိုအဖြစ်အဆိုပြုခဲ့ပါတယ်။ ဘုံ neurotransmitter စနစ်များနှင့် dysregulated hypothalamic-pituitary-adrenal (HPA) ဝင်ရိုး function ကိုအပါအဝင် HD နှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုရောဂါအကြားတချို့ကထပ် features တွေသတင်းပို့ခဲ့ကြသည်။ ဤလေ့လာမှု၌, HD နှင့် 67 ကျန်းမာအထီးစေတနာ့ဝန်ထမ်းရောဂါ 39 အထီးလူနာပါဝင်သောကျနော်တို့ဗီဇလုပ်ငန်းထိန်းချုပ်မှုပရိုဖိုင်း၏ပြုပြင်မွမ်းမံ hypersexuality နှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသောအတွက် HPA-ဝင်ရိုး coupled စင်ကာပူအခြေစိုက် CPG-က်ဘ်ဆိုက်များကိုသိရှိနိုင်ဖို့ရည်ရွယ်။
နည်းလမ်းများ: အဆိုပါမျိုးရိုးဗီဇ-ကျယ်ပြန့် methylation ပုံစံ 850 K သည်စင်ကာပူအခြေစိုက် CPG က်ဘ်ဆိုက်များကျော်၏ methylation ပြည်နယ်တိုင်းတာခြင်း, အ Illumina Infinium methyl EPIC BeadChip သုံးပြီးတပြင်လုံးကိုသွေးထဲမှာတိုင်းတာခဲ့သည်။ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမတိုင်မီကကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ DNA methylation ပုံစံစံ protocols များအရသိရသည် Pre-လုပ်ငန်းများ၌နှင့်သွေးဖြူဆဲလ်အမျိုးအစားသောင်းပြောင်းထွေလာရောနှောများအတွက်ချိန်ညှိခဲ့ပါတယ်။ ကျနော်တို့ကအောက်ပါ HPA-ဝင်ရိုး coupled မျိုးဗီဇ၏မှတ်တမ်းစတင် site ၏ 2000 BP အတွင်းတည်ရှိသောစင်ကာပူအခြေစိုက် CPG က်ဘ်ဆိုက်များပါဝင်သည်: Corticotropin ဟော်မုန်း (CRH) ထုတ်, ထုတ်ဟော်မုန်း binding ပရိုတိန်း (CRHBP) corticotropin, လွှတ်ဟော်မုန်းအဲဒီ receptor 1 (CRHR1) corticotropin, လွှတ်ဟော်မုန်း corticotropin အဲဒီ receptor2(CRHR2), FKBP5 နှင့် glucocorticoid အဲဒီ receptor (NR3C1) ။ ကျနော်တို့စိတ်ကျရောဂါများအတွက်ချိန်ညှိ, hypersexuality တစ်အမျိုးအစား variable ကိုမှ methylation က M-တန်ဖိုးမျိုးစုံ linear ဆုတ်ယုတ်မော်ဒယ်များဖျော်ဖြေ, ပညာ, Non-ဖိနှိပ်မှုအခြေအနေ, TNF-alpha-နှင့် IL-6 ၏ငယ်ဘဝစိတ်ဒဏ်ရာမေးခွန်းလွှာစုစုပေါင်းရမှတ်နှင့်ပလာစမာအဆင့်ဆင့်။
ရလဒ်များ: တစ် ဦး ချင်းစီဖြစ်သော CpG ဆိုဒ် ၇၆ ခုကိုစမ်းသပ်ပြီး ၄ ခုမှာအမည်ခံသိသာထင်ရှားသော (p <76)၊ CRH, CRHR0.05 နှင့် NR2C3 ဗီဇများနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။ Cg1 - CRH ဗီဇ၏ TSS ၏အထက် ၄၈ bp တွင်တည်ရှိသည် - FDR-method ကို အသုံးပြု၍ မျိုးစုံစမ်းသပ်ခြင်းအတွက်ပြင်ဆင်ချက်ပြီးနောက် hypersexual လူနာများအားသိသိသာသာ hypomethylated ခဲ့သည်။ cg23409074 ၏ Methylation အဆင့်ဆင့်အပြုသဘော 48 ကျန်းမာအထီးဘာသာရပ်များတစ်ခုလွတ်လပ်သောဆောင်များတွင်အတွက် CRH ဗီဇ၏ဗီဇစကားရပ်နှင့်ဆက်နွယ်နေကြောင်းခဲ့ကြသည်။
ကောက်ချက်: CRH အပြုအမူနှင့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဦးနှောက်အာရုံကြောစနစ်ပြောင်းလဲပစ်, ဦးနှောက်ထဲမှာ neuroendocrine စိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှု၏အရေးပါသောပေါင်းစပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရလဒ်များကိုယောက်ျားအတွက် hypersexual ရောဂါမှဆက်စပ် CRH မျိုးရိုးဗီဇအတွက်ဗီဇလုပ်ငန်းထိန်းချုပ်မှုအပြောင်းအလဲများပြသပါ။
အမေရိကန်စစ်ဘက်စစ်ပြန်အတွက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်လက်တွေ့သွင်ပြင်လက္ခဏာများနဲ့ပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုအတိုင်းအတာများနှင့်အသင်းအဖွဲ့များ၏ Psychometrics ဂုဏ်သတ္တိများ
Ariel KOR1, MARC ။ N. POTENZA, MD PhD.2,3, Rani အေ HOFF, PhD.2, 4, Elizabeth ပေါ်တာ, MBA4 နှင့် Shane ဒဗလျူ KRAUS, Ph.D ။ , 5
1 ဆရာများကောလိပ်၊ ကိုလံဘီယာတက္ကသိုလ်၊ အတိုင်ပင်ခံနှင့်လက်တွေ့စိတ်ပညာ ဦး စီးဌာန၊ ဆရာများကောလိပ်၊ ကိုလံဘီယာတက္ကသိုလ်၊ USA2 စိတ်ရောဂါကုသမှုဌာန၊ ယေးလ်ဆေးဆေး၊ နယူးဟေးဗ်၊ စီတီ၊ USA3 အာရုံကြောသိပ္ပံဌာန၊ ကလေးလေ့လာရေးဌာနနှင့်စွဲလမ်းမှုနှင့်ဆေးဝါးအလွဲသုံးစားမှုဆိုင်ရာအမျိုးသားစင်တာ၊ Yale ဆေးကျောင်း၊ New Haven, CT, USA4VISN 1 MIRECC, VA CT ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုစနစ်၊ West Haven, CT, USA5VISN 1 နယူးအင်္ဂလန် MIRECC, အက်ဒစ်နပ်စ်ရော်ဂျာအောက်မေ့ဖွယ်စစ်ပြန်ဆေးရုံ၊ Bedford MA, USA * E-mail: [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]
နောက်ခံသမိုင်းနဲ့ရည်ရွယ်ချက်: ညစ်ညမ်းကြည့်ရှုအရှိဆုံးလူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းညစ်ညမ်းနှင့်အတူအနည်းငယ်ပြဿနာများတွေ့ကြုံခံစားပေမယ့်, တစ်ဦးချင်းစီ၏အပိုင်းတစ်ပိုင်းကိုသာလျှင်၎င်းတို့၏အသုံးပြုမှုကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်းသိသာပြဿနာများကိုသတင်းပို့ပါ။ အဆိုပါပြဿနာညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုစကေး (PPUS) ဣသရေလအမျိုး၌အသကျရှငျနလူကြီးများအကြားတွင်ညစ်ညမ်း၏ပြဿနာကိုအသုံးပြုခြင်းများအတွက်အကဲဖြတ်ရန်တီထွင်ခဲ့သည်။ ယင်း၏ကနဦးအလားအလာ psychometric ဂုဏ်သတ္တိများနေသော်လည်း, PPUS အမေရိကန်အရွယ်ရောက်ပြီးသူညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများသည်သူတို့တွင်အတည်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိသေးပေ။ နောက်ထပ်စုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ရန်, လက်ရှိလေ့လာမှုယောက်ျားနှင့်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုသတင်းပို့အမျိုးသမီးတစ်နမူနာအတွက် PPUS ၏ psychometric ဂုဏ်သတ္တိများအကဲဖြတ်။
နည်းလမ်းများ: 223 အမေရိကန်စစ်ဘက်စစ်ပြန်တစ်နမူနာညစ်ညမ်း, hypersexuality နှင့် Impulse ၏ညစ်ညမ်း, ပြဿနာအသုံးပြုမှုအတွက်စွဲလမ်းအပိုင်းအခြား, psychopathology, ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအကြိမ်ရေ, အကဲဖြတ်တိုင်းတာပြီးစီး။
ရလဒ်များ: တွေ့ရှိချက် PPUS မြင့်မားသောပြည်တွင်းရေးရှေ့နောက်ညီညွတ်မှု, convergence, ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းကိုသရုပ်ပြတွေ့ရှိခဲ့နှင့်တရားဝင်မှုတည်ဆောက်ရန်။ ပိုမိုမြင့်မားသော PPUS ရမှတ်အပတ်စဉ်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုပိုမိုမြင့်မားအကြိမ်ရေ, အထီးလိင်, ညစ်ညမ်းဘို့တဏှာနှင့်အကျိုးသက်ရောက်စေပုံမမှန်နှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။
ကောက်ချက်: အပိုဆောင်းသုတေသနင်း၏အချက်ဖွဲ့စည်းပုံဆန်းစစ်နှင့်တိကျစွာပြဿနာအသုံးပြုမှုကို detect လုပ်ဖို့သင့်လျော်သောတံခါးခုံကိုဆုံးဖြတ်ရန်လိုအပ်ပေမယ့်အဆိုပါ PPUS, ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုသတင်းပို့အမေရိကန်စစ်ပြန်တစ်နမူနာကြားတွင် psychometric ဂုဏ်သတ္တိများကတိပေးပြသခဲ့သည်။
ဘယ်လို Impulse ပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုနှင့်ပတ်သက်သောသလဲ? 12-ခြေလှမ်းများလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲကုသမှုအစီအစဉ်၏သင်တန်းသားများအကြား longitudinal လေ့လာမှု
EWELINA KOWALEWSKA1 * JAROSLAW SADOWSKI2, MALGORZATA WORDECHA3, KAROLINA GOLEC4, MIKOLAJ CZAJKOWSKI, PhD2 နှင့်မာတေယူချ် Gola, PhD3, 5
စိတ်ပညာ၏ 1Department, လူမှုရေးသိပ္ပံနှင့်လူ့တက္ကသိုလ်, ဝါဆော, စီးပွားရေး၏ပိုလန်2ဦးစီးဌာန, ဝါဆောတက္ကသိုလ်, ဝါဆော, စိတ်ပညာ၏ပိုလန်3Institute မှ, သိပ္ပံပိုလန်အကယ်ဒမီ, ဝါဆော, စိတ်ပညာ၏ပိုလန်4ဦးစီးဌာန, ဝါဆောတက္ကသိုလ်, ဝါဆော, : Computer အာရုံကြောသိပ္ပံ, ဦးနှောက်ကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးသောကွန်ပျူတာအင်စတီကျု, တက္ကသိုလ်ကယ်လီဖိုးနီးယား San Diego မှ, San Diego မှ, အမေရိကန်နိုင်ငံ * E-mail ကိုများအတွက်ပိုလန်5Swartz ကိုရေးစင်တာ [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]
နောက်ခံသမိုင်းနဲ့ရည်ရွယ်ချက်: ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း။ သုတေသနပြုချက်အချို့ကပြသည် (Mainer et al, 2009; Mick & Hollander, 2006; ။ Davis et al, 2002; Shapira et al, 2000) ။ Impulse ၏ရှုထောင့်တစ်ခုမှာကျေနပ်ရောင့်ရဲမှုကိုလျှော့ချနိုင်သည့်စွမ်းရည်ဖြစ်သည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုမကြာခဏအသုံးပြုခြင်း၏ရလဒ်လား၊
နည်းလမ်းများ: MCQ မေးခွန်းလွှာ (Monetary Choice Questionnaire; Kirby & Marakovic, 1996) မှလေ့လာမှုနှစ်ခုတွင်တိုင်းတာသည်။ လေ့လာမှု ၁ တွင်လိင်မှုစွဲလမ်းမှုအတွက်အဆင့် ၁၂ ဆင့်ပါအဖွဲ့ ၀ င်များအားပြုလုပ်သောစစ်တမ်းများမှအချက်အလက်များကိုကောက်ယူခဲ့သည်။N = 77, ယုတ်အသက်အရွယ် 34.4, SD = 8.3) နှင့်ထိန်းချုပ်မှုတစ်ဦးချင်းစီ (N = 171, ယုတ်အသက်အရွယ် 25.6, SD = 6.4) ။ လေ့လာမှု2တှငျကြှနျုပျတို့လေ့လာ3(ထံမှလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲဘို့ 17-ခြေလှမ်းများအုပ်စုတစ်စု၏တစ်ဦး 12 အဖွဲ့ဝင်များအပေါ် 1 လအကြာထပ်ခါတလဲလဲတိုင်းတာခြင်းကောက်ယူN = 17, ယုတ်အသက်အရွယ် 34.8, SD = 2.2) ။ လက်တွေ့အုပ်စုတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ abstinence ၏ပျမ်းမျှအချိန် (243.4 ရက်ပေါင်းခဲ့သည်SD = 347.4, min။ = 2, မက်စ်။ = 1216; လေ့လာမှု 1) နှင့် 308.5 ရက်ပေါင်း (SD = 372.9, min။ = 1, မက်စ်။ = 1281; လေ့လာမှု 2) ။ နှစ်ဦးစလုံးလေ့လာမှုများကိုအင်တာနက်ကနေတဆင့်ဖျော်ဖြေခဲ့ကြသည်။
ရလဒ်များ: လေ့လာမှု (၁) တွင်အပြာစာပေရုပ်ပုံများနှင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းများအတွက်သုံးစွဲသောအချိန်သည်လျှော့စျေးသတ်မှတ်ချက်နှင့်အပြုသဘောဆက်နွယ်မှုရှိသည်။ ဤအကိန်းရှင်များအကြားဆက်စပ်မှုသည်လိင်စွဲသူများအကြားပိုမိုပြင်းထန်သည် (တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းကြိမ်နှုန်း၊ r = ၀.၃၀၊ p <1; အပြာစာပေများကြည့်ရှုခြင်း၊ r = 0.30, p <0.05) သည်ထိန်းချုပ်သည့်အုပ်စု (masturbation frequency, r = 0.28, p <0.05; pornography) ထက်ပိုမိုအားကောင်းခဲ့သည်။ အသုံးပြုမှု, r = 0.23, p <0.05) အပြင်းထန်ဆုံးဆက်စပ်မှု (r = -0.19) လိင်စွဲအကြားလျှော့ parameter သည်နှင့်sobန္ဒြေစောင့်ခြင်းအကြားတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အယူအဆပျှမ်းမျှလျှော့ function ကို parameters တွေကိုဆန့်ကျင်လိင်ဆက်ဆံမှုစွဲ၏အုပ်စုထက်ထိန်းချုပ်မှုအုပ်စုတွင်ပိုမိုမြင့်မားခဲ့သညျ။ လေ့လာမှု2များတွင်ရလဒ်များကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ abstinence ၏အထူးလျှော့စျေးနှင့်အချိန်အကြားသိသာထင်ရှားသောစပ်လျဉ်းမပြခဲ့ပါဘူး။ သို့သျောလညျးအုပျစုသိသိသာသာ3လအတွင်းတိုင်းတာနဲ့ဣန္ဒြေစောင့်ခြင်းအတွက်အမြတ်အကြားဝအတွင်းကွာခြားခဲ့ပါဘူးလျှော့၏ကျဆင်းခြင်းဖြင့်လိုက်ပါသွားမခံခဲ့ရပါဘူး။ sobန္ဒြေစောင့်ခြင်းအတွက်အပြောင်းအလဲများကိုလျှော့စျေးဖြင့်ထက်အဆင့် ၁၂ ဆင့်ပါအစီအစဉ် (r = 12, p <0.92) သို့မဟုတ် ၁၂ ခြေလှမ်းကုထုံး၏လက်ရှိခြေလှမ်း (r = 0.05; p <12) မှ mentee အရေအတွက်အားဖြင့်ပိုမိုရှင်းပြနိုင်သည်။
ကောက်ချက်: ဆန္ဒပြည့် delay လုပ်ခြင်းများ၏စွမ်းရည်ကိုအစားညစ်ညမ်းအသုံးပြုပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းမရှိပါ။ ဖြစ်နိုင်ပါကအထွေထွေသောလူဦးရေအတွက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု၏ကြိမ်နှုန်းကိုဆုံးဖြတ်နိုင်မယ့်ကိန်းသေ feature တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ လိင်စွဲများအတွက် 12-ခြေလှမ်းများအုပ်စုများ၏အဖွဲ့ဝင်များဆန္ဒပြည့် delay လုပ်ခြင်းများ၏စွမ်းရည်များအနက်ဝိရောဓိ, အထွေထွေသောလူဦးရေအတွက်ထက်ပိုမိုမြင့်မားသည်နှင့်တစ်ဦး 3-ခြေလှမ်းများအစီအစဉ်လုပ်ဆောင်နေ၏ 12 လအတွင်းပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းမရှိပါ။ ထို့အပွငျလျှော့ abstinence ၏အချိန်နှင့်အတူပြောင်းလဲပစ်မထားဘူး။ ဤရလဒ်အနိမ့်လျော့စျေးနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီအမြင့်ဆုံးအထူးလျှော့စျေးနှင့်အတူများထက်, ပုံစံ 12-ခြေလှမ်းအစီအစဉ်ကိုအကြိုးကိုပိုမိုကျရောက်နေတဲ့ဖြစ်မည်အကြောင်းအကြံပြုလိမ့်မည်။
ညစ်ညမ်းရှောင်ရှားခြင်း Self-ထိရောက်မှုအတိုင်းအတာ: Psychometric ဂုဏ်သတ္တိများ
Shane ဒဗလျူ KRAUSa, ခ, *, ဖူဂျီ ROSENBERGb, CHARLA NICHc အဲဒီလောက် MARTINOc, ဃနှင့် MARC N. POTENZAc
တစ်ဦးစိတ်ပညာဌာန, Bowling Green ပြည်နယ်တက္ကသိုလ်, Bowling Green, Oh, 43403, အမေရိကန်နိုင်ငံ VISN 1 နယူးအင်္ဂလန် MIRECC, Edith Nourse ရော်ဂျာသတိရအောက်မေ့စစ်ပြန်ဆေးရုံ, 200 နွေဦးလမ်း, Bedford MA, စိတ်ရောဂါကုသမှု၏အမေရိကန်နိုင်ငံက c ဦးစီးဌာန, ဆေးပညာ၏ယေးလ်တက္ကသိုလ်ကျောင်းခ , New Heaven, CT အမေရိကန်နိုင်ငံဃ VISN 1 နယူးအင်္ဂလန် MIRECC, VA သို့ Connecticut ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုစနစ်, အနောက် Heaven, CT အမေရိကန်နိုင်ငံ * E-mail ကို: [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]
နောက်ခံသမိုင်းနဲ့ရည်ရွယ်ချက်: အဆိုပါတင်ပြလေ့လာမှုလူမှုရေး, စိတ်ခံစားမှု 18 ၏တစ်ဦးချင်းစီအတွက်ညစ်ညမ်းသုံးပြီးရှောင်ရှားရန်သင်တန်းသားများကို '' Self-ထိရောက်မှုရှိမရှိဆန်းစစ်နှင့်လိင်အခင်းအကျင်းနှိုးဆွသောညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုဟာသူတို့ရဲ့ပုံမှန်အကြိမ်ရေနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။
နည်းလမ်းများ: တိကျတဲ့ညစ်ညမ်း employ ဖို့ web-based ဒေတာစုဆောင်းခြင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအသုံးပြုခြင်း, ဆည်းကပ်ခဲ့သောသို့မဟုတ်၎င်းတို့၏အခြေအနေတွင်-တိကျတဲ့ Self-ထိရောက်မှုအကဲဖြတ်ညစ်ညမ်းပြီးစီးခဲ့မေးခွန်း၏သူတို့ရဲ့အသုံးပြုမှုအတွက်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အကူအညီရှာကြံစဉ်းစားခဲ့သူ 229 အထီးညစ်ညမ်းသုံးစွဲသူများညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုသမိုင်း, Self-ထိရောက်မှု -reduction မဟာဗျူဟာများ, လက်တွေ့ hypersexuality နှင့်လူဦးရေဆိုင်ရာသွင်ပြင်လက္ခဏာများ။
ရလဒ်များ: ANOVAs ၏တစ်ဦးကစီးရီးညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကြိမ်နှုန်းသိသိသာသာများနှင့်အဆိုးဟာ 12 အခင်းအကျင်း၏ 18 အတွက်ယုံကြည်စိတ်ချမှု၏အဆင့်ကိုသူနဲ့ဆက်စပ်ခဲ့ပြသခဲ့သည်။ အလားတူပင်ကျွန်တော်အောက်ပိုင်း hypersexuality နှင့်ညစ်ညမ်း-အသုံးပြုမှု-လျှော့ချရေးမဟာဗျူဟာ employ မှပိုမိုမြင့်မားယုံကြည်မှုဟာ 18 အခြေအနေများ၏တစ်ဦးချင်းစီအတွက်ညစ်ညမ်းသုံးပြီးရှောင်ရှားရန်ပိုမိုမြင့်မားယုံကြည်မှုနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ တစ်ခုကရေနံဓါတ်ငွေ့ရှာဖွေရေးအချက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလည်းအခြေအနေများသုံးခုပြွတ်ထင်ရှား: (က) လိင်စိတ်နိုးထ / ပျင်းတာဟာ / အခွင့်အလမ်း, (ခ) မူး / တည်နေရာ / လွယ်ကူလက်လှမ်းနှင့် (ဂ) အနုတ်စိတျလှုပျရှားမှု; နှစ်ခုကျန်ရှိသောအခြေအနေများသုံးပြွတ်မဆိုပေါ်မတင်နိုင်ခဲ့ပေ။ တစ်ဦးတည်းသာသုံးယောက်ပြွတ်တစ်တသမတ်တည်းဆောင်ပုဒ်ထင်ဟပ်သောကြောင့်, ကျနော်တို့အခြေအနေများ၏ကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးအစားများဖွဲ့စည်းပြွတ်အတွင်း Self-ထိရောက်မှုပျမ်းမျှအကြံပြုကြပါဘူး။
ကောက်ချက်: စိတ်ကျန်းမာရေးဆရာကိုလျှော့ချသို့မဟုတ်ပြဿနာညစ်ညမ်းသုံးပြီးရပ်တန့်ဖို့ရှာကြံတစ်ဦးချင်းစီအတွက် relapse ဘို့တိကျတဲ့ပိုမိုမြင့်မားအန္တရာယ်အခြေအနေများကိုသိရှိနိုင်ဖို့မေးခွန်းလွှာအသုံးပြုနိုင်တယ်။
အကျဉ်းညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံ Screener: တစ်ဦးကအမေရိကန်များ၏နှိုင်းယှဉ်ခြင်းနှင့်ပိုလန်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများသည်
Shane ဒဗလျူ KRAUS, Ph.D ။ , 1 မာတေယူချ် Gola, Ph.D ။ ,2EWELINA KOWALEWSKA,3မိခါလသည် LEW-STAROWICZ, MD PhD.4 Rani အေ HOFF, Ph.D ။ , 5,6အဲလိဇဗက်ပေါ်တာ, MBA ဘွဲ့ရ,6နှင့် MARC ။ N. POTENZA, MD PhD.5,7
1VISN 1 နယူးအင်္ဂလန် MIRECC, Edith Nourse ရော်ဂျာသတိရအောက်မေ့စစ်ပြန်ဆေးရုံ, Bedford MA, ကွန်ပျူတာအာရုံကြောသိပ္ပံ, ဦးနှောက်ကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးသောကွန်ပျူတာ Institute ကကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်, San Diego မှတက္ကသိုလ် San Diego မှ, စိတ်ပညာ၏ USA2Department, လူမှုရေးသိပ္ပံနှင့်လူ့တက္ကသိုလ်, ဝါဆော, Poland3Institute များအတွက် USA4Swartz ရေးစင်တာ စိတ်ရောဂါကုသမှုနှင့် Neurology, 3rd စိတ်ရောဂါဆေးခန်း, ဝါဆော, စိတ်ရောဂါကုသမှု၏ Poland5Department, ဆေးပညာ၏ယေးလ်ကျောင်း, New Heaven, CT, USA6VISN 1 MIRECC, VA သို့မှန် CT ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုစနစ်, အနောက် Haven မှန် CT, အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ USA7Department, ကလေးလေ့လာမြစင်တာနှင့်အမျိုးသားရေးစင်တာ on ရဲ့ စွဲလမ်းနှင့်ပစ္စည်းအလွဲသုံးမှု, ဆေးပညာ၏ယေးလ်ကျောင်း, New Heaven, CT, USA သို့ * E-mail ကို: [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]
နောက်ခံသမိုင်းနဲ့ရည်ရွယ်ချက်: လက်ရှိလေ့လာမှုအပြုအမူတွေ, အတှေးအများနှင့်ညစ်ညမ်း၏ပြဿနာအသုံးပြုမှုနှင့်ဆက်စပ်အတွေ့အကြုံများကိုသိရှိနိုင်ဖို့ဒီဇိုင်းအသစ်တီထွင်ခြောက်ကို item မေးခွန်းလွှာများ psychometric ဂုဏ်သတ္တိများအကဲဖြတ်။ နည်းလမ်းများ: လေ့လာရေး 1 နှင့်2ခုနှစ်, 223 အမေရိကန်စစ်ဘက်စစ်ပြန်များနှင့် 703 ပိုလန်အသိုင်းအဝိုင်းအဖွဲ့ဝင်များအကျဉ်းညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံ Screener (BPS) နှင့်အစီအမံများ, ညစ်ညမ်းများအတွက်ညစ်ညမ်း, လက်တွေ့ hypersexuality နှင့် Impulse ၏ပြဿနာကိုအသုံးပြုခြင်းစွဲလမ်း, ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအကြိမ်ရေအကဲဖြတ်အုပ်ချုပ်ခဲ့ကြသည်။ လေ့လာမှု3ခုနှစ်, 26 ပိုလန်အထီးလက်တွေ့လူနာ BPS နှင့် psychopathology ၏အစီအမံအုပ်ချုပ်ခဲ့ကြသည်။
ရလဒ်များ: လေ့လာမှု 1 များတွင်တွေ့ရှိချက်မေးခွန်းလွှာထံမှတဦးတည်းကို item ကျဆင်းနေထောက်ခံ; ငါးကျန်ရှိပစ္စည်းများကိုစုစုပေါင်းကှဲလှဲ၏ 3.75% အဘို့မှတ်ကြောင်း 62.5 တစ်ခု eigenvalue နှင့်အတူတစ်-Factor ဖြေရှင်းချက်လြှော့သည့်ရေနံဓါတ်ငွေ့ရှာဖွေရေးအချက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအကြောင်းမဲ့ခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါ BPS လည်းမြင့်မားသောပြည်တွင်းရေးယုံကြည်စိတ်ချရ (α = 0.89) သရုပ်ပြခဲ့သည်။ Next ကိုကျနော်တို့ BPS ရမှတ်များသိသိသာသာများနှင့်အပြုသဘောညစ်ညမ်း, ညစ်ညမ်း၏ပြဿနာကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့် hypersexuality ဘို့တဏှာနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပေမယ့်ကိုအားနည်းစွာ Impulse နှင့်ဆက်စပ်သော။ လေ့လာမှု2များတွင်တွေ့ရှိချက်ရမှတ်အပြုသဘော hypersexuality တစ်အတိုင်းအတာနှင့်ဆက်စပ်ပေမယ့်ကိုအားနည်းစွာ obsessive-compulsive ရောဂါလက္ခဏာတွေနဲ့ Impulse အကဲဖြတ်တိုင်းတာမှုများအပေါ်ရမှတ်များနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့ကြ BPS ကြောင်းအလားတူခဲ့ကြသည်။ ရလဒ်များလည်းတဦးတည်း-Factor ဖြေရှင်းချက်တစ်ခုအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့မထိုက်မတန်လြှော့ကြောင်းညွှန်ပြ: χ2 / DF = 5.86, p = 0.00, RMSEA = 0.08, SRMR = 0.02, CFI = 0.99 နှင့် TLI = 0.97 ။ လေ့လာမှု3တှငျကြှနျုပျတို့တစ်ခုသုံးပြီး BPS ၏ခွဲခြားအရည်အသွေးကိုအကဲဖြတ် တစ်ဦး တစ်ဦးကိုထိန်းချုပ်အုပ်စုတစ်စုဆန့်ကျင်လူနာအုပ်စုတစ်စုရွေးချယ်ထားကြသည်။ အာအိုစီခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ (ထို AUC တန်ဖိုးကို 0.863 ခဲ့ကြောင်းညွှန်ပြSE = 0.024; p <0.001; 95% CI: 81.5-91.1)
ကောက်ချက်: အဆိုပါ BPS အမေရိကန်နှင့်ပိုလန်နမူနာနှစ်ဦးစလုံးအနှံ့အလားအလာ psychometric ဂုဏ်သတ္တိများသရုပ်ပြနှင့်တစ်ဦးချင်းစီကိုသိရှိနိုင်ဖို့စိတ်ကျန်းမာရေး setting တွင် Clinician အသုံးပြုသောနိုငျသညျ။
ညစ်ညမ်းလှုံ့ဆော်မှုမှလိင်စိတ်နိုးထတုံ့ပြန်မှုအင်တာနက်ညစ်ညမ်း-ကြည့်ရှုရောဂါပုဂ္ဂိုလ်ရေးဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်ရောဂါလက္ခဏာ predisposing အကြားဆက်ဆံရေး mediates
ခရစ်ယာန် LAIER1 နှင့်မဿိ BRAND1,2
1 အထွေထွေစိတ်ပညာ: သိမှတ်ခံစားမှုနှင့်အပြုအမူစွဲသုတေသန (CeBAR) အတွက်စင်တာ, Duisburg-အက်ဆင်း၏တက္ကသိုလ်, Duisburg-အက်ဆင်း, သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှု Imaging, အက်ဆင်းဘို့ Germany2 Erwin အယ်လ် Hahn Institute က, ဂျာမနီ * E-mail ကို: [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]
နောက်ခံသမိုင်းနဲ့ရည်ရွယ်ချက်: ယေဘုယျအားဖြင့်အင်တာနက်ညစ်ညမ်း-ကြည့်ရှုအခြေခံပင်မအချက် (ရိဒ် et al ။ , 2011), လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်လှုပ်ရှားခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပျြောအပါးရှာကြံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသိချင်စိတ်ကျေနပ်ခြင်းသို့မဟုတ်ဆန္ဒရှိစိတ်ခံစားမှုကိုရှောင်ရှားနေကြသည်။ တိကျတဲ့အင်တာနက်အသုံးပြုမှုကိုမမှန်များ၏ငါ-PACE့(Person-အပေါ်ဘယ်လိုသက်ရောက်မှု-သိမှတ်ခံစားမှု-Execution ၏ Interaction) မော်ဒယ် (အမှတ်တံဆိပ် et al ။ , 2016) ကိုဆန္ဒပြည့်နှင့်အတူအသုံးပြုသူရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဝိသေသလက္ခဏာများ, အကျိုးသက်ရောက်စေတုံ့ပြန်မှု, သိမြင်မှုဖြစ်စဉ်များနှင့်အလုပ်အမှုဆောင်လုပ်ဆောင်ချက်များကိုတစ်ဦးအပြန်အလှန် postulates အင်တာနက်ညစ်ညမ်းကြည့်ရှုခြင်းဖြင့်ရရှိခဲ့သည်။ လေ့လာမှု၏ရည်ရွယ်ချက်မှာအင်တာနက်ညစ်ညမ်း-ကြည့်ရောဂါ (IPD) ဆီသို့ဦးတည်ညစ်ညမ်းပစ္စည်းနှင့်သဘောထားတွေကိုမှတုံ့ပြန်မှုအဖြစ်လိင်စိတ်နိုးထနှင့်အတူထိုကဲ့သို့သောညစ်ညမ်း-ကြည့်ရှုလှုံ့ဆျောမှု, စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါလက္ခဏာများနှင့်ရိပ်မိစိတ်ဖိစီးမှုအဖြစ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဝိသေသလက္ခဏာများအကြားဆက်ဆံရေးကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ဖို့ဖြစ်တယ်။
နည်းလမ်းများ: အထီးပါဝင်သူ (N = 88) တစ်ဦးဓာတ်ခွဲခန်း setting ကိုအတွက်စုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့ကြသည်။ မေးခွန်း IPD, ညစ်ညမ်း-ကြည့်ရှုလှုံ့ဆျောမှု, စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါလက္ခဏာများနှင့်ရိပ်မိစိတ်ဖိစီးမှုဆီသို့ဦးတည်လိုတဲ့သဘောထားကိုအကဲဖြတ်။ ထိုမှတပါး, သင်တန်းသားများကိုညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုအားပေးကြသည်နှင့်သူတို့၏လိင်စိတ်နိုးထနှင့် cue တင်ဆက်မှုမီနှင့်အပြီး masturbate သူတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်ညွှန်ပြ။
ရလဒ်များ: ရလဒ် IPD ဆီသို့ဦးတည်လိုတဲ့သဘောထားကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ညစ်ညမ်း-ကြည့်ရှုလှုံ့ဆျောမှု, စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါလက္ခဏာများ, ရိပ်မိစိတ်ဖိစီးမှုနှင့်လိင်စိတ်နိုးထတုံ့ပြန်မှု၏အညွှန်းကိန်း၌ရှိသမျှသောအချက်များမှဆက်စပ်ခဲ့ပြသခဲ့သည်။ ထိုမှတပါး, masturbate ရန်လိုအပ်ကြောင်းတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းညစ်ညမ်းကြည့်ရှုဖို့လှုံ့ဆျောမှုနှင့် IPD လက္ခဏာတွေနှင့်အတူစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါလက္ခဏာများနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုများအကြားဆက်ဆံရေးများအကြားဆက်ဆံရေးကမကထပြုခဲ့။
ကောက်ချက်: အဆိုပါတွေ့ရှိချက် IPD ဆီသို့ဦးတည်လိုတဲ့သဘောထားကိုအတွက် postulated ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဝိသေသလက္ခဏာများမှဆက်စပ်နှင့်ဤစပ်လျဉ်းတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းလိင်စိတ်နိုးထတစ်ခုညွှန်ပြချက်ကကမကထပြုခဲ့ခဲ့ကြသည်ဟုပြသသည်။ ထို့ကြောင့်ရလဒ်များငါ-PACE မော်ဒယ်နှင့်အညီဖြစ်ကြောင်းနှင့်အနာဂတ်သုတေသန IPD အခြေခံစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာယန္တရားများသို့ထပ်မံထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုပေးစေခြင်းငှါ bivariate ဆက်စပ်မှုကျော်လွန်တိကျတဲ့ variable တွေကိုများ၏အပြန်အလှန်အာရုံစိုက်သင့်ကြောင်းအဆိုပါယူဆချက်အားရှိ၏။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲအတွက် compulsive နှင့် Impulse
ချီကာဂိုတက္ကသိုလ်, ချီကာဂို, USA သို့ E-mail ကို: [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]
လိင်စွဲမကြာခဏစတင်နှင့် / သို့မဟုတ်ပြဿနာအပြုအမူများ၏ဇွဲသည့်ကြိုးအပြုအမူအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ Impulses သတင်းပို့ဖိနှိပ်ဖို့နိုင်စွမ်းမရှိခြင်းကြောင့်ဖြစ်မည်အကြောင်းအကြံပြုခြင်း, Impulse တစ်ဦးရောဂါအဖြစ်သွင်ပြင်လက္ခဏာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီရောဂါနှင့်ပတ်သက်သောလက်ရှိတွေ့ရှိချက်, သို့သော်, Impulse အပြင်, compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲ၏တင်ပြချက်များနှင့်တည်တံ့ခိုင်မြဲရေးအတွက်ထူးဆန်းသောအခန်းကဏ္ဍစေခြင်းငှါအကြံပြုခဲ့ကြသည်။ ဤသည်တင်ပြချက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲအတွက် compulsive နှင့် Impulse ၏ကျယ်ပြန့်လက်တွေ့ domains များနှင့် ပတ်သက်. အသစ်အ neurocognitive နှင့် neuroimaging ဒေတာကိုတင်ပြပါလိမ့်မယ်။ အထူးသဖြင့်အလေးပေးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲခြင်းနှင့်မည်ကဲ့သို့သောဤဒေတာကိုကုသမှုချဉ်းကပ်မှုတိုးတက်ကောင်းမွန်စေရန်ဖြစ်နိုင်သည်နှင့်အတူလူနာအတွက် neurobiology နှင့် neurocognition ၏လက်ရှိနားလည်မှုအပေါ်ထားရှိပါလိမ့်မည်။
KAROL LEWCZUK1, ဟန္န SZMYD2 နှင့်မာတေယူချ် GOLA3,4 *
1 စိတ်ပညာဌာန, ဝါဆောတက္ကသိုလ် Warsaw ကို, သိမှုစိတ်ပညာ၏ Poland2Department, ဘဏ္ဍာရေးနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှု၏တက္ကသိုလ်, ဝါဆော, စိတ်ပညာ၏ Poland3 Institute မှ, သိပ္ပံပိုလန်အကယ်ဒမီ, ဝါဆော, ကွန်ပျူတာအာရုံကြောသိပ္ပံအဘို့အ Poland4 Swartz ကိုစင်တာ, ဦးနှောက်ကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးသောကွန်ပျူတာအင်စတီကျု, တက္ကသိုလ် ကယ်လီဖိုးနီးယား San Diego မှ, San Diego မှ, အမေရိကန်နိုင်ငံ * E-mail ကို: [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]
နောက်ခံနှင့်ရည်ရွယ်ချက်များ: ယခင်လေ့လာမှုများကုသမှု-ရှာကြံအထီးအကြားပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု (PU) အတွက်နှင့်ပတ်သက်သောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအချက်များဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ ဒီလေ့လာမှုမှာကျနော်တို့ပြဿနာမှ PU များအတွက်ကုသမှုကိုရှာခြင်းနှင့်ဤအုပ်စုတစ်စုနှင့်ထိုကဲ့သို့သောကုသမှုကိုမရှာခဲ့ဘူးကြောင်းအမျိုးသမီးတွေအုပ်စုအကြားပြဿနာမှ PU နှင့်ဆက်စပ်သော variable တွေကိုပတ်သတ်ပြီးအတူကွဲပြားခြားနားမှုဆန်းစစ်သူအမြိုးသမီးအပေါ်အာရုံစူးစိုက်။ ဒုတိယအကျနော်တို့ကုသမှု-ရှာကြံမိန်းမတကာတို့ထက်အဘို့ခန့်မှန်းအဓိကထားလမ်းကြောင်းကိုဆန်းစစ်နည်းလမ်းနှင့်အတူပြဿနာမှ PU နှင့်ဆက်စပ်သောအရေးပါဆောက်လုပ်ရေးအကြားဆက်ဆံရေးကိုစုံစမ်းစစ်ဆေး။ ငါတို့သည်လည်းယောက်ျားအပေါ်ယခင်လေ့လာမှုများမှကျွန်တော်တို့ရဲ့ရလဒ်တွေကိုနှိုင်းယှဉ်။
နည်းလမ်းများ: တစ်ဦးကစစ်တမ်းလေ့လာမှု (၎င်းတို့၏ကနဦးခရီးစဉ်ကိုအပြီး psychotherapists အားဖြင့်ရည်ညွှန်း) ပြဿနာမှ PU များအတွက် 719 ကုသမှု-ရှာဖွေနေသူများအပါအဝင်ဟောင်းနှစ်ပေါင်း 14 မှ 63 ကော့ကေးဆပ်အမျိုးသမီး 39 အပေါ်ကောက်ယူခဲ့သည်
ရလဒ်များ: ကုသမှု-ရှာကြံအမျိုးသမီးအကြားမှ PU နှင့်ဆက်စပ်အနုတ်လက္ခဏာရောဂါလက္ခဏာမှ, ဒါပေမယ့်လည်း PU ၏မျှသာငွေပမာဏမှဆက်စပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်ယောက်ျားအပေါ်ယခင်ကထုတ်ဝေဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းမှအတိုက်အခံအတွက်ရပ်တည်။ ထို့အပြင်အမျိုးသမီး၏ဖြစ်ရပ်အတွက်, ယာနျဘာသာတရားကိုကုသမှုရှာ၏အားကြီးသော, သိသာခန့်မှန်းသည်။
ဆွေးနွေးချက်: ကွဲပြားခြားနားအထီးနမူနာအာရုံစိုက်ကြောင်းယခင်လေ့လာမှုများအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအမျိုးသမီးများအမှု၌မှ PU ၏မျှသာငွေပမာဏပင်မှ PU နှင့်ဆက်စပ်အနုတ်လက္ခဏာရောဂါလက္ခဏာတွေအဘို့အစာရင်းကိုင်ပြီးနောက်ကုသမှု-ရှာကြံအပြုအမူနှင့်အတူ related စေခြင်းငှါပြညွှန်။ , ထိုမှတပါး, ဘာသာရေးမိန်းမတကာတို့ထက်ရှာကြံကုသမှုသိသိသာသာခန့်မှန်းဖြစ်ပါသည်, အဘယ်အရာကိုညွှန်ပြစေခြင်းငှါအမြိုးသမီးမြား၏အမှု၌, ပြဿနာမှ PU ရှာကုသမှုမှ PU ၏အတွေ့အကြုံရှိအနုတ်လက္ခဏာရောဂါလက္ခဏာအားဖြင့်မသာလှုံ့ဆော်နေသည်, ဒါပေမယ့်လည်း PU နှင့်လူမှုရေးစံချိန်စံညွှန်းနှင့် ပတ်သက်. ပုဂ္ဂိုလ်ရေးယုံကြည်ချက်ကြောင့်။ သူများသည်အချက်များကုသမှုအကောင့်ထဲသို့ခေါ်ဆောင်သွားရပါမည်။
ကောက်ချက်: ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုနှင့်ဆက်စပ်အနုတ်လက္ခဏာရောဂါလက္ခဏာ, ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုနှင့်ဘာသာရေး၏ကြိမ်နှုန်းအမြိုးသမီးမြားအကြားကုသမှု-ရှာနဲ့ဆက်စပ်နေကြသည် - ဤပုံစံယောက်ျားအပေါ်ယခင်လေ့လာမှုများအတွက်ရရှိသောရလဒ်များသည်ထက်ကွဲပြားခြားနားသည်။
Hypersexuality အတွက်သိမှု Disruption ၏အမူအကျင့်များသည်
Michael H. MINER1 * Angus Macdonald, III2 နှင့် Edward PATZALT3
မိသားစုဆေးပညာနှင့်ရပ်ရွာကျန်းမာရေး, မင်နီဆိုတာတက္ကသိုလ်, Minneapolis, MN ၏ 1Department ။ စိတ်ပညာ၏ USA2Department, မင်နီဆိုတာ, Minneapolis တက္ကသိုလ်, MN ။ စိတ်ပညာ၏ USA3Department, ဟားဗတ်တက္ကသိုလ်, ကိန်းဘရစ်, MA ။ ယူအက်စ်အေ * E-mail ကို: [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]
နောက်ခံသမိုင်းနဲ့ရည်ရွယ်ချက်: စွဲလမ်းစေဖြစ်စဉ်များဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်းကိုသြဇာလွှမ်းမိုးကြောင်းနောက်ခံသိမြင်မှုပြတ်တောက်၏နံပါတ်၏ရလဒ်ဖြစ်ထင်နေကြသည်။ အထူးသကစွဲသာမန်အားဖြည့်သင်ယူမှုစနစ်များကိုအသုံးပြုတဲ့တူညီတဲ့ neurophysiological ယန္တရားများ access လုပ်ပါတယ်ကြောင်းအကြံပြုခဲ့သည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဆန္ဒပြည့်နှင့်အန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေနှင့် (1) နှိုးဆွ်ရောက်စွက်ဖက်နှောင့်နှေး (2) ပြောင်းလဲအားဖြည့်ပေါ်ဖြစ်ပေါ်, (3), သိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေးသုံးခုဒေသများရှိပြတ်တောက်များ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှုဆနျးစစျဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
နည်းလမ်းများ: ကျနော်တို့ကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ဝင်စားမှုရှိခဲ့သို့မဟုတ်ယောက်ျားနှင့်အတူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအတွက်စေ့စပ်ခဲ့တဲ့ 242 အရွယ်ရောက်ပြီးသူယောက်ျားတစ်နမူနာဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ ကိုးဆယ့်သုံး hypersexuality များအတွက်စံတွေ့ဆုံခဲ့သည်။ အလုပ်တခုကိုသင်ယူခြင်းတဖန်ပြောင်းပြန်လှန်တဲ့နှောင့်နှေးလျှော့တာဝန်နှင့် single-ရုံးတင်စစ်ဆေး Stroop: သင်တန်းသားများကိုသုံးသိမြင်မှုလုပ်ငန်းများကိုပြီးစီး။
ရလဒ်များ: ကျနော်တို့သိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေး၏ဤသုံးပါးအစီအမံမှတုံ့ပြန်မှု characterizing အမျိုးမျိုးသောကွန်ပျူတာမော်ဒယ်များအားဖြင့်ရရှိသော compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ Inventory နှင့်အတူအုပ်စုသည်ကွဲပြားခြားနားမှုများနှင့်ဆက်စပ်မှုနှစ်ဦးစလုံးစူးစမ်း။ ကျနော်တို့အနည်းငယ်ရိပ်လက္ခဏာကြောင့် hypersexuality, အုပ်စုတာဝန်ကျတဲ့နေရာအားဖြင့်ဒါမှမဟုတ် CSBI အပေါ်ရမှတ်များကသတ်မှတ်ထားသောဖြစ်စေ, စွဲလမ်း၏အခြားပုံစံများသွင်ပြင်လက္ခဏာပြီသိမြင်မှုပြတ်တောက်၏အတိုင်းအတာနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ကျနော်တို့က 90 ရက်ကြာကာလအတွင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေ့ဆုံအရေအတွက်ခန့်မှန်းအတွက် Stroop နှင့် CSBI ရမှတ်အပေါ်တစ်ဦး Grattan အကျိုးသက်ရောက်မှုများအကြားသိသိသာသာအပြန်အလှန်ရှာတွေ့ကိုပြု၏။
ကောက်ချက်: Hypersexuality အနည်းဆုံး MSM အတွက်ထိုကဲ့သို့သောကင်းအလွဲသုံးစားမှုကဲ့သို့သောအခြားစှဲမှာတွေ့ရတဲ့သိမြင်မှုပြတ်တောက်မှ related ခံရဖို့ပေါ်လာပါဘူး။ သို့သော် hypersexuality ၏မြင့်မား၏ရှေ့မှောက်တွင်ထဲမှာ, CSBI ဖြင့်တိုင်းတာသည်အနည်းဆုံးအဖြစ်ကြောင့်ချက်ချင်းယခင်အတွေ့အကြုံအပြုအမူများပုံမှန်ဖို့ပျက်ကွက်တိုးမြှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်ဆက်စပ်သောပေါ်လာပါဘူး။ ထို့ကြောင့်အပြုအမူယခုအချိန်တွင်ပြုပြင်မွမ်းမံဖို့အခိုက်၌ဤပြတ်တောက်မှတဆင့်ဖြစ်နိုင်သည် hypersexuality ပူးပေါင်းလိင်၏မြင့်မားစေပါတယ်သောယန္တရား။ ကျွန်ုပ်တို့၏တွေ့ရှိချက်ကြောင့် hypersexuality အတွက်နမူနာအားဖြင့်သြဇာလွှမ်းမိုးလျက်ရှိသည် MSM အတွက်ကွဲပြားခြားနားသူ့ဟာသူတငျပွ။ ထို့အပြင် hypersexuality ဘက်ပေါင်းစုံဖြစ်ပြီး, ကကွဲပြားခြားနားတဲ့အပြုအမူတွေကိုနှောင့်အယှက်များစွာရင်းမြစ်များမှဖြစ်ပေါ်ကြောင်းဖြစ်စေခြင်းငှါ,
JARO PEKAL1 * နှင့်မဿိ BRAND1,2
1General စိတ်ပညာ: သိမှတ်ခံစားမှု, အပြုအမူစွဲသုတေသန (CeBAR) အတွက် Duisburg-အက်ဆင်းနှင့်စင်တာတက္ကသိုလ်, သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှု Imaging, အက်ဆင်းဘို့ဂျာမဏီ 2Erwin အယ်လ် Hahn Institute က, ဂျာမနီ * E-mail ကို: [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]
နောက်ခံသမိုင်းနဲ့ရည်ရွယ်ချက်: Cue-reactive နှင့်တဏှာတုံ့ပြန်မှုပစ္စည်းဥစ္စာ-အသုံးပြုမှုမမှန်များ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အရေးကြီးသောကဏ္ဍများဖြစ်ကြသည်။ ဒါကြောင့်နှစ်ဦးစလုံးဖြစ်စဉ်များလည်းအင်တာနက်ညစ်ညမ်း-ကြည့်ရှုရောဂါ (IPD) တွင်ပါဝင်ပတ်သက်နေကြသည်ကြောင်းအကြံပြုထားပြီးကတည်းကကပိုပြီးအသေးစိတ်အတွက်သူတို့ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်အရေးကြီးပါသည်။ အချို့ကစာရေးသူအနေနဲ့ IPD ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအတွက်သော့ချက်အချက်အဖြစ်ဆန္ဒပြည့်၏မျှော်လင့်စဉ်းစားပါ။ တိကျတဲ့အင်တာနက်အသုံးပြုမှုကိုမမှန်များအတွက်မော်ဒယ် (အမှတ်တံဆိပ် et al ။ , 2016), cue reactivity ကိုနှင့်တဏှာဟာငါ-PACE့(Person-Affect- သိမှတ်ခံစားမှု-Execution ၏ Interaction) ၌ရှိသကဲ့သို့ကောင်းစွာဆုလာဘ်-သင်ယူမှုယန္တရားများ၏အရေးပါယန္တရားများဖြစ်ယူဆနေကြသည်အဖြစ် တစ်ဦး IPD ။ ဟောင်းတဦး cue-reactivity ကိုလေ့လာမှုများအတွက်အများအားဖြင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုလိင်စိတ်နိုးထနှင့်တဏှာ၏ induction များအတွက်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ လက်ရှိလေ့လာမှု၏ရည်ရွယ်ချက်မှာပုဂ္ဂလဒိဋ္တဏှာနှင့် IPD ဆီသို့ဦးတည်အင်တာနက်ညစ်ညမ်း-ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်သဘောထားတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့တိကျတဲ့သိမြင်မှုနှင့်အတူဆက်ဆံရေးအပေါ်ညစ်ညမ်းဗီဒီယိုအပိုင်းများကိုများ၏သက်ရောက်မှုကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ဖို့ဖြစ်တယ်။
နည်းလမ်းများ: 51 အထီးပါဝင်သူတစ်နမူနာတစ်ခုစမ်းသပ်လေ့လာမှုပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်ခဲ့သည်။ အားလုံးသင်တန်းသားများကို 60 ညစ်ညမ်းဗီဒီယိုအပိုင်းများကိုကြည့်ရှုအားပေး, လိင်စိတ်နိုးထဖို့လေးစားမှုသူတို့နှင့်အတူ rated နှင့်၎င်းတို့၏လက်ရှိလိင်စိတ်နိုးထနှင့် cue တင်ဆက်မှုမီနှင့်အပြီး masturbate သူတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်ညွှန်ပြ။ ထို့အပြင်မေးခွန်း IPD ဆီသို့ဦးတည်ညစ်ညမ်း, အင်တာနက်-ညစ်ညမ်း-အသုံးပြုမှုကိုမျှော်လင့်ထားနှင့်သဘောထားတွေကိုကြည့်ရှုဘို့စိတ်ရင်းအကဲဖြတ်ရန်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။
ရလဒ်များ: အဆိုပါညစ်ညမ်းဗီဒီယိုအပိုင်းများကိုလိင်လိင်စိတ်နိုးထတစ်ခုတိုးခြင်းနှင့် masturbate ရန်လိုအပ်ကြောင်းဖို့နှိုးဆွခြင်းနှင့်ခဲကဲ့သို့ rated ခဲ့ကြသည်။ ထိုမှတပါး, လိင်စိတ်နိုးထတုံ့ပြန်မှုအတန်အသင့်ပြင်းပြင်းထန်ထန်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းအဖြစ် IPD လက္ခဏာတွေနှင့်အတူကြည့်ရှုရန်မျှော်လင့်ထားနှင့်စိတ်ရင်းနဲ့ဆက်စပ်ရကြ၏။
ကောက်ချက်: ရလဒ် IPD အပေါ်ဟောင်းတဦးလေ့လာမှုများနှင့်အတူတသမတ်တည်းဖြစ်ကြပြီးတိကျတဲ့အင်တာနက်အသုံးပြုမှုကိုမမှန်များအတွက်ငါ-PACE မော်ဒယ်အတွက်အကြံပြုအဖြစ် IPD အတွက် cue-reactivity ကိုနှင့်တဏှာ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှုကိုအလေးပေး။ တစ်ဦးနည်းလမ်းကိုကြည့်ရှုရန်ကနေညစ်ညမ်းဗီဒီယိုအပိုင်းများကိုအတူ cue-reactivity ကိုပါရာဒိုင်းများ၏လေ့လာတွေ့ရှိသက်ရောက်မှုဓာတ်ပုံများကိုတွေကိုအဖြစ်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်တဲ့အခါမှာအစီရင်ခံသူတို့အားနှိုင်းယှဉ်ဖြစ်ကြသည်။
ဘယ်လို ICD-11 အတွက်ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းနှင့်လက်တွေ့သက်ရောက်မှုဘာတွေလုပ်နေလဲခံရလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကို compulsive စျနိုငျသလဲ
1Connecticut စိတ်ကျန်းမာရေးစင်တာနှင့်ဆေးပညာ၏ယေးလ်တက္ကသိုလ်ကျောင်း, USA သို့ * E-mail ကို: [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]
နောက်ခံသမိုင်းနဲ့ရည်ရွယ်ချက်: ပျံ့နှံ့ခန့်မှန်းချက်အကြီးအကျယ်ပြတ်လပ်သော်လည်း, တစ်ဦးချင်းစီ၏စဉ်းစားဆင်ခြင်စရာအရေအတွက်ကို hypersexuality နှင့်ဆက်စပ်သောပြဿနာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကိုအမျိုးမျိုးပုံစံများ, ပြဿနာညစ်ညမ်းကြည့်ရှုသို့မဟုတ် compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေနှင့်အတူပြဿနာများကြုံတွေ့ရလိမ့်မည်။ ထို Diagnostic ၏ပဉ္စမထုတ်ဝေခြင်းနှင့်စာရင်းအင်းလက်စွဲ (DSM-5) အတွက်ပြင်ဆင်မှုမှာတော့ hypersexual ရောဂါပါဝင်ဘို့လယ်ပြင်၌-စမ်းသပ်ပြီးနှင့်ထည့်သွင်းစဉ်းစားခဲ့ပေမယ့်နောက်ဆုံးမှာကို manual အနေဖြင့်ဖယ်ထုတ်ထားခဲ့သည်။ ရောဂါ၏နိုင်ငံတကာခွဲခြားရေး (ICD-11) ၏ဒသမထုတ်ဝေမှုအတွက်ပြင်ဆင်မှုများတွင် Non-ပစ္စည်းဥစ္စာသို့မဟုတ်အပြုအမူစှဲဆွေးနွေးတင်ပြထားကြောင်းအဓိပ္ပာယ်နှင့်ခွဲခြားမှုနှင့် ပတ်သက်. မေးခွန်းများကိုအတူပါဝင်ဘို့စဉ်းစားလျက်ရှိသည်။
နည်းလမ်းများ: အဆိုပါ compulsive-obsessive နဲ့ဆက်စပ်ရောဂါအုပ်စုတစ်စုနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုမမှန်အုပ်စုတစ်စုလိင်နှင့်စပ်လျဉ်းမြားအပါအဝငျအမူအကျင့်စွဲလမ်းမှုကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပါပြီ။ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကစီစဉ်သုံးခု workgroup အစည်းအဝေးများစွဲလမ်းအလားအလာနှင့်အတူအွန်လိုင်းနှင့်အော့ဖ်လိုင်းအပြုအမူတွေကိုနှစ်ဦးစလုံး၏ထည့်သွင်းစဉ်းစားအတူ, အင်တာနက်-related အပြုအမူတွေနဲ့ပုံမမှန်စဉ်းစားပါပြီ။ ဤအအစည်းအဝေးများခုနှစ်တွင်ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ရဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဇုန်၏အများစုထံမှအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပါဝင်မှုကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ကောင်းစွာကိုယ်စားပြုနှင့်မည်သို့အကောင်းဆုံးအပြုအမူစှဲနှင့်ဆက်စပ် subsyndromal အပြုအမူတွေ conceptualize နှင့်သတ်မှတ်ပေးဖို့စဉ်းစား၏လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့ကြကြောင်းသေချာစေရန်ကူညီပေးဖို့ပါဝင်ခဲ့။
ရလဒ်များ: အဆိုပါ compulsive-obsessive နဲ့ဆက်စပ်ရောဂါအုပ်စုတွင်အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေဟာချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်ရောဂါအပိုင်းအတွက်တိကျတဲ့ရောဂါရှာဖွေ entity အဖြစ်အသိအမှတ်ပြုခံရသည့်အမြင်အစီရင်ခံခဲ့သည်။ ICD-11 အတွက်စွဲလမ်းမမှန်အုပ်စုသည်အွန်လိုင်းနှင့်အော့ဖ်လိုင်းနှစ်မျိုးစလုံးကိုသတ်မှတ်ထားတဲ့အတူလောင်းကစားဝိုင်းရောဂါနှင့်ဂိမ်းကစားခြင်းရောဂါများအတွက်စံအဆိုပြုလိုက်ပါတယ်။ အန္တရာယ်ရှိသောလောင်းကစားဝိုင်းနှင့်ဂိမ်းကစားဘို့အ Related အဓိပ္ပာယ်ကဤအဓိပ္ပာယ်သက်ဆိုင်တဲ့ရောဂါအခြေအနေများကနေနှစ်ဦးနှစ်ဖက်သီးသန့်ဖြစ်ခြင်းနှင့်အတူအဆိုပြုခဲ့ကြသည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေနှင့်ဆက်စပ်သောအဘယ်သူမျှမတိကျတဲ့အမူအကျင့်စွဲအဆိုပြုပြီးပါပြီနေစဉ်, "ကိုစှဲအပြုအမူကြောင့် Disorders" များအတွက်အမျိုးအစားအဆိုပြုပြီးပါပြီ, ဤသတ်မှတ်ရေးလိင်နှင့်ဆက်စပ်သောအပြုအမူစှဲရှာဖွေရေးမှာရန်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
ကောက်ချက်: အဆိုပါ ICD-11 ဖြစ်စဉ်ကိုသေးအပြီးသတ်မပါပေမယ့်, လိင်နှင့်စပ်လျဉ်းပြဿနာ, compulsive, အလွန်အကျွံနှင့် / သို့မဟုတ် hypersexual အပြုအမူတွေကို ICD-11 အတွက်ပါဝင်မှလေးစားမှုနှင့်ဆွေးနွေးလျက်ရှိသည်။ အဆိုပါစွဲလမ်းမမှန်အဖွဲ့ကတစ်ဦးကလက်ရှိအဆိုပြုထားအဖြေရှာတဲ့အမျိုးအစားလိင်နှင့်စပ်လျဉ်းစွဲလမ်းအပြုအမူတွေ၏ကျယ်ပြန့်အကွာအဝေးတစ်ခုရောဂါရှိသည်ဖို့ Clinician ခွင့်လိမ့်မယ်။ အများအပြား Clinician နှင့်အာမခံကုမ္ပဏီအပါအဝင်အုပ်စုများ၏ကြီးမားသောအရေအတွက်အားဖြင့်၎င်း ICD ၏အသုံးပြုမှုကိုပေးထား, လိင်နှင့်စပ်လျဉ်းစွဲလမ်းအပြုအမူတွေကိုဖမ်းယူတဲ့ရောဂါရှာဖွေ entity ၏တည်ရှိမှုသိသိသာသာလက်တွေ့နှင့်အများပြည်သူကျန်းမာရေးသက်ရောက်မှုရှိစေခြင်းငှါ။
အမူအကျင့်စွဲအဖြစ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရည်ရွယ်ချက်များအတွက်အင်တာနက် Out-of ထိန်းချုပ်မှုအသုံးပြုမှု?
Anna ŠEVČÍKOVÁ1 * လောနိတျမွို့ BLINKA1 နှင့် Veronika SOUKALOVÁ1
1Masaryk တက္ကသိုလ်, Brno, ချက်သမ္မတနိုင်ငံ * E-mail ကို: [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]
နောက်ခံသမိုင်းနဲ့ရည်ရွယ်ချက်: အလွန်အကျွံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအမူအကျင့်စွဲနေတဲ့ပုံစံအဖြစ်နားလည်သဘောပေါက်ထားရမည်ရှိမရှိအနေနဲ့ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောဆွေးနွေးငြင်းခုံရှိပါတယ် (Karila, Wéry, Weistein et al ။ , 2014) ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရည်ရွယ်ချက် (OUISP) အတွက်အင်တာနက် Out-of-ထိန်းချုပ်မှုကိုအသုံးပြုခြင်းသောအတိုင်းအတာကိုခွဲခြားစိတ်ဖြာရည်ရွယ်ပစ္စုပ္ပန်အရည်အသွေးလေ့လာမှုကိုကုသရာတွင်၎င်းတို့၏ OUISP ကြောင့်ဖြစ်နှင့်သောသူတို့တစ်ဦးချင်းစီအကြားအပြုအမူစွဲများ၏အယူအဆအားဖြင့်ရှုမြင်သုံးသပ်ကြနိုင်ပါသည်။
နည်းလမ်းများ: ကျနော်တို့ 21-22 နှစ်ပေါင်း (မာဂုပညာရှိ = 54 နှစ်) အသက် 34.24 သင်တန်းသားများနှင့်အတူ In-depth အင်တာဗျူးများပြုလုပ်ခဲ့သည်။ တစ်ဦးအကြောင်းအရာအလိုက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအသုံးပြုခြင်း, OUISP ၏လက်တွေ့ရောဂါလက္ခဏာတွေသည်းခံစိတ်နဲ့ဆုတ်ခွာလက္ခဏာတွေပေါ်အထူးအာရုံစိုက် (Griffiths က, 2001) နဲ့, အမူအကျင့်စွဲ၏စံသတ်မှတ်ချက်နှင့်အတူဆန်းစစ်ခဲ့ကြသည်။
ရလဒ်များ: အဆိုပါကြီးစိုးပြဿနာအပြုအမူ Out-of-ထိန်းချုပ်မှုအွန်လိုင်းညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု (OOPU) ဖြစ်ခဲ့သည်။ OOPU မှသည်းခံစိတ်တည်ဆောက်ခြင်းညစ်ညမ်းဝက်ဘ်ဆိုက်များတွင်သုံးစွဲအချိန်တစ်ခုတိုးပွားလာငွေပမာဏသကဲ့သို့ကောင်းစွာအဖြစ် non-deviant ရောင်စဉ်အတွင်းအသစ်နှင့်ပိုပြီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုရှာဖွေနေသူ့ဟာသူထင်ရှား။ ဆုတ်ခွာရောဂါလက္ခဏာတွေဟာ psychosomatic အဆင့်တွင်မိမိတို့ကိုယ်ကိုထင်ရှားခြင်းနှင့်အခြားရွေးချယ်စရာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာဝတ္ထုရှာဖွေနေ၏ပုံစံကိုယူ။ တဆယ်သင်တန်းသားများကိုစွဲသတ်မှတ်ချက်အပေါငျးတို့သမပြည့်စုံ။
လိင်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်အင်တာနက်ကိုအသုံးပြုဖို့သူအမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများအကြားလိင်စွဲလမ်း၏ ratings မှကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးအချက်များနှင့်ကျား, မများ၏အလှူငွေ
LI SHIMONI L.1, မောရိ DAYAN1 နှင့် Aviv WEINSTEIN * 1
အပြုအမူသိပ္ပံ, Ariel တက္ကသိုလ်, သိပ္ပံပန်းခြံ, Ariel, ဣသရေလအမျိုး၏ 1Department ။ * E-mail ကို: [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]
နောက်ခံသမိုင်းနဲ့ရည်ရွယ်ချက်: မဟုတ်ရင် hypersexual ရောဂါအဖြစ်လူသိများလိင်စွဲလမ်းအင်တာနက်ပေါ်မှာချက်တင်ခန်းနှင့်ကျဘာကိုသုံးပြီး, ညစ်ညမ်းစောင့်ကြည့်ပါဝင်သောအလွန်အကျွံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလေ့လာမှုမှာကျနော်တို့လိင်စွဲလမ်းဖို့ကြီးမားသောငါးကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးအချက်များနှင့်လိင်များ၏အလှူငွေစုံစမ်းစစ်ဆေးပါပြီ။
နည်းလမ်းများ: 267 ပါဝင်သူ (186 အထီးနှင့်အ 81 အမျိုးသမီး) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမိတ်ဖက်ရှာတွေ့အတွက်အသုံးပြုကြသည်အင်တာနက်ဆိုက်များမှစုဆောင်းခဲ့ကြသည်။ စမ်းသပ်ခြင်း (SAST) ကိုကြီးငါးညွှန်းကိန်းများနှင့်တစ်ဦးလူဦးရေဆိုင်ရာမေးခွန်းလွှာပြသည့်လိင်စွဲလမ်းအတွက်ဖြည့်သင်တန်းသားများ။
ရလဒ်များ: ယောက်ျားများသည် SAST တွင်မိန်းမများထက်ပိုမိုမြင့်မားသောရမှတ်များရှိကြသည် [t (1,265) = 4.1; p <0.001] ။ Regression analysis သည်အသိစိတ်ရှိမှုသည်ဆိုးကျိုးသက်ရောက်စေကြောင်းပြသခဲ့သည် (F (5,261) = 8.12; R = 0.36, p <0.01, β = -0.24) နှင့်ပွင့်လင်းမှုသည်အပြုသဘောဖြင့်ပါဝင်ခဲ့သည် (F (5,261) = 8.12, R = 0.36, p <0.01, β = လိင်စွဲရမှတ်များကှဲလှဲရန် 0.1) ။ Neuroticism သာအနည်းငယ်လိင်လိင်ရမှတ် (F (5,261) = 8.12, R ကို = 0.36, p = 0.085, β = 0.12) မှလှူဒါန်းခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့်လိင်နှင့်ပွင့်လင်းမှုတို့အကြားအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိခဲ့သည် (R2change = 0.013, F2 (1,263) = 3.782, p = 0.05) အမျိုးသမီးများအကြားလိင်အစွဲစွဲလမ်းမှု (β = 0.283, p = 0.01) ကိုပြသခဲ့သည်။
ဆွေးနွေးချက်နှင့်ကောက်ချက်: ဒီလေ့လာမှုကထိုကဲ့သို့သောအသိစိတ်နှင့်ပွင့်လင်း (မရှိခြင်း) လိင်စွဲလမ်းဖို့လှူဒါန်းခဲ့အဖြစ်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးအချက်များကြောင့်ပြသခဲ့သည်။ အဆိုပါလေ့လာမှုလည်းအမျိုးသမီးနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါအထီးအကြားလိင်စွဲလမ်း၏မြင့်မားရမှတ်များအဘို့ယခင်အထောက်အထားများကိုအတည်ပြုပြောဆိုသည်။ အမျိုးသမီးတွေအနက်ပွင့်လင်းလိင်စွဲဘို့ သာ. ကြီးမြတ် propensity နှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။ ဤရွေ့ကားကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးအချက်များလိင်စွဲဖွံ့ဖြိုးရန် propensity သူကိုခန့်မှန်း။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုအားဖြင့်အာရုံ - hypersexuality တစ်ဇီဝအမှတ်အသား?
Rudolf STARK1 * ONNO KRUSE1, TIM ဟု KLUCKEN2, JANA STRAHLER1 နှင့် Sina WEHRUM-OSINSKY1
1 ယုတ္တု Liebig တက္ကသိုလ် Giessen, Siegen, ဂျာမနီ၏ဂျာမဏီ2တက္ကသိုလ် * E-mail ကို: [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]
နောက်ခံသမိုင်းနဲ့ရည်ရွယ်ချက်: လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုအားဖြင့်တစ်ဦးကမြင့်မားသောအာရုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများအတွက်ဖြစ်နိုင်တဲ့အားနည်းချက်အချက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှု၏ပထမဦးဆုံးအယူအဆမြင့်မားတဲ့ရိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုနှင့်အတူဘာသာရပ်များထက်ပိုနိမ့်ရိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုနှင့်အတူဘာသာရပ်များထက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုအားဖြင့်ဆွဲဆောင်ကြသည်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒုတိယအယူအဆလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုအားဖြင့်ဒီအာရုံ, စွဲလမ်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအတွက်ညစ်ညမ်း၏ဥပမာပြဿနာအသုံးပြုမှုကိုဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်ကိုဖြစ်ခဲ့သည်။ ဤစကားမှန်ဖြစ်ယူဆရင်ထို့နောက်အာရုံကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုဘာသာရပ်များအတွက်ထက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲအတွက် သာ. ကြီးမြတ်ဖြစ်သင့်သည်။
နည်းလမ်းများ: ကျနော်တို့အတူတူပင်စမ်းသပ်အလုပ်လုပ်တဲ့သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ် (fMRI) ပါရာဒိုင်းနှစ်ခုစမ်းသပ်ချက်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ပထမဦးဆုံးစမ်းသပ်မှုမှာတော့ကျနော်တို့ 100 ကျန်းမာဘာသာရပ်များ (50 အမျိုးသမီး) ဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ ဒုတိယစမ်းသပ်မှုမှာတော့ကျနော်တို့ 20 ထိန်းချုပ်မှုဘာသာရပ်များ၏သူတို့အား 20 အထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲများ၏တုံ့ပြန်မှုနှိုင်းယှဉ်။ အဆိုပါစမ်းသပ်ဆဲတာဝန်ကြားနေသို့မဟုတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတစ်ခုခုကိုအကြောင်းအရာနှင့်ပုံကနေထွက်ခွာညာဘက်တည်ရှိခဲ့ပြီးသောနှစ်ခုလိုင်းများ, ညီတူညီမျှ aligned သို့မဟုတ်မခံခဲ့ရသလားဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ချက်လိုအပ်သည်။
ရလဒ်များ: ပထမဦးစွာရလဒ်များလိုင်း alignment ကိုတာဝန်အတွက်တုံ့ပြန်မှုကြိမ်အမှန်ပင်တစ်ဦးကြားနေ distractor ၏အမှု၌ထက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ distractor ၏အမှု၌ သာ. ကြီးမြတ်ကြောင်းကိုပြသပါ။ သို့သော်ရိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲ၏ရှေ့မှောက်တွင်တုံ့ပြန်မှုကြိမ်နှင့်အာရုံကြော activation ပုံစံအပေါ်တစ်စုံတစ်ရာသက်ရောက်မှုလျှင်သာသေးငယ်တဲ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
ကောက်ချက်: ကျွန်တော်တို့ရဲ့အယူအဆဆန့်ကျင်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုအားဖြင့်အာရုံသိသာထင်ရှားစွာပင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများအတွက်ထင်ရှားတဲ့အားနည်းချက်အချက်မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီတစ်ခါလည်းဒီရလဒ်ကျောတစ်ဦးမျက်နှာကျက်သက်ရောက်မှုမှခြေရာခံနိုင်ပါတယ်: လိင်တွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ရိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုသို့မဟုတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive အပြုအမူများ၏အာရုံကိုလွတ်လပ်သောဆွဲဆောင်။
အမေရိကန်စစ်ဘက်စစ်ပြန်အကြားဒီဂျစ်တယ် hookups, psychopathology နှင့်လက်တွေ့ hypersexuality နှင့်ဆက်စပ်လက်တွေ့သွင်ပြင်လက္ခဏာများ
ဂျက်ရဲ့အယ်လ်ဗေါင်း BAa, MARC N. POTENZA MD, PhD.a, b, c, Rani အေ HOFF ပါရဂူဘွဲ့။ , MPHa, ဃ, Steve Martino PhD.a, ဃ, နှင့် Shane ဒဗလျူ KRAUS, PhD.d
တစ်ဦးစိတ်ရောဂါကုသမှုဌာန, ဆေးပညာ၏ယေးလ်ကျောင်း, New Heaven, CT, အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ USAb ဦးစီးဌာန, စွဲမှုအပေါ်ကလေးလေ့လာမြစင်တာနှင့်အမျိုးသားရေးစင်တာနှင့်ပစ္စည်းအလွဲသုံးမှု, ဆေးပညာ, New Heaven, CT, USAc Connecticut စိတ်ကျန်းမာရေးစင်တာ, နယူး၏ယေးလ်ကျောင်း Heaven, CT, USAd VISN1 နယူးအင်္ဂလန် MIRECC, အမေရိကန်နိုင်ငံ * E-mail ကို Edith Nourse ရော်ဂျာသတိရအောက်မေ့စစ်ပြန်ဆေးရုံ, Bedford MA,: [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]
နောက်ခံသမိုင်းနဲ့ရည်ရွယ်ချက်: ဒစ်ဂျစ်တယ်လူမှုမီဒီယာပလက်ဖောင်းများ (ဥပမာ, Match, လူဖမ်းပွဲကြီးပြုလုပ်နေ, Grindr, Tinder) တစ်ဦးချင်းစီကြည်ကြည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေ့ဆုံဘို့မိတ်ဖက်ကိုရှာဖွေနိုင်သည့်မှတဆင့်ဆိုင်များတွင်သည်။
နည်းလမ်းများ: အမေရိကန်စစ်စစ်ပြန်ပြန်လာ Post-ဖြန့်ကျက်စစ်တပ်၏နမူနာကိုသုံးပြီးကျနော်တို့ psychopathology ၏လက်တွေ့ဆက်စပ်မှုနှင့်အတူရှာကြံဒစ်ဂျစ်တယ်လိင်, သတ်သေ ideation နှင့်လိင်မှတဆင့်ကူးစက်သောရောဂါကူးစက်မှု (အက်စ်တီအိုင်) ၏ပျံ့နှံ့မှုအကဲဖြတ်။ အထူးသတဲ့အခြေခံတယ်လီဖုန်းအင်တာဗျူးနှင့်နောက်ဆက်တွဲအင်တာနက်-based စစ်တမ်းမှအချက်အလက်များကိုသုံးပြီးကျနော်တို့ 283 အမေရိကန်တိုက်ခိုက်ရေးစစ်ပြန်တစ်အမျိုးသားရေးနမူနာအတွက်ဒစ်ဂျစ်တယ်လူမှုရေးမီဒီယာပလက်ဖောင်းကနေတဆင့်လိင်မှုဆိုင်ရာ Partners ၏ပျံ့နှံ့မှုအကဲဖြတ်။
ရလဒ်များ: စစ်ပြန်များထဲတွင်ယောက်ျား၏ 35.5% နှင့်အမျိုးသမီး၏ 8.5% ဟာသူတို့ရဲ့တသက်တာမှာလိင်များအတွက်တစ်စုံတစ်ဦးကဖြည့်ဆည်းဖို့ဒစ်ဂျစ်တယ်လူမှုမီဒီယာကိုအသုံးပြုတော်မူပြီးမှကဖော်ပြခဲ့သည်။ မသောသူတို့အားနှိုင်းယှဉ်ပါကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမိတ်ဖက် (DSMSP +) ကိုရှာဖွေဒစ်ဂျစ်တယ်လူမှုမီဒီယာကိုအသုံးပြုတော်မူပြီးမှသတင်းပို့ခဲ့သူစစ်ပြန် (DSMSP-) ပိုနုပျိုဖြစ်ဖွယ်ရှိအထီးနှင့်အမရိန်းရှိကြ၏။ sociodemographic variable တွေကိုများအတွက်ချိန်ညှိပြီးနောက် DSMSP + status ကိုသိသိသာသာ, Post-စိတ်ထိခိုက်စိတ်ဖိစီးမှုရောဂါ (OR = 2.26 နှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည် p = 0.01), အိပ်မပျော် (OR = 1.99, p = 0.02), စိတ်ကျရောဂါ (OR = 1.95, p = 0.03), လက်တွေ့ hypersexuality (OR = 6.16, p <0.001), သတ်သေ ideation (OR = 3.24, p = 0.04) နှင့်တစ်ဦးကာလသား (OR = 1.98 များအတွက်ကုသမှု, p = 0.04) ။
ကောက်ချက်: အမေရိကန် Post-ဖြန့်ကျက်စစ်ရေးစစ်ပြန်တစ်အမျိုးသားရေးနမူနာများအနက် DSMSP + အပြုအမူတွေကိုအထူးသဖြင့်အထီးစစ်ပြန်များတို့တွင်ပျံ့နှံ့ခဲ့ကြသည်။ တွေ့ရှိချက်များကိုလည်း DSMSP အတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံသူကိုအထူးသဖြင့်စစ်ပြန်အတွက် + အပြုအမူတွေကိုနှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်စိတ်ကျန်းမာရေးချိန်းစဉ်အတွင်းပြရပါမည်နှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလေ့အကျင့်၏အကျိုးကျေးဇူးများအပေါ်အကြံပေးကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။
compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ: prefrontal နှင့် limbic အသံအတိုးအကျယ်နှင့် interaction က
Valerie VOON1, CASPER SCHMIDT1, Laurel MORRIS1, Timo KVAMME1, Paula HALL2 နှင့် THADDEUS BIRCHARD1
စိတ်ရောဂါကုသမှု, PsychotherapyE-mail ကိုအဘို့အကင်းဘရစ်, ကင်းဘရစ်, UK1 ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းကောင်စီတက္ကသိုလ်2ဦးစီးဌာန: [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]
နောက်ခံသမိုင်းနဲ့ရည်ရွယ်ချက်: compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကို (CSB) အတော်လေးဘုံနှင့်အသိသာပုဂ္ဂိုလ်ရေးနှင့်လူမှုရေးကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်ဆက်စပ်ဖြစ်ကြသည်။ အဆိုပါအခြေခံ neurobiology နေဆဲညံ့ဖျင်းနားလည်သဘောပေါက်ထားပါသည်။ ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုဦးနှောက် volumes ကိုကို examine နှင့်ကိုက်ညီကျန်းမာစေတနာ့ဝန်ထမ်း (HV) နဲ့နှိုင်းယှဉ် CSB အတွက်ပြည်နယ် functional ဖြစ်စေဆက်သွယ်မှုအနားယူ။
နည်းလမ်းများ: ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ MRI (MPRAGE) ဒေတာ 92 ဘာသာရပ်များ (23 CSB အထီးနှင့်အ 69 အသက်အရွယ်-လိုက်ဖက်အထီး HV) တွင်စုဆောင်း voxel-based morphometry သုံးပြီးဆန်းစစ်ခဲ့ကြသည်။ Multi-ပဲ့တင်သံပြို sequence ကိုနှင့်လွတ်လပ်သောအစိတ်အပိုင်းများကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ (ME-နှင့် ICA) သုံးပြီး data ကို 68 ဘာသာရပ်များ (23 CSB ဘာသာရပ်များနှင့် 45 အသက်အရွယ်-လိုက်ဖက် HV) တွင်ကောက်ယူခဲ့ကြပြည်နယ်အလုပ်လုပ်တဲ့ MRI အနားယူ။
ရလဒ်များ: CSB ဘာသာရပ်များသည်ဘယ်ဘက် amygdala မီးခိုးရောင်အမှုန်ပမာဏကိုပြသခဲ့သည် (သေးငယ်သည့်ပမာဏကိုတည့်မတ်ပေးသည်၊ Bonferroni သည် P <0.01 ကိုချိန်ညှိခဲ့သည်) နှင့် HV နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ဘယ်ဘက် amygdala မျိုးစေ့နှင့်နှစ်နိုင်ငံ dorsolateral prefrontal cortex အကြားကျဆင်းနေသည့်အခြေအနေနှင့်ဆက်သွယ်မှုလျှော့ချခြင်း (ဦး နှောက်တစ်ခုလုံး၊ FWE P <0.05) ကိုစုစည်းထားသည်။ ။
ကောက်ချက်: CSB စိတ်ခွန်အားနိုး salience နှင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုအပြောင်းအလဲနဲ့နှင့် prefrontal ထိန်းချုပ်မှုစည်းမျဉ်းများနှင့် limbic ဒေသများအကြားချို့ယွင်း functional ဖြစ်စေဆက်သွယ်မှုမှသက်ဆိုင်ရာ limbic ဒေသများတွင်မြင့်မားသော volumes ကိုနဲ့ဆက်စပ်နေပါတယ်။ အနာဂတ်လေ့လာမှုများကဤတွေ့ရှိချက်အပြုအမူတွေစတင်ခြင်း predate သို့မဟုတ်အပြုအမူ၏အကျိုးဆက်များဖြစ်ကြောင်းအန္တရာယ်အချက်များဖြစ်ကြသည်ရှိမရှိစုံစမ်းစစ်ဆေးရန် longitudinal အစီအမံအကဲဖြတ်ရန်ရည်ရွယ်သင့်တယ်။
MAŁGORZATA WORDECHA * 1, မာတေယူချ် WILK1, EWELINA KOWALEWSKA2, MACIEJ SKORKO1 နှင့်မာတေယူချ် GOLA1,3
စိတ်ပညာ၏ 1Institute, သိပ္ပံပိုလန်အကယ်ဒမီ, ဝါဆော, လူမှုရေးသိပ္ပံနှင့်လူ့၏ပိုလန် 2University, ဝါဆော, ကွန်ပျူတာအာရုံကြောသိပ္ပံ, ဦးနှောက်ကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးသောကွန်ပျူတာ Institute ကကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်, San Diego မှတက္ကသိုလ် San Diego မှ,, CA, USA သို့ * E-mail ကိုများအတွက်ပိုလန် 3Swartz စင်တာ [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]
နောက်ခံသမိုင်းနဲ့ရည်ရွယ်ချက်: ကျနော်တို့ compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေများအတွက်ကုသမှုရှာကြံအထီးအကြားတူညီခြင်းနှင့်မတူကွဲပြားမှုအကဲဖြတ်ရန်နှင့်စစ်မှန်သောဘဝဒေတာတွေနဲ့ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုရိပ်မိအကြောင်းပြချက်တစ်ခုစာပေးစာယူကိုအတည်ပြုရန်ချင်တယ်။
နည်းလမ်းများ: 9-ရက်သတ္တပတ်ကြာမြင့်စွာဒိုင်ယာရီအကဲဖြတ်ခြင်းဖြင့် လိုက်. , ကျနော်တို့ 22-37 နှစ်ပေါင်းအသက်အရွယ်အတွက် 31.7 ယောက်ျားနှင့်အတူ Semi-ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်မှုအင်တာဗျူး (SD က = 4.85 M က = 10) ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အင်တာဗျူးစဉ်အတွင်းကျွန်တော်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာယန္တရားများနှင့်လူမှုရေးဆက်ဆံရေးအခန်းကဏ္ဍအခြေခံ, CSB လက္ခဏာတွေဝိသေသဖုံးလွှမ်းကြ၏။ မေးခှနျးက '' နည်းလမ်းများအသုံးပြုခြင်း, ငါတို့အရည်အသွေးဒေတာမှန်ကန်ကြောင်းအတည်ပြုခြင်းနှင့်အပြင်ကျနော်တို့ CSB ၏စစ်မှန်သောဘဝပုံစံများဆနျးစစျဖို့ရှည်လျားဒိုင်ယာရီအကဲဖြတ်-ရက်သတ္တပတ် conducted10 ။
ရလဒ်များ: အားလုံးဘာသာရပ်များညစ်ညမ်းအသုံးပြုခြင်းနှင့်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ၏ပြင်းထန်မှု၏အဆင့်မြင့်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့သည်။ သူတို့ကအစစိုးရိမ်စိတ်များတိုးမြှင့်အဆင့်ကိုတင်ပြခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုခြင်းနှင့်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေစိတ်ဓါတ်များနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုစည်းမျဉ်းများအတွက်တာဝန်ထမ်းဆောင်ကြောင်းကြေညာခဲ့ပါတယ်။ Impulse ၏စည်းကမ်းချက်များ၌အမြင့်ဆုံးမတူကွဲပြားမှု, လူမှုရေးအရည်အချင်းကိုနှင့် CSB အခြေခံသည်အခြားစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာယန္တရားရှိခဲ့သည်။ ဒိုင်ယာရီအကဲဖြတ်အတွက်စုဆောင်းဖို့ဒေတာ (ထိုကဲ့သို့သောအကြိမ်ရေသို့မဟုတ်မူးရူးညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအဖြစ်, dyadic လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှု) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေနဲ့အစပျိုးခြင်း၏ပုံစံများအတွက်မြင့်မားတဲ့မတူကွဲပြားမှုကိုထုတ်လေ၏။ ဒါဟာအားလုံးဘာသာရပ်များတဆုတ်ယုတ်မော်ဒယ် fit မှမဖြစ်နိုင်တာဖြစ်ခဲ့သည်။ အဲဒီအစားအသီးအသီးဘာသာရပ်အများစုလျော့ကျအစပျိုးခြင်းနှင့်ဆက်စပ်မရ CSB ၏ခန့်မှန်း၏သူ့ကိုယ်ပိုင်ပုံစံရှိခဲ့ပါတယ်။
ဆွေးနွေးချက်နှင့်ကောက်ချက်: ပြဿနာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအလားတူအစီအစဉ်နှင့်လိုက်ပါသွားစိတ်ခံစားမှုနဲ့အတှေးအနေသော်လည်း CSB တစ်သားတည်းဖြစ်တည်ခြင်းစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာယန္တရားများရှိသည်ဖို့ပုံရသည်။ longitudinal ဒိုင်ယာရီအကဲဖြတ်၏တစ်ဦးချင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာညစ်ညမ်းအသုံးပြုခြင်းနှင့်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ၏တစ်ဦးချင်းစီခန့်မှန်းမြင့်မားအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲထုတ်လေ၏။ ထို့ကြောင့်ထိုတစ်ဦးချင်းစီအီတလီတို့ဂရုတစိုက်ထိရောက်သောကုသမှုပေးလက်တွေ့ setting တွင်လေ့လာခဲ့ခံရဖို့ရှိသည်။
BEÁTABŐTHE1,2 * ISTVÁNTÓTH-KIRÁLY1,2, Agnes ZSILA1,2, Mark ဃ GRIFFITHS3, ZSOLT DEMETROVICS2 AND Gabor OROSZ2,4
စိတ်ပညာ၏ 1Doctoral ကျောင်း, EötvösLorándတက္ကသိုလ်, ဘူဒါပက်, စိတ်ပညာ၏ဟန်ဂေရီ 2Institute, EötvösLorándတက္ကသိုလ်, ဘူဒါပက်, ဟန်ဂေရီ 3Psychology ဦးစီးဌာန, ဗြိတိန်နိုင်ငံ Nottingham Trent တက္ကသိုလ်, ဗြိတိန်နိုင်ငံ Nottingham, သိမှုအာရုံကြောသိပ္ပံနှင့်စိတ်ပညာ၏ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း 4Institute, သဘာဝသိပ္ပံအဘို့အဟနျဂရေီသုတေသနစင်တာ, ဘူဒါပက်, ဟန်ဂေရီ * E-mail ကို: [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]
နောက်ခံသမိုင်းနဲ့ရည်ရွယ်ချက်: ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကောင်းဆုံးအသိပညာမရှိစကေးတစ်ခုကျယ်ပြသီအိုရီနောက်ခံပေါ်တွင်အခြေခံသောပြဿနာညစ်ညမ်းစားသုံးမှုအကဲဖြတ်ခိုင်မာတဲ့ psychometric ဂုဏ်သတ္တိများနှင့်အတူရှိနေသည်။ ပြဿနာညစ်ညမ်းစားသုံးမှုအကဲဖြတ်ရန်နိုငျကွောငျး Griffiths` (2005) ခြောက်လုံး-အစိတ်အပိုင်းစွဲမော်ဒယ်များ၏အခြေခံပေါ်မှာ; ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှု၏ရည်မှန်းချက်တိုတောင်းတဲ့စကေး (PPCS ပြဿနာညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစားသုံးမှုစကေး) ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ဖြစ်တယ်။
နည်းလမ်းများ: နမူနာ 772 ဖြေဆိုသူ (390 အမျိုးသမီးဖွဲ့စည်း; မာဂုပညာရှိ = 22.56, SD = 4.98 နှစ်) ။ items ဖန်ဆင်းခြင်း Griffiths က '' မော်ဒယ်များ၏အစိတ်အပိုင်းများ၏အဓိပ္ပာယ်ပေါ်အခြေခံပြီးခဲ့သည်။
ရလဒ်များ: တစ်ဦးက confirmatory အချက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာထားတဲ့ 18-item ကိုဒုတိယယူမှုကိုအချက်ဖွဲ့စည်းပုံမှာမှဦးဆောင်ထွက်သယ်ဆောင်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ PPCS များ၏ယုံကြည်စိတ်ချရကောင်းသည်နှင့်တိုင်းတာခြင်းလျော့ပါးသွားမည်ဖြစ်သလိုတည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ sensitivity ကိုနှင့်တိကျသောတန်ဖိုးများကိုထည့်သွင်းစဉ်းစား, ငါတို့ပြဿနာနှင့် Non-ပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများအကြားခွဲခြားထားတဲ့အကောင်းဆုံး cut-off ဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။ ပစ္စုပ္ပန်နမူနာခုနှစ်, ညစ်ညမ်းစားသုံးသူများ 3.6% မှာအန္တရာယ်အုပ်စုပိုင်။
ဆွေးနွေးချက်နှင့်နိဂုံး: အဆိုပါ PPCS လည်းခိုင်မာတဲ့ psychometric ဂုဏ်သတ္တိများရှိကြောင်းခိုင်မာတဲ့သီအိုရီနောက်ခံနှင့်အတူပြဿနာညစ်ညမ်းစားသုံးမှုတစ် multidimensional စကေးဖြစ်ပါသည်။
BEÁTABŐTHE1,2† * ISTVÁNTÓTH-KIRÁLY1,2, ZSOLT DEMETROVICS2 AND Gabor OROSZ2,3 †
စိတ်ပညာ၏ 1Doctoral ကျောင်း, EötvösLorándတက္ကသိုလ်, ဘူဒါပက်, စိတ်ပညာ၏ဟန်ဂေရီ 2Institute, EötvösLorándတက္ကသိုလ်, ဘူဒါပက်, သိမှုအာရုံကြောသိပ္ပံနှင့်စိတ်ပညာ၏ဟန်ဂေရီ 3Institute, ဟနျဂရေီသုတေသနသဘာဝသိပ္ပံစင်တာ, ဘူဒါပက်, ဟန်ဂေရီ† Authors ဤသုတေသနမှအညီအမျှလှူဒါန်းခဲ့သည်။ * E-mail ကို: [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]
နည်းလမ်းများ: လေ့လာမှု 1 (N1 = 769) ခုနှစ်, လိင်အတွေးအခေါ်စကေးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအသက်တာ၏ပျော့အကြောင်းကိုယုံကြည်ချက်တိုင်းတာပေးသောဖန်တီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ လေ့လာမှု2နှင့်လေ့လာ3(N2 = 315, N3 = 378) ခုနှစ်တွင်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာညီမျှခြင်းမော်ဒယ် (SEM) ပြဿနာညစ်ညမ်းစားသုံးမှု, ဆက်ဆံရေးဟာစိတ်ကျေနပ်မှုနှင့်လိင်အတွေးအခေါ်ယုံကြည်ချက်များအကြားဆက်ဆံရေးပုံစံများကိုသိရှိနိုင်ဖို့အသုံးပြုခဲ့သည်။
ရလဒ်များ: confirmatory အချက်ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်း (လေ့လာမှု 1) ခိုင်မာတဲ့ psychometric ဂုဏ်သတ္တိများသရုပ်ပြခဲ့သည်။ အဆိုးနှင့်အတိုက်ရိုက်ပြဿနာညစ်ညမ်းစားသုံးမှုနှင့်ဆက်စပ်သောစဉ်တစ်ခုချင်းစီကိုဆန်းစစ်မော်ဒယ် (လေ့လာမှု2နှင့်လေ့လာ 3), လိင်အတွေးအခေါ်ယုံကြည်ချက်အပြုသဘောနှင့်တိုက်ရိုက်ဆက်ဆံရေးဟာစိတ်ကျေနပ်မှုနှင့်ဆက်စပ်သောဖြစ်ကြောင်းပြသခဲ့သည်။ ထို့အပြင်ပြဿနာညစ်ညမ်းစားသုံးမှုနှင့်ဆက်ဆံရေးဟာစိတ်ကျေနပ်မှုဆက်စပ်ကြဘူး။ ထို့ကြောင့်ပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုလိင်ဆက်ဆံအတွေးအခေါ်ယုံကြည်ချက်တွေနဲ့ဆက်ဆံရေးဟာစိတ်ကျေနပ်မှုအကြားဆက်ဆံရေးပြေလည်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးရန်ခဲ့ပါဘူး။
ဆွေးနွေးချက်နှင့်နိဂုံး: ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရလဒ်များ၏အလငျး၌, ပြဿနာညစ်ညမ်းစားသုံးမှုနှင့်ဆက်ဆံရေးဟာစိတ်ကျေနပ်မှုအကြားအနုတ်လက္ခဏာဆက်ဆံရေးဟာတစ်ဘုံပိုင်းခြေအဖြစ်လိင်အတွေးအခေါ်စဉ်းစားခြင်းဖြင့်ပျောက်ကွယ်သွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
Hypersexuality နှင့်ဂျာမန်အထီးအသိုင်းအဝိုင်းနမူနာအတွက် pedophilic လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျိုးစီးပွားများနှင့်ရာဇဝတ်သားအပြုအမူတွေနှင့်အတူ၎င်း၏အသင်းအဖွဲ့
DR ။ ဒံ TURNER1,2* DR ။ VERENA KLEIN2, Prof ။ DR ။ အလက်ဇန်းဒါး SCHMIDT3 နှင့် Prof ။ DR.PEER BRIKEN2
: စိတ်ရောဂါကုသမှုနှင့် Psychotherapy, တက္ကသိုလ် Medical Center မှ Mainz, လိင်သုတေသနနှင့်ဥပဒေရေးရာစိတ်ရောဂါကုသမှုများအတွက်ဂျာမဏီ 1Institute, တက္ကသိုလ် Medical Center မှဟမ်းဘတ်-Eppendorf, စိတ်ပညာ၏ဂျာမဏီ 2Department, ဥပဒေရေးရာစိတ်ပညာ, Medical School ကျောင်းတွင်ဟမ်းဘတ်, ဂျာမနီ * E-mail ကို၏ 3Department [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]
နောက်ခံသမိုင်းနဲ့ရည်ရွယ်ချက်: Hypersexuality, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲသို့မဟုတ် hypersexual ရောဂါမှုများထပ်တလဲလဲနှင့်ပြင်းထန်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကူးယဉ်, သွေးသားဆန္ဒရမ္မက်သို့မဟုတ်အခြားအရေးကြီးသော (Non-လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ) ရည်မှန်းချက်များသို့မဟုတ်တာဝန်ဝတ္တရား (Kafka, 2010) နဲ့စွက်ဖက်သည်ဟုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကိုဖော်ပြတယ်။ ပေမယ့် hypersexuality မကြာသေးမီကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြစ်မှုကျူးလွန်သူစာပေအတွက်အများကြီးထည့်သွင်းစဉ်းစားလက်ခံရရှိခဲ့သည်ဆဲအများကြီးမ hypersexuality ၏ပျံ့နှံ့မှုနှင့်ယေဘုယျလူဦးရေအတွက် pedophilic လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျိုးစီးပွားများနှင့်ရာဇဝတ်သားအပြုအမူတွေရန်၎င်း၏ကြားဆက်ဆံရေးနှင့် ပတ်သက်. လူသိများသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြစ်မှုကျူးလွန်သောတဦးတည်းအရေးကြီးသောအန္တရာယ်အချက်, အဖြစ်ရှုမြင်သည်။
နည်းလမ်းများ: အွန်လိုင်းမှလေ့လာမှုမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့သူ 8,718 ဂျာမန်အမျိုးသားများပါဝင်သည်ဟုကြီးမားတဲ့အသိုင်းအဝိုင်းနမူနာတှငျကြှနျုပျတို့စုစုပေါင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆိုင်များတွင် (TSO) မေးခွန်းလွှာကို အသုံးပြု. Self-အစီရင်ခံ hypersexual အပြုအမူတွေကိုအကဲဖြတ်ခြင်းနှင့် Self-အစီရင်ခံ pedophilic လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျိုးစီးပွားနှင့် antisocial အပြုအမူတွေနှင့်အတူ၎င်း၏အသင်းအဖွဲ့အကဲဖြတ်။
ရလဒ်များ: ယေဘုယျအားတစ်ပတ်လျှင် TSO ယုတ် 3.46 (SD က = 2.29) နှင့်သင်တန်းသားများကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကူးယဉ်နှင့်အတူ (SD က = 45.2) တစ်နေ့လျှင်ပျှမ်းမျှ 38.1 မိနစ်သုံးစွဲခြင်းနှင့်တိုကျတှနျးထားခဲ့ပါတယ်။ စုစုပေါင်း 12.1 ပါဝင်သူများထဲမှ% (ဎ = 1,011) TSO ≥7(Kafka, 1991) ၏ဂန္ထဝင် cut-off တန်ဖိုးအရသိရသည် hypersexual အဖြစ်ခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။ Hypersexuality (TSO ≥ 7) အဖြစ် TSO အကြွင်းမဲ့အာဏာတန်ဖိုးများကိုအပြုသဘောကလေးညစ်ညမ်း, Self-အစီရင်ခံယခင်ပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့်အကြမ်းဖက်ပြစ်မှုများ၏စားသုံးမှုသော်လည်းမဆက်သွယ်ရလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖောက်ပြန်တဲ့သူနှင့်အတူကလေးများပါဝင်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကူးယဉ်ဆက်နွယ်နေကြောင်းခဲ့ကြသည်။
ကောက်ချက်: hypersexuality လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြစ်မှုကျူးလွန်သူနမူနာများတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြစ်မှုကျူးလွန်သောအရေးပါသောအန္တရာယ်အချက်အဖြစ်ရှုမြင်သော်လည်း, ဒီဆက်ဆံရေးဟာကအနည်းဆုံးအဆက်အသွယ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြစ်မှုကျူးလွန်သောအသိုင်းအဝိုင်းနမူနာပုံတူမဖြစ်တော့ဘူးလို့မရပါ။ မည်သို့ပင်ဆိုစေလက်တွေ့လက်တွေ့တွင် antisocial သို့မဟုတ် pedophilic အပြုအမူတွေဖေါ်ပြခြင်းအမျိုးသားများတွင် hypersexual တစ်ဦးချင်းစီနှင့်အပြန်အလှန် hypersexuality အတွက်ပြစ်မှုဆိုင်ရာအပြုအမူတွေနဲ့ pedophilic စိတ်ကူးယဉ်ထားတဲ့အကဲဖြတ်စဉ်းစားရပါမည်။